(No. 67 , October 20, 2020)
၁။ အစိုးရတပ် အရာရှိ ၂ ဦးကို RCSS/SSA မှ ဖမ်းဆီး၊ ရိုက်နှက် ဟု တပ်မတော်ထုတ်ပြန်
၂။ KIA ဖမ်းသွားတဲ့ ရွှေကူက သုံးဦး ပြန်လွတ်လာ
၃။ တပ်မတော် ဖမ်းဆီးခဲ့သည့် ကျောက်တော် ဒေသခံတဦး ဒဏ်ရာများဖြင့် ဆေးကုနေရ
၄။ KBC ဥက္ကဌ ညှိနှိုင်းပေးမှုကြောင့် တပ်မတော်နှင့် KIO အပစ်ရပ်လက်မှတ်ထိုးတော့မည်ဟူသော သတင်းမှား
၅။ မြောင်းမြမြို့တွင် ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ (KPP) ဝန်းရံသူများက အင်အား တစ်သောင်းကျော်ဖြင့် လှည့်လည်
၆။ ရေးမြို့နယ်အတွင်း မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ (MUP) အား ထောက်ခံဝန်းရံသူ ထောင်နှင့်ချီ၍ အင်အားပြလှည့်လည်
၇။ ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းတွင် ရာဘာခြံလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရန်အခက်တွေ့
၈။ ဦးဂါရွာသူအမှု စစ်တရားရုံးဖွဲ့၍ စစ်ဆေးနေဟု တပ်မတော်ပြော
၉။ လူသတ်မှုကျူးလွန်သူ ၃ ဦးကို KIO က အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ချမှတ်
၁၀။ ပလက်ဝတွင် လုံခြုံရေးအားနည်းကြောင်း အကြံပြုခဲ့ဟု တပ်မတော်ပြော
၁၁။ PNO ပါတီက တောင်ကြီးမြို့တွင် ဒုတိယအကြိမ် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး အင်အားပြ လှည့်လည်
၁၂။ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးရရှိရေး ကျောက်မဲစစ်ဒဏ်သင့်လူငယ်နှင့်ရပ်မိရပ်ဖများ တောင်းဆို
၁၃။ ဒေသခံ ကျောင်းအုပ်ဆရာတစ်ဦးကို KNU မှ အဓမ္မဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း တပ်မတော်ထုတ်ပြန်၊ အဓမ္မဖမ်း ဆီးခြင်းမရှိဟု KNU ပြော
၁၄။ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲ နိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ SNLD ဥက္ကဋ္ဌ ပြော
၁၅။ မောင်တောနဲ့ ပေါက်တောမှာ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်နိုင်ဖို့ ပြည်နယ်ကော်မရှင် ကြိုးပမ်း
၁၆။ တိုင်းရင်းသား ပြည်နယ်များတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်မှု မရှိခြင်းက ကော်မရှင်၏ သမာသမတ်ရှိမှု၊ ပွင့်လင်းမြင် သာရှိမှုနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုတို့ကို မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ကြောင်း NBF ထုတ်ပြန်
၁၇။ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် မွန်ပြည်သစ်နယ်မြေအတွင်း မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ပြန်လည်ဖြေလျှော့ပေး
၁၈။ ပူတာအိုတွင် KSPP ပါတီဝန်းရံသူများ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် လှည့်လည်အင်အားပြ
၁၉။ လွိုင်ကော်မြို့နယ်တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသား အဖွဲ့ချုပ် ( PNO ) ပါတီ အင်အား ၁၅၀၀ ဖြင့်လှည့်လည်မဲဆွယ်
၂၀။ ပလက်ဝတွင် ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်ရန် အကြံပြုသော်လည်း UEC က ကျင်းပချင်သဖြင့် တပ်မတော်ဘက်က ညှိနှိုင်း ပေးခဲ့ရဟု တပ်မတော် ရှင်းလင်း
၂၁။ မြဝတီနယ်စပ် အမှတ် ၂ တံတားမှ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှု ရပ်ဆိုင်းထား၍ ဒေသတွင်း စားသုံးကုန်ဈေးကွက်အပေါ် ရိုက်ခတ် မှုရှိနေ
၂၂။ မွန်ပါတီမဲအောင်နိုင်ရေး ပငလူငယ်မျိုးဆက်သစ်စက်ဘီးအဖွဲ့ လှည့်လည်အင်အားပြ
၂၃။ သက်ငယ်မုဒိန်းကျူးလွန်ရန်အားထုတ်သူကို ထောင်ဒဏ် (၁၀)နှစ် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်
၂၄။ ကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေတဲ့ ခဲသတ္တုသန့်စင်စက်ရုံတည်ဆောက်မှုကို ပြန်လည်သုံးသပ်သွားမည်ဟု KySDP ၏ ကိုယ်စား လှယ်လောင်းကတိပေး
၂၅။ ကချင်ပြည်နယ်မြို့နယ်နှစ်ခုတွင် တက်သုတ်ရိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ရသည့် တိုင်းလိုင် (ရှမ်းနီ) အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ ၏ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး
၂၆။ စစ်အစိုးရလက်ထက် က သျှမ်းဘာသာဖြင့် ရုပ်သံမှာ သတင်းကြေညာသူ(သို့) ပြည်သူ့ပြဿနာကို ရှေ့ထွက် ဖြေရှင်း ပေးချင်သူ နန်းဆာဥ
၂၇။ မော်လမြိုင်သို့ အခြားဒေသမှ ရောက်လာပြီး မဲပေးရန် ပုံစံ ၃(က) ဖြင့် လျှောက်ထားသူ ၂၆၀၀ နီးပါး ရှိ
၂၈။ တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ ယုံကြည်မှုရှိသည့်အတွက် NCA စာချုပ် ဖြစ်ပေါ်လာသော်လည်း လက်ရှိတွင် ယုံကြည်မှုပျက်ပြား ရန် အသေးစိတ်ကအစ အငြင်းပွားမှုများဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း တပ်မတော်ဘက်က ပြောကြား
၂၉။ ဖမ်းဆီးခံ အမ်း ဒေသခံ ၁၄ ဦး၏ အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ကြောင်း မိသားစုများက ပြော
၃၀။ မြစ်ကြီးနား၌ ၁ လအတွင်း ခိုးမှု၊ လုယက်မှုကျူးလွန်သူ ၅၀ ဖမ်းမိ၊ လူငယ် အများဆုံးပါဝင်
၃၁။ ကရင်ပြည်နယ်တွင် KNDP နှင့် NLD ပါတီတို့ စည်းရုံးရေး အားကောင်းနေ
၃၂။ ဖမ်းဆီးခံရသည့်ရဲတပ်သားအား ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်ချမှတ်ခဲ့မှု ၁ လကျော်ကြာမှသိရဟု မိသားစု ပြော
၃၃။ မိုင်းဆတ်တွင် ငွေကျပ် သန်းပေါင်း ၂ သောင်းခွဲကျော် တန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ဆေးများ ဖမ်းမိ
၃၄။ တောင်ဇလပ်ပန်းနှင့် ချင်းသစ်ခွတို့အား ခူးယူဖျက်ဆီးပါက အရေးယူတော့မည်
၃၅။ ဘူးသီးတောင်တွင် မွတ်ဆလင် ကလေးငယ်နှစ်ဦးသေဆုံးမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်ဆောင်နေကြောင်း တပ်မတော်ပြော
၃၆။ ဘီယာကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းဆောင်အလုံအလောက်မရှိသေး
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲမြို့နယ် တောင်ရှည်ကျေးရွာ အနီးတွင် အစိုးရ တပ်မတော်သား ၂ဦးကို RCSS/SSA မှ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခဲ့သည် ဟု တပ်မတော် သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေး က ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ အောက်တိုဘာ ၆ ရက် က သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ၊ သျှမ်းပြည်တပ်မတော်(RCSS/SSA) မှ အစိုးရတပ်မတော် ၂ ဦးကို ဖမ်းဆီးခေါ် ဆောင်သွားခဲ့ပြီး အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်မှသာ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်ဟု ယနေ့ အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက် က တပ်မတော် သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးမှ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး RCSS/SSA မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး စဝ်အုမ်ခေး က “ ဒီသတင်း ကျနော် မကြား သိရသေးဘူး။ ကျနော့်ဆီမရောက်ရှိလာသေးဘူး”ဟု သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကို ပြောသည်။ ယခုရက်ပိုင်း အစိုးရ တပ်မတော် ဘက်မှ RCSS/SSA ကို မဟုတ်မမှန် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်အပေါ် တွေ့ရှိကြောင်း၊ တပ်မတော် အနေဖြင့် အမှန်တကယ် ငြိမ်းချမ်းရေး လိုလားပါက ယခုကဲ့သို့ မလုပ်သင့်ကြောင်းလည်း ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အုမ်ခေး ကဆိုသည်။ “ ကျနော်တို့ နယ်မြေ သတ်မှတ်ချက်တွေ သဘောတူညီခဲ့တာ ဘာမှမရှိခဲ့ဘူး။ အကြောင်းတခုမဟုတ်တခု ရှာပြီးပြော လေ့ရှိတယ်။ ကျနော်တို့ လည်း အခုအခြေအနေ စောင့်ကြည့်နေတယ်”ဟု ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အုမ်ခေး က ထပ်လောင်းပြောသည်။
ပြည်ထောင်စု အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရေး အဖွဲ့နှင့် RCSS/SSA အဖွဲ့တို့သည် ၂၀၁၂ ဇန်နဝါရီ နှင့် မေလ ကျိုင်းတုံမြို့ တွေ့ဆုံပွဲတွင် နှစ်ဘက် သဘောတူညီချက်အရ RCSS/SSA အဖွဲ့ မှ ဟိုမိန်းနှင့် မုံးထားနယ်မြေသို့ ကျော်လွန် လှုပ်ရှားခြင်း မပြုရန် သတ်မှတ်ခဲ့ကြောင်းလည်း တပ်မတော် သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးထုတ်ပြန်ချက်တွင် ရေးထားသည်။ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားမှု နယ်မြေ မတည်ငြိမ်မှုကြောင့် ကျောက်မဲမြို့နယ်အတွင်း ကျေးရွာအုပ်စု (၁၂) အုပ်စု ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပရန် လည်း ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်တွင် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထို ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ရေးသည် အစိုးရတပ်မတော်ပေါ် မူတည်ကြောင်း၊ အစိုးရတပ်မတော်တပ်ဆုတ်ပြီး တိုက်ပွဲ မဖန်တီး ပါက ရွေးကောက်ပွဲကို အေးချမ်းစွာ ကျင်းပနိုင်ကြောင်းလည်း သျှမ်းမြောက်အတွင်း လှုပ်ရှားနေသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များက ပြောဆိုလိုက်သည်။ https://burmese.shannews.org/archives/19060
ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်(KIA) တပ်ရင်း ၅ က ဖမ်းခေါ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရွှေကူ မြို့နယ်၊ ကျောက်ကြီးကျေးရွာ ဒေသခံသုံးဦး အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်နေ့က ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။ လူငယ် သုံးဦး ပြန်လွတ်လာတယ်လို့ မိသားစုဝင်တစ်ဦးနဲ့ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း တာဝန်ရှိသူတို့က ပြောပါတယ်။ ဖမ်းဆီးခေါ်ခံရသူတွေ က မောင်ကျော်ခိုင်ဦး (၃၁) နှစ်၊ မောင်ထွန်းရဲမိုး (၁၆) နှစ်နဲ့ မောင်နိုင်လင်း (၂၆) နှစ်တို့ဖြစ်ကြပြီး ရွှေကျင်တောမှာ အလုပ်သွားလုပ်နေတဲ့ စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက် နေ့က ဖမ်းခေါ်သွားတာလို့ မောင်နိုင်လင်း ဖခင်က ပြောပါတယ်။
“ရွှေကျင်တောမှာဗျ။ ဟုတ်တယ် နေ့စားသွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာ။ ကလေးတွေကတော့ အဲဒီမှာ ဘာခိုင်းလဲ ဆိုတော့ ထမင်းချက်၊ ရေခပ်၊ ထင်းခွေတာ လုပ်ခိုင်းတယ်တဲ့။ သင်တန်းတွေကတော့ မတက်ခဲ့ရဘူး ပြောတယ်” သူတို့တွေဟာ မိသားစုနဲ့ တစ်လကျော်ကြာ ဝေးကွာခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်အဖွဲ့(PCG) ၊ ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ တွေကို အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့အကူအညီ တောင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက် အခုလို လွတ်လာတာလို့ မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း-သျှမ်းမျိုးနွယ်စုရေးရာအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ စိုင်းစန်းဝေက ပြောပါတယ်။
အဖမ်းခံရသူ ၆၀၀ ကျော်ရှိတဲ့အထဲမှာ အသက် ၁၈ နှစ်အောက် ၈၁ ယောက် ပါဝင်တဲ့အတွက် ကလေးသူငယ်၊ လူငယ် အခွင့်အရေးတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ UN အဖွဲ့ဆီကို သီးခြားစာရင်းပြုစုပြီး ပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း-ရှမ်းမျိုးနွယ်စုရေး ရာအဖွဲ့ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ စိုင်းခင်မောင်အေးက RFA ကို ပြောပါတယ်။ ဒီစာရင်းတွေဟာ တိုင်းကြားလာတဲ့စာရင်းတွေသာဖြစ်ပြီး ဘယ်နှစ်ယောက်ပြန်လွှတ်တယ်၊ ဘယ်လောက်ဆက်လက်ဖမ်းဆီးခံထားရတယ် ဆိုတာတော့ မသိဘူးလို့ စိုင်းခင်မောင်အေး က ပြောပါတယ်။ ဒီပြောဆိုချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းရာမှာ ဗိုလ်မှူးကြီး နော်ဘူက အောက်ခြေတပ်အဆင့်ဆင့်ကို ဆက်သွယ်စစ်ဆေးမယ်လို့သာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news/shwegu-three-villagers-released-10252020051600.html
တပ်မတော်မှ ဖမ်းဆီးခဲ့သည့် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်တော်မြို့နယ်၊ ရုပ်သားကျေးရွာ သားတဦးမှာ စစ်ကြောရေး ကာလ အတွင်း ရိုက်နှက်ခံရသည့် ဒဏ်ရာပြင်းထန်မှုကြောင့် ကျောက်တော်ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှု ခံယူနေရကြောင်း မိသားစုများ ထံမှသိရသည်။ ဆေးကုသခံယူနေရသူမှာ အသက် ၅၂ နှစ်အရွယ် ဦးမောင်ကျော်သန်း ဖြစ်ပြီး အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက် နံနက်ပိုင်းက ကျေးရွာအတွင်း မိမိ နေအိမ်၌ရှိနေစဉ် တပ်မတော်သားများက ဖမ်းဆီးသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း မိသားစုဝင်များက ပြောသည်။ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ဦးလှယဉ်က “ ခြေထောက်၊ ပေါင်၊ ရင်ဘတ်တွေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာ ညိုမဲနေတဲ့ ဒဏ်ရာတွေ အသက်ရှု ကျပ်တာတွေဖြစ်နေတယ်။ စစ်သားတွေက ဖမ်းဆီးသွားပြီးတော့ လည်ပင်းတွေကို ကြိုးကွင်းစွပ်တာတွေ၊ ခြေထောက်တွေ၊ ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ကို သေနတ်တွေနဲ့ ထုထောင်းခဲ့တာ။ ဒဏ်ရာတွေက ပြင်းထန်နေတဲ့ အတွက် ဆေးကုသ နေရတာ” ဟု ဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နေ့က တပ်မတော်သားများသည် ရုပ်သားကျေးရွာသို့ သေနတ်ပစ်ဖောက် ဝင်ရောက် လာပြီး အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးငယ်များအားလုံးကို နေအိမ်ပြင်ပသို့ခေါ်ထုတ်ပြီး ကျေးရွာရှိ စာသင်ကျောင်း၌ စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည့်နောက် ၁၈ ရက်နေ့တွင် ဦးမောင်ကျော်သန်းတဦးကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ ဆက်လက်ပြီး ဒေါ်ဦးလှယဉ်က “ ကိုယ့်အိမ်ကနေ ဆေးကုသစေချင်တာ အခုတော့ ရဲစခန်းမှာကနေ လာပြီး ပြနေရတယ်။ ဆရာဝန်ကြီးကလည်း ဆေးရုံတက်ပြီးကုသပေးရမယ်လို့ ပြောတယ်။ အခုကတော့ ရဲစခန်းကတော့ ဒီလိုကုသဖို့ ခွင့်ပြုမပြုကို မသိရသေးဘူး” ဟုဆိုသည်။ အဆိုပါ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော်သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ရာတွင် ၎င်းမှာ AA အမာခံတဦးဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။
ရခိုင်လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်မြှင့်တင်သူများအဖွဲ့မှ ရှေ့နေဦးဇော်ဇော်မင်းက “သံသယနဲ့ ဖမ်းဆီးပြီးတော့ တဦး တယောက်ကိုမျှ ထိခိုက်ညှင်းပန်း ဆက်ဆံမှုမျိုး မပြုလုပ်ရလို့ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာချက်မှာ ပြဌာန်းထားတဲ့အတွက် ကျူးလွန်သူတွေကို ပြစ်ဒဏ်ပေးဖို့လိုတယ်။ လက်ရှိမှာ တပ်မတော်ဘက်က ပြစ်ဒဏ်ပေးမှု မရှိသလို ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် အခုလို ကိစ္စမျိုးတွေ ထပ်မံကျူးလွန်ဖို့အတွက် တွန်းအားပေးနေသလိုပဲ”ဟု ဆိုသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း တပ်မတော် နှင့် AA တို့၏ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသည့်ကာလ၌ တပ်မတော်က ထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးခဲ့စဉ် စစ်ကြောရေးကာလအတွင်း ဒဏ်ရာ ရသူ၊ သေဆုံးသူတို့လည်း များပြားလာနေသည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/24/232262.html
မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO တို့ကြား ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် KBC ဥက္ကဌ Rev. Dr. Hkalam Samson က ကြားဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးသောကြောင့် မကြာခင် Bilateral အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ် ရေးထိုးနိုင်တော့မည်ဟူသောသတင်းသည် သတင်းမှားဖြစ်သည်ဟု သက်ဆိုင်သူများပြောသည်။‘Mirror Kachin’ အမည်ရှိ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့် KBC ဥက္ကဌ Rev. Dr. Hkalam Samson တို့သည် မကြာခဏတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေသောကြောင့် မကြာခင် တပ်မတော် နှင့် KIA သို့မဟုတ် မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တို့နှင့်အတူ တရုတ်ပြည်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးဖွယ်ရှိကြောင်း ကချင်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထား သည်ကို တွေ့ရသည်။
အဆိုပါသတင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး KBC ဥက္ကဌ Rev.Dr.Hkalam Samson ကို မေးမြန်းကြည့်ရာ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖြင့် တစ်ခါမျှသာ တွေ့ဆုံဖူးကြောင်းနှင့် အဆိုပါသတင်းသည် အမှားဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။ “အဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင် ရေးသားထားတဲ့ပုံစံက စစ်တပ် ၂ ဖက် သဘောတူညီလက်မှတ်ထိုးဖို့ ကျနော်က ဘဲ ကြားကနေ ညိနှိုင်းပေးနေတဲ့ ပုံစံဖြစ်နေ တယ်။ ဒါကလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့လို ၂ဖက်ကြား Bilateral လက်မှတ်ထိုးဖို့ ညိနှိုင်းပေးဖို့လည်း ကျနော့်အလုပ်မဟုတ်သလို သက်ဆိုင်မှုလည်းမရှိဘူး။ မထိုးဖို့တောင်ပြောဆိုနေတာ အားလုံးသိပါ တယ်။ အခုနောက်ပိုင်း မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် ၄ဖွဲ့ သဘောတူညီရင် ထိုးမယ်ဆိုတာကလည်း အားလုံးသိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေက အခုထိမအောင်မြင်သေး ဘူး။ သတင်းအမှားဖြစ်တယ်”ဟု ပြောဆိုသည်။‘Mirror Kachin’ သည် အဆိုပါသတင်းကို Mizzima TV မှ ကိုးကားကာ ရေးသားထားသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ သို့သော် အဆိုပါသတင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအကြောင်းအရာကို Mizzima သတင်းစာမျက်တွင်လည်း ရေးသားထားခြင်း မတွေ့ရပါ။
ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ဗဟိုဌာနချုပ်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဗိုလ်မှုးကြီးနော်ဘူကလည်း လတ်တလော ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုများ မရှိကြောင်း ကချင်သတင်းဌာန KNG ကို ပြောသည်။ ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် KBC ဥက္ကဌ Rev.Dr.Hkalam Samson သည် ကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ နေရပ်ပြန်ရေးအတွက်လုပ်ဆောင်နေသော KHCC အဖွဲ့၏ ဥက္ကဌ လည်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ https://burmese.kachinnews.com/2020/10/23/l2-17/
မြောင်းမြမြို့တွင်(အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်) နံနက် ၉ နာရီခန့် ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ (KPP) ဝန်းရံထောက်ခံသူများက အင်းအား တစ်သောင်းကျော်ဖြင့် မြို့အနှံ့ လှည့်လည်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ အင်အားပြ ထောက်ခံသူများသည် မြောင်းမြမြို့ သူနာပြုသင်တန်းကျောင်းအနီးတွင် စတင်စုဝေးကာ ထော်လာဂျီများ၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ၊ မော်တော်ယာဉ်များဖြင့် ကရင်တိုင်းရင်းသားရိုးရာ ဝတ်စုံအား ဝတ်စုံကာ လှည့်လည်အင်အားပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ကျွန်တော်တို့ ကရင်ပါတီအတွက် ကျွန်တော်တို့ ဝန်းရံသူအဖွဲ့က စုပေါင်းပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့အင်အားကိုပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီနေ့ပွဲက ပါတီကစီစဉ်တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျ၊ ဝန်းရံသူအဖွဲ့ စီစဉ်ပြီးတော့ လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိ အင်အား က တစ်ထောင်တော့ ကျော်လိမ့်မယ်ခင်ဗျ၊ ကျွန်တော်တို့ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိဖို့ လုပ်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်”ဟု အင်အားပြ လှည့်လည်ပွဲတွင် ပါဝင်ခဲ့သူ စောဝင်းချိုက ပြောသည်။ အင်အားပြလှည့်လည်ပွဲများ အားလုံးမှာ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ထံတွင် ငြိမ်းချမ်းစုဝေး လှည့်လည်ခွင့်နှင့် မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲထံတွင် အင်အားပြမဲဆွယ် စည်းရုံးခွင့်များကို လျှောက်ထားထားခြင်း မရှိကြောင်း သိရသည်။
မြောင်းမြမြို့တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံဖြိုးရေးပါတီ၊ ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုး ဆောင်ပါတီ၊ လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ၊ ကရင်အမျိုးသားပါတီ၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးရေး ညီညွတ်ရေးပါတီတို့မှ ဝင်ရောက် ရွေးချယ်ခံကြမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ https://news-eleven.com/article/196355
ရေးမြို့နယ်အတွင်း မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ (MUP) အား ထောက်ခံဝန်းရံသူ ထောင်နှင့်ချီ၍ အင်အားပြလှည့်လည်မှုကို (အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်) နံနက်ပိုင်းက ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ရေးမြို့အနီးရှိ လေယာဉ်ကွင်းဟောင်းတွင် စုရပ် အဖြစ်ပြုလုပ်ပြီးနောက် ရေးမြို့နှင့် အနီးဝန်းကျင်ရှိ ရပ်ကွက်နှင့်ကျေးရွာများသို့ အင်အားပြလှည့်လည် မဲဆွယ်စည်းရုံးမှု ပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်း အဆိုပါ အင်အားပြလှည့်လည်ပွဲ စီစဉ်သူများထံမှ သိရသည်။
မိမိတို့အနေဖြင့် မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီအား ယုံကြည်၊ အားကိုး၊ လေးစားကြသည့်အတွက် ယခုလို လာရောက်ဝန်းရံကြခြင်း ဖြစ် ကြောင်း အဆိုပါ အင်အားပြလှည့်လည်ပွဲအား စီစဉ်သူတစ်ဦးဖြစ်သူ မင်းအောင်စိုး က ပြောကြားသည်။ “ပွင့်ပွင့် လင်းလင်းပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကံကြမ္မာကို ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးခွင့်ရမှသာ မိမိတို့လူမျိုး၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ စာပေ၊ အနုပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်က လွှတ်တော်မှာ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေက လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်တွေ များများရောက်ရှိနေဖို့လိုပါမယ်။ ဒါကြောင့် တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေက အနိုင်ရမှ သာလျှင် စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် စစ်မှန်သော ဖယ်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ် တည်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်နေရာတွေမှာ တိုင်းရင်းသားတွေများများ လိုတဲ့အတွက်ကြောင့် ယခုလို ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အင်တိုက်အား တိုက် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်” ဟု အင်အားပြလှည့်လည်ပွဲအား စီစဉ်သူတစ်ဦးဖြစ်သူ မင်းအောင်စိုး က ပြောကြားသည်။
မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီသည် ကိုယ်ဒေသအတွက် အကျိုးပြုနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်သည့်အတွက် လာရောက်ထောက်ခံ ဝန်းရံရ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်း၊ ဟံဂံကျေးရွာနေ မိသူရိန်မွန် ကပြောကြားသည်။ “တခြားပါတီတွေက ဒေသဖွံ့ဖြိုး ရေးတစ်ခုတည်းလုပ်ပေးနိုင်တယ်။ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီကို ထောက်ခံမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်စာပေယဉ်ကျေးမှု မြှင့်တင်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။ ဒီမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကို မောင်နှမတွေအနေနဲ့ကိုယ့် တိုင်းရင်းသား ပါတီကို မဲထည့်ပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်” ဟု မိသူရိန်မွန် က ဆက်လက်ပြောကြားသည်။ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ သည် မွန်တိုင်းရင်းသားပါတီအားလုံးစုစည်းထားသည့်ပါတီဖြစ်သည့်အပြင် မွန်သံဃာတော်များ၊ မွန်ပြည်သူများ၊ မွန်လူငယ် များ အားလုံး၏ သဘောဆန္ဒနှင့်အညီ ပေါင်းစည်းထားသည့် မွန်တိုင်းရင်းသားပါတီလည်းဖြစ်သည့်အတွက် မွန်လူငယ် တစ်ယောက်အနေဖြင့် မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီအား လာရောက်ဝန်းရံရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရေးမြို့ခံ မွန်လူငယ်တစ်ဦးဖြစ်သူ မင်းမွန်ထော က ပြောကြားသည်။ https://news-eleven.com/article/196357
မွန်ပြည်နယ်နှင့် ကရင်ပြည်နယ်တို့တွင် ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါဒုတိယလှိုင်းကာလအတွင်း အသွားအလာကန့်သတ်မှုများကြောင့် ရာဘာခြံများသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့် ခြံလုပ်သားများ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရန်အခက်တွေ့နေကြောင်း သိရသည်။
ပြည်နယ်အတွင်း ကုန်တင်ယာဉ်များကိုသာ သွားလာခွင့်ပြုသဖြင့် ခြံလုပ်သားနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များ သက်ဆိုင်ရာခြံ အသီးသီး သို့ လိုင်းကားများဖြင့် သွားရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် အလုပ်သမားအနည်းငယ်ဖြင့်သာ လုပ်ကိုင်နေရကြောင်း ရာဘာ လုပ်ငန်းရှင် ဦးသိန်းထွန်း ဆိုသည်။ “ဇာသပြင်အလွန်မှာခြံတွေရှိတယ် လုပ်သားတွေကိုကြီးကြပ်လို့မရတော့ဘူး ဟိုမှာလုံးဝ ကြီးလွှတ်ထားရတဲ့ အနေအထားတွေဖြစ်သွားတယ် သူတို့လိုအပ်တာတွေကို လုပ်ပေးဖို့အတွက်ခက်သွားတယ် ကျွန်တော် တို့ ရှိမှ လုပ်လို့ကိုင်လို့ရတဲ့အလုပ်တွေလည်းရှိပါတယ်”ဟု ဦးသိန်းထွန်း ကပြောသည်။ မွန်ပြည်နယ်မှ ရာဘာခြံလုပ်သား များအပြင် ဧရာဝတီတိုင်းနှင့် အခြားဒေသတွေက လာရောက်လုပ်ကိုင်ကြသည့် အလုပ်သမားများလည်းရှိကြောင်းသိရ သည်။“အဆင်မပြေဘူး ပြည်နယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုကူးလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ရောက်တဲ့သူတွေကလည်း တစ်ချို့လောက် ကတော့ရောက်နေပြီး ဟိုမှနေပြီးတော့ သွားလုပ်ရတာ။ ရာဘာခြစ်ဖို့အတွက် ပထမဆုံး ဝဲထိုး(ဓါတ်မြေသြဇာထည့်) ရတယ်၊ ခြုံတွေရှင်းရတယ်။ ဒါမျိုးမလုပ်ထားရင် ရာဘာခြစ်လို့မရဘူးလေ အဲ့တာတွေတောင်မလုပ်ရသေးဘူး”ရာဘာလုပ်ငန်းရှင် ဦးဝင်းလှ ကပြောသည်။
လက်ရှိရာဘာခြံလုပ်ငန်းတွင် ခြံပိုင်ရှင်နှင့် အစေးခြစ်လုပ်သားများအကြား ခြံအနီးအဝေးသွားလာမှုလွယ်ကူသည့်အပေါ် မူတည်၍ ရာဘာအစေးခြစ်ရာမှ ထွက်ရှိလာသည့်ငွေတန်ဖိုးအပေါ် ခြံရှင် ၅၀%= လုပ်သား ၅၀%၊ ခြံရှင် ၄၀%= လုပ်သား ၆၀% စသည်ဖြင့် တစ်ရာသီစာ သင့်ရာဈေးနှုန်းညှိပြီး လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိကြသည်။ မွန်ပြည်နယ်တွင် ရော်ဘာစိုက်ပျိုးဧက (၅)သိန်းကျော်အနက် စိုက်ပျိုးမှု ရပ်နားထားသောဧက(၁)သိန်းကျော်ရှိပြီး တစ်နှစ်လျှင်ရော်ဘာတန်ချိန် ၁ဝ၆,ဝဝဝ တန် ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် တရုပ်နိုင်ငံမှ ရာဘာဝယ်ယူမှု ကျဆင်းလာသဖြင့် ရာဘာဈေးနှုန်းများလည်း နှစ်အလိုက် ကျဆင်းလာပြီး ယခုအခါ ရာဘာပင်များကို ခုတ်လှဲ၍ ပရိဘောဂသစ်များအဖြစ်ရောင်းချပြီး အစားထိုးအပင်များ စိုက်ပျိုးလာ သည်ကို တွေ့ရသည်။ http://burmese.monn ews.org/2020/10/24/%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af %e1%80%97%e1%
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရသေ့တောင်မြို့နယ်၊ ဦးဂါကျေးရွာမှ အမျိုးသမီး ၁ ဦးကို တပ်မတော်သား ၃ ဦးက အဓမ္မပြုကျင့်သည် ဆိုသည့် ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ စစ်တွေတပ်နယ်တွင် စစ်တရားရုံးဖြင့် စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်နေကြောင်း တပ်မတော် သတင်း ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ပြောသည်။ အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့က နေပြည်တော်တွင် ပြုလုပ်သည့် တပ်မတော် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် အမှုအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဧရာဝတီမှ မေးမြန်ခဲ့ရာ အထက်ပါ အတိုင်း ဖြေကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်း က “အဲဒီ ဦးဂါရွာဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ စစ်တွေမှာ စစ်ဆေး လျှက်ရှိပါတယ်။ တပ်မတော် အက်ဥပဒေ အရပါ မကပါဘူး၊ နယ်ဘက် ဥပဒေ အရပါ အရေးယူသွားပါမယ်။ ကျနော်တို့ ပြောထားတဲ့အတိုင်း ပြင်းထန်ထန် အရေးယူပါမယ်” ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ အရေးအား လိုက်ပါကူညီသူ ရခိုင်အမျိုးသမီးများ ကွန်ရက်ဥက္ကဌ ဒေါ်ညိုအေး ကတော့ ဦးဂါရွာသူအမှုတွင် ကျူးလွန် သူ တပ်မတော်သားများအား စစ်တရားရုံးမှ စစ်ဆေးနေသည်ဟုသာ သိရွိရပြီး လက်ရှိအချိန်အထိ ကယကံရှင် မိသားစု အပါအဝင် လိုက်ပါကူညီသူ အမျိုးသမီးအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်လည်း တိတိကျကျတခုမှ မသိရှိရသဖြင့် ပွင်းလင်းမြင်သာမှုရှိအောင် အရပ်ဘက်တရားရုံးသို့ လွဲပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောသည်။ ဒေါ်ညိုအေးက “ဦးဂါရွာသူ အမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုထိ ဘာမှမသိရဘူး။ တစုံတရာ အကြောင်းကြားတာလည်း မရှိဘူး၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ကို မေးကြည့်တော့ လည်း သူတို့ကလည်း အကြောင်းမပြန်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောတယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဒေါ်မြသူဇာ က “ကျမတို့ အဲဒီအမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ စစ်တရားရုံးဖွဲ့ စစ်ဆေးနေတယ်ဆိုတာပဲ သတင်းတွေမှာ ဖတ်ရလို့ သိရတယ်။ ကျူးလွန်သူတွေက ဝန်ခံထားတယ်လို့လည်း ပြောတယ်။ ဘယ်သူ၊ ဘယ်အဆင့်ဆို တာလည်း ဘာမှမသိရဘူး။ ဘယ်လို စစ်ဆေးနေတယ်။ အမှုအခြေအနေဘယ်လိုရှိတယ်။ ဘယ်မှာ စစ်ဆေးနေတယ်ဆို တာလည်း ကာယကံရှင်တွေ ဆီကိုလည်း အကြောင်းကြာတာမရှိဘူး”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ တပ်မတော်သတင်း ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှ ဗိုလ်ချုပ်ဇောမင်းထွန်းကတော့ စစ်ဆင်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်ကာလအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ် သည့်အတွက် ကျူးလွန်သူ တပ်မတော်သား ၃ ဦးမှာအမှုကို အရပ်ဘပ်တရားရုံးသို့ လွဲပြောင်းပေးမည် မဟုတ်ဘဲ စစ် တရား ရုံးဖြင့် စစ်ဆေးကာ တပ်မတော် အက်ဥပဒေ အရသော်လည်းကောင်း၊ နယ်ဘက် ဥပဒေ အရသော်လည်းကောင်း အပြစ်ပေး အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။ ထိုတိုင်ကြားချက်အပေါ် စစ်တွေမြို့မ ရဲစခန်းမှ ပ / ၃၅၅ / ၂၀၂၀၊ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၁၁၄ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၃၆၆ မတရားသဖြင့် ကာမယှက်စပ်မှု၊ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၃၇၆ မုဒိန်းမှု စသည့် ပုဒ်မ များဖြင့် အမှုဖွင့်ထားသည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/24/232260.html
ဗန်းမော်ခရိုင် ဂိုင်ဒေါကျေးရွာတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ငါးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူ (၃) ဦးကို ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO အရှေ့ပိုင်ခရိုင်တရားရုံးက အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ လူသတ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဖမ်းဆီး ထားသော တရားခံ ၃ ဦးကို စစ်ဆေးရာတွင် သူတို့ကိုယ်တိုင် လူသတ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည့်အတွက် လွန်ခဲ့သည့် စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့တွင် အပြီးသတ်ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခဲ့ကြောင်း KIO ဗဟိုဌာနချုပ် ဗိုလ်မှူးကြီးအင်ဖန်နော်ဘူ က ပြော သည်။“သူတို့ကိုယ်တိုင် လူသတ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဝန်ခံတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေမှာလည်း လူ ၄ ယောက်ကို သတ်လိုက်ပြီ၊ သူတို့သတ်လိုက်တဲ့လူ ၉ ဦး ရှိပြီ။ ဒါကြောင့် သူတို့လူသတ်တာ သေချာမှန်ကန်ပြီး သူတို့ကိုယ်တိုင် ဝန်ခံပြီဖြစ် တဲ့ အတွက် KIO အရှေ့ပိုင်ခရိုင်တရားရုံးမှ အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ် စီရင်ခဲ့တယ်” ဟု KNG ကိုပြောသည်။
ဗန်းမော်ခရိုင် မန်စီမြို့နယ် ဂိုင်ဒေါကျေးရွာ၌ ဇူလိုင်လ ၂ ရက်နေ့ည မိသားစုဝင် ၅ ဦးဖြစ်သည့် ဒေါ်ယမ်ထု (အသက်(၇၀)၊ ဦးယာကုလန်ဇိန်တန်ဂွန်(ဖခင်)၊ ဒေါ်မော်ရိန်းဆွမ်လွတ်ထုနန် (မိခင်)၊ မောင်လန်ဇိန်ဆန်လီနော်၊ မောင်လန်ဇိန်ဒွဲဆန်အောင် တို့ ဓါးခုတ်ဒဏ်ရာများဖြင့် သေဆုံးခဲ့သည်။ လူသတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အဓိကပြဿနာအကြောင်းအရင်းမှာ ဘိုးဘေးစဉ်ဆက် လုပ်ကိုင်စားသောက်ခဲ့သည့် လယ်ယာမြေ အငြင်းပွားမှုကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု စစ်ဆေးတွေ့ရှိကြောင်းဆိုသည်။ လယ်ယာမြေ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး တရားခံတစ်ဦးသာပါဝင်သော်လည်း လူသတ်ရာတွင်မူတစ်ဦးတည်းမဟုတ်ကြောင်းပြောသည်။
ဇူလိုင် ၂ရက်နေ့ လူသတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ၃ ရက်နေ့တွင် တရားခံ ၃ ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ ၃ ဦးကို၂၀၂၀ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ KIO အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှ အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်အဖြစ် အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။ https://burmese.kachinnews.com/2020/10/23/l2-18/
ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝမြို့နယ်ကို လုံခြုံရေးအားနည်းတဲ့ ၃၉ နယ်မြေထဲမှာ ထည့်သွင်း အကြံပြုခဲ့ပေမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ညှိနှိုင်းပြီး ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလို့ တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ပြောပါတယ်။ ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး လုံခြုံရေးအရ ကျင်းပနိုင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ တပ်မတော်က သဘောထားတင်ပြရာမှာ ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်ကို လုံခြုံရေး အားနည်းတဲ့ မြို့နယ်တွေထဲမှာ ထည့်သွင်းတင်ပြခဲ့တာပါ။ “ပလက်ဝက လုံခြုံရေးအားနည်းတဲ့အတွက် မကျင်းပရမယ့်နေရာ ၃၉ နယ်မြေထဲမှာ ကျနော်တို့ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ ညှိနှိုင်းမှုတွေ ရှိပါတယ်။ လုံခြုံရေးအရ ဆောင်ရွက်ပေးပါဆိုတဲ့ဟာတွေ ရှိပါတယ်။ တတ်နိုင်သမျှ ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုပြီး ပြန်ပြီးတော့ အကြောင်းပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ပြန်ပြီးတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မိုလို့ ပလက်ဝသည် စာရင်းထဲမှာ ပါသွားတယ်။”
အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်တဲ့ နယ်မြေတွေ၊ ကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ နယ်မြေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်ထောင်စုရွေး ကောက်ပွဲကော်မရှင်က အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်က ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ရာမှာ တိုက်ပွဲထိတွေ့မှု မြင့်တက်နေတဲ့ ပလက်ဝ မြို့နယ်က ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်တဲ့ စာရင်းထဲမှာ ပါဝင်လာပြီး တချို့နယ်မြေအေးချမ်းတဲ့ဒေသတွေကတော့ စာရင်းထဲ ပါဝင်လာခြင်း မရှိတာပါ။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒေသခံတွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီအချို့က ဝေဖန်မှုတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ ဒေသတွေထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်က မြို့နယ် ၉ မြို့နယ်နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် က ၆ မြို့နယ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှမ်းရဲ့ဒေသတချို့နဲ့ ရခိုင်ရဲ့ဒေသတချို့ကိုလည်း ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပ ဖို့အတွက် လုံခြုံရေးရရှိ အောင် ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ တပ်မတော်ဘက်က ပြန်လည်တင်ပြထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရ ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် စုစုပေါင်း ၃၃၀ မှာ ရွေးကောက်ပွဲ မပြုလုပ်နိုင်တဲ့ ဆန္ဒနယ် ၁၅ နယ်နဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော် ၁၆၈ နယ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲ မပြုလုပ်နိုင်တာ ၇ နေရာရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/419078
ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် PNO ပါတီမှ တောင်ကြီးမြို့တွင် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအင်အားပြ စီတန်း လှည့်လည်ခြင်းကို (အောက်တိုဘာ ၂၄) ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ တောင်ကြီးမြို့နယ်တွင်းရှိ ကျေးရွာ အုပ်စုများမှ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသား အများအပြား တက်ရောက်လာကြပြီး၊ ထောင်နှင့်ချီသော စီတန်းလှည့်လည်ရေးယာဉ်တန်း သည် များပြားလွန်းသဖြင့် အနောက်မြို့ပတ်လမ်း နှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းမကြီးတစ်လျှောက် ပြည့်လျှံခဲ့ပြီး၊ နာရီ ပေါင်း များစွာကြာမြင့်သည်အထိ အင်အားပြယာဉ်တန်းသည် ရှည်လျားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ မော်တော်ယာဉ်အစီးရေပေါင်း ထောင် ကျော်ခန့် ပါဝင်သော ယာဉ်တန်းသည် PNO ပါတီအမှတ်တံဆိပ်အလံနှင့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားအလံများကိုင်ဆောင်ကာ ပါတီ အလံများ ဝှေ့ရမ်း၍ ပါတီစည်းရုံးရေးသီချင်းများဖြင့် မဲဆွယ် စည်းရုံးရေး အင်အားပြလှည့်လည်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
“ ဒီနေ့တော့ ပါတီပုံရိပ်ပြတဲ့သဘောပါ၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်မှာ ကျွန်တော်တို့ PNOပါတီ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ် ဆိုတာ အသိပေးလိုက်တဲ့သဘောပါ။ သက်ဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုလည်း ခွင့်ပြုချက်တောင်းတာပေ့ါ။ ဒီနေ့ထူးခြားတာ တစ်ခုက ဖွင့်ပေးလိုက်တာပေ့ါ။ အုပ်စုနှစ်စု လမ်းကြောင်းနှစ်ကြောင်းပေါ့။ ဘယ်သူမဆို လိုက်ပါနိုင်အောင်ပေ့ါ။ ကားတွေ ချည်းပဲ မခန့်မှန်းနိုင်တော့ဘူး။ တောင်ကြီးမြို့ ကျောက်တစ်လုံးအထွက် ကုန်ပြီ၊ မြေပုံနားမှာ မကုန်သေးဘူး၊ အနောက် မြို့ပတ်လမ်းလည်း ရှိနေသေးတုန်းပဲ၊ ကားတွေ အရမ်းများသွားတယ်။ ဆိုင်ကယ်တော့ မရှိသလောက်ပေ့ါ။ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းလမ်းနဲ့ အနောက်မြို့ပတ်လမ်း အကုန်ပြည့်သွားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ မပါဘူး။ ထောက်ခံသူတွေက ဝန်းရံချင်တယ်ဆိုလို့ ကော်မရှင်က ခွင့်ပြုတယ်။ အခုဝန်းရံတာ ထင်တာထက်ကို များတယ်။ ကျွန်တော် တို့က စည်းကမ်းချက်လည်း ထုတ်တယ်။ လိုက်နာကြဖို့ အားလုံးကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ ကိုယ်လာကြဖို့ ထုတ်တယ်။ တောင်ကြီး မြို့နယ် တစ်ခုပဲ၊ တခြားမြို့နယ် မပါဘူး။ တခြား ဟိုပုံးနဲ့ညောင်ရွှေမှာလည်း သူတို့ဘာသာ သူတို့ သွားနေတယ်။ တောင်ကြီး မြို့နယ်တွင်း ထောက်ခံသူတွေပေ့ါ။ တောင်နီ ဘန့်ကွေး မွေတော်တို့ ပါတယ်။ အဲဒီဘက်လမ်းကြောကနေ လာတာပါတယ်။ အဓိကတော့ လွှတ်တော်ထဲမှာ တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်ရှိဖို့လိုတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေဟာ အစိုးရမဖွဲ့နိုင်ပေမယ့် ကျွန်တော် တို့အခွင့်အရေး၊ အထူးသဖြင့် ဒေသအခွင့်အရေးပေါ့။ တောင်ကြီးမြို့ဆိုရင် ဒေသတွက်လုပ်တာ အားနည်းတယ် လို့မြင်တယ်။ လူထုလိုအပ်တာတွေ ပိုပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်တာပေ့ါ။ ကိုယ်စားလှယ်ရှိဖို့ လိုတယ်။ ဒေသဖွံ့ဖြိုး ရေးကိုလည်း ပိုပြီးလုပ်နိုင်မယ်။ ပြီးတော့အ လုပ်လုပ်ရင်လည်း လူထု အတွက် ပိုလုပ်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ ဒါကြောင့် တိုင်းရင်းသားတွေကို အားပေးသင့်တယ် ”ဟု PNO ပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် စောခွန်ကျော်ဝင်းက ပြောကြား သည်။
တောင်ကြီးမြို့နယ်တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၊ ပြည်နယ် အမှတ်(၁) နှင့် အမှတ်(၂) လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၊ စုစုပေါင်း (၃) ဦး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် PNO ပါတီသည် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ကယားပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ပဲခူး တိုင်းတို့တွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း (၂၈) ဦး ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ https://news-ele ven.com/article/196251
ဒေသခံလူထု ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်ရေးနှင့်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးအပြည့်အ၀ ရရှိရေးအတွက် စစ်မြေပြင်အတွင်းနေထိုင် သည့် လူငယ်များနှင့် ရပ်မိရပ်ဖ များက ကျန်းမာရေးဌာန ထုတ်ပြန်ချက်နှင့်အညီ ငြိမ်းချမ်းစွာ တောင်းဆိုလိုက်သည်။ သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲမြို့နယ်ရှိ တိုက်ပွဲကြောင့် စစ်ဘေးရှောင်လူထု ၁၀၀၀ ခန့်ခိုလှုံခဲ့သည့် ပုံဝိုးဘုန်းကြီးကျောင်း တွင် (စစ်ရှောင်များနေရပ်ပြန်ကြပြီးနောက် ) အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်က ကျောက်မဲလူငယ်များနှင့်ရပ်မိရပ်ဖများတွေ့ဆုံကာ Silent Campaign လုပ်ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။“ကျနော်တို့ မနက် ၁၀ နာရီခွဲကနေ ၁၁ နာရီခွဲလောက်အထိ အဲ့မှာ လူ ၃၀ လောက်တွေ့ဆုံပြီးတော့ တိုက်ပွဲတွေ အလို မရှိတော့တဲ့အကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပရ နယ်မြေလို့သတ်မှတ် ကြေညာ တာကြောင့် နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင် ကိုင်ထားတဲ့ ကျနော်တို့ရွာသားတွေ ရသင့်ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးခဲ့ ရတဲ့အကြောင်း ဆန္ဒအစစ်အမှန်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးကြတယ်။ ပြီးတော့ စာရွက်ကြီးအပေါ်ရေးချပြီးတော့ အဲဒီမှာ Silent Campaign လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။” ဟု ကျောက်မဲလူငယ်တဉီးဖြစ်သော စိုင်းစွမ်မိန်းက သျှမ်းသံတော်ဆင့် အား ပြောပြသည်။
ကျောက်မဲမြို့ ပုံဝိုးအုပ်စု နောင်ဆင်မ်ရွာသည် ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနယ်မြေ အထဲတွင်ပါဝင်ပါ သည်။ မိမိတို့ရွာသားများ အရေးဆောင်ရွက်ပေးမည့် ကိုယ်စားလှယ်ကိုရွေးခြယ်ရန်အခွင့် မရှိတော့သည့်အပေါ် ရွာသားများ မကျေမနပ်ဖြစ်ကြရ ကြောင်း Silent Campaign တွင်ပါဝင်လာသူ နောင်ဆင်ဒေသခံများကပြောဆိုနေကြသည်။“အခုလို ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပနဲ့နယ်မြေအဖြစ် ကြေညာလိုက်တာဟာ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးသာမက လူသားတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးအထိပါ ချိုးဖောက်ခံရတာဖြစ်တယ်။ ဒီချိုးဖောက်ခံရမှုတွေကို ကိုယ်တိုင်ထပြီး ကြိုးစားဆောင်ရွက်မှသာ ကျနော်တို့လိုချင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအခွင့်အရေးမျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့လိုဘဲ အခွင့်အရေးပိတ်ပင် ခံရ တဲ့ လူငယ်အားလုံးကို မိမိတို့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးအတွက် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ထပြီးဆောင်ရွက်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။” – ဟု လည်း စိုင်းစွမ်မိန်းက ပြောဆိုလိုက်သည်။
အဆိုပါဒေသသည် အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်နေ့ကစပြီး ၁၃ ရက်နေ့အထိ NCA လက်မှတ်ထိုးသည့် RCSS/SSA အားအစိုးရ တပ်မတော်ကထိုးစစ်ဆင်သဖြင့် စစ်ဘေးရှောင် ၄၀၀၀ ထက်မနည်း ရှိခဲ့ပါသည်။ ရွာများအတွင်း အစိုးရစစ်သားများ နေထိုင်လှုပ်ရှားနေဆဲဖြစ်သည့်အပြင် မပေါက်ကွဲသေးသည့်လက်နက်ကြီးများ ၊ မိုင်းများ ရှိနေသေးသဖြင့် အကြောက် တရားနှင့် လွတ်လပ်မှုကင်းမဲ့သည့်အခြေအနေကြား နေထိုင်နေကြောင်း ရွာသားများပြောပြချက်အရသိရသည်။ https://bu rmese.shannews.org/archives/19040
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖာပွန်မြို့နယ်၊ မထောကျေးရွာအုပ်စု၊ မထောကျေးရွာရှိ အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းအုပ် ဆရာဖြစ်သူ ဦးမြင့်ဇော်ကို KNU ဘက်မှ အဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်ဟု (အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်)တွင် တပ်မတော်သတင်း မှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ကျောင်းအုပ်ဆရာ ဦးမြင့်ဇော်ကို KNU မှ ဖမ်းဆီးပြီး ၎င်း၏ သားဖြစ်သူကို KNU တွင် စစ်သားပြုလုပ်ရန် ထိကော်ထ ကျေးရွာ၌ ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်နေ့က လဲလှယ်ရေး ပြုလုပ်နေကြောင်း၊ ပညာရေးဆုံးရှုံးမည်ကို မလိုလား သည့် ဒေသခံ ရွာသားများမှ နီးစပ်ရာ တပ်စခန်းများမှတဆင့် တိုင်ကြားခဲ့ သည်ဟု တပ်မတော်၏ သတင်းထုတ်ပြန်မှု၌ ဖော်ပြထားသည်။ ထို့အပြင် အဆိုပါ ကိစ္စအပေါ် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းစစ်ဌာနာချုပ်က KNU ဗဟို နှင့် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့် မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန (NRPC) သို့ တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူ စာချုပ် (NCA) အခန်း(၃)၊ အပိုဒ် (၆)၊ စာပိုဒ်ခွဲ(၉)(ခ) ကို ဖောက်ဖျက်မှုအတွက် အဖမ်းဆီးခံထားရသည့် ကျောင်းအုပ်အား အမြန်ဆုံးပြန် လွှတ်ပေးရေး ကန့်ကွက်အကြောင်းကြားထားကြောင်းလည်း ဆက်လက်ဖော်ပြ ထားသည်။
အဆိုပါ ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ၎င်းကျောင်းအုပ်ဆရာကို အဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ ၎င်း၏ စိတ်ဆန္ဒအရ သား ဖြစ်သူ ကိုယ်စားသွားရောက်ပေးရန် KNU အောက်ခြေတာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ကရင် အမျိုးသားအစည်းအရုံး – KNU မူတြော်ခရိုင်(တပ်မဟာ ၅)ဘက်က တုံ့ပြန်ပြောဆိုသည်။ မူတြော်ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ပဒို စောထဲဒယ် က “အမှန်က အဓမ္မဖမ်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ တခြားရွာတွေလိုပဲ ကျနော် တို့ရဲ့ ဖြည့်တင်းအင်အား လိုအပ်ချက်မှာ အဲ့ဒီ ဆရာရဲ့သားလည်း ပါဝင်ရမယ်လို့ ကျေးရွာအုပ်စုက ရှုမြင်တဲ့ အပေါ်မှာ သူ့ရဲ့သားကိုယ်စား ဒီကျောင်းပိတ်ရက် ကာလမှာ သွားလုပ်မယ်ဆိုပြီး တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ လာဆွေးနွေးတယ်။ အဲ့မှာရွာဥက္ကဋ္ဌကော သူ့မိန်းမလည်းပါတယ်။ ဆွေးနွေး တဲ့အခါ သူ့သားမရောက် နိုင်သေးတဲ့ အချိန်မှာ သူခဏလာနေပေးမယ်။ အခုက ရပ်မိရပ်ဖကနေ မဲရုံကိစ္စအတွက် ပြန်လာ ကူဖို့ ပြောလာတော့ တပ်ရင်းကနေ ပြန်ခိုင်းလိုက်တယ်။ ဒီကိစ္စတွေပြီးလို့ သူကိုယ်တိုင်မဟုတ်ရင် သူ့သားတစ်ယောက် ယောက် ပြန်တက်လာရမယ်လို့ ပြောတော့ ဒါကိုသူက သဘောတူတဲ့အတွက် ရွာကိုပြန်သွားခိုင်းတာမျိုးပါပဲ”ဟု ကေအိုင်စီ သို့ ပြော သည်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပွားသည့် မထောကျေးရွာသည် KNU တပ်မဟာ (၅) ထိန်းချုပ် နယ်မြေ၊ ဒွယ်လိုးမြို့နယ် အတွင်း တွင်တည်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပြီး KNU တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်အရ ၎င်းတို့ထိန်းချုပ်နယ် မြေအတွင်း၏ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအသီးသီးရှိသော အိမ်ထောင်စု တစ်ခုစီတိုင်းရှိ အမျိုးသားတိုင်း စစ်မှုမ ထမ်းမနေရ မူဝါဒရှိကြောင်း KNUဘက်က ဆိုသည်။ KNU နှင့် အစိုးရ ၊ တပ်မတော်တို့အကြား NCA အပစ်ရပ်လက်မှတ်ထိုးခြင်း (၅)နှစ်ပြည့်သွားခဲ့သော်လည်း ယနေ့ အချိန်ထိ လုံခြုံရေးနှင့် တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ နယ်မြေပိုင်းခြားသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ မဆွေးနွေးနိုင်သေး သောကြောင့် KNU နှင့်တပ်မတော်အကြား အလားတူကိစ္စရပ်များ အကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီး အပြန်အလှန်ကန့်ကွက် တိုင်ကြာမှုများလည်း မကြာခဏ ပြုလုပ်ကြသည်။ http://kicnews.org/2020/10/%e1%80%b1%e1%80%92%e1 %80%9e%e1%80%81%e1%80%b6-
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD အနေနဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို အစကနေ အဆုံးတိုင် ပြန်လည် ပြင်ဆင်ရေး၊ စစ်အာဏာရှင် တိုက်ဖျက်ရေးနဲ့ လူမျိုးကြီးဝါဒ တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ် လို့ ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးခွန်ထွန်းဦး ကပြောပါတယ်။ ဒီနေ့ ကျရောက်တဲ့ SNLD ပါတီ တည်ထောင်ခြင်း ၃၂ မြောက်နေ့ နှစ်ပတ် လည် အခမ်းအနားကို အွန်လိုင်းကနေ ကျင်းပရာမှာ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခွန်ထွန်းဦးက တက်ရောက် မိန့်ခွန်းပြောခဲ့ တာဖြစ်ပါ တယ်။
ပါတီရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ လွှတ်တော်တွင်းနဲ့ လွှတ်တော်ပြင်ပ အားကောင်းဖို့လိုပြီး ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ SNLD ပါတီအနေနဲ့ ရာခိုင်နှုန်းများများနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ဖို့ လိုတယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။ ပါတီဝင်တွေ၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအနေနဲ့လည်း နိုင်ငံရေးဝမ်းစာပြည့်အောင် ဖြည့်ကြဖို့ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ က တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
SNLD ပါတီဟာ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၁၃၀ ကျော်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်ကြောင်း ကော်မရှင်က ကြေညာထားတာကို ကျင်းပပေးဖို့ ထပ်မံတောင်းဆို သွားမယ်လို့လည်း ပါတီအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးစိုင်းလိတ် ကပြောပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/ne ws/snld-chairman-said-they-need-to-win-election-to-amend-constitution-102620200 51222.html
ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက တချို့မဲဆန္ဒနယ်မြေတွေမှာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခွင့်ရအောင် တောင်းဆိုသွားမယ်လို့ ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ပြောလိုက်ပါတယ်။ ပေါက်တောမြို့နယ်နဲ့ မွတ်စလင် အများစုနေထိုင်ရာ မောင်တောမြို့နယ် အပါအဝင် စစ်တွေနဲ့ တောင်ကုတ်မြို့နယ်ထဲက ရပ်ကွက်ကျေးရွာတချို့မှာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခွင့်ရဖို့ စီစဉ်နေတာပါ။
စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေဖြစ်နေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လုံခြုံရေးအရ မကျင်းပနိုင်တဲ့ မဲဆန္ဒနယ်မြေတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီအထဲက ပေါက်တောနဲ့ မောင်တောမြို့နယ် အပါအဝင် စစ်တွေနဲ့ တောင်ကုတ်မြို့နယ်ထဲက ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာတချို့မှာ ရွေးကောက် ပွဲ ကျင်းပခွင့်ရဖို့ ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ ဒီမနက် စစ်တွေမြို့ ပြည်နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးမှာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ ဒီဆွေးနွေးချက်တွေကို ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဆီ တင်ပြသွားမယ်လို့ ရခိုင်ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်တင်လှိုင် ပြောပါတယ်။ ဒီနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်ဘူးလို့ အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်နေ့ကမှ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ကနေ ထုတ်ပြန်ထားတာ မြို့နယ် ၉ မြို့နယ်နဲ့ ကျေးရွာပေါင်း ၁၅ဝ ကျော်ရှိပါတယ်။
မွတ်စလင်အများစု နေထိုင်ရာ မောင်တောမြို့နယ်မှာဆိုရင် လက်ရှိ မဲပေးခွင့်ရှိသူ ၂၈၀၅၄ ဦးရှိတယ်လို့ မောင်တောမြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အေးမြတ်သူဇာကျော်က ပြောပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ မွတ်စလင် ဘယ်နှစ်ဦး ပါဝင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ သီးခြားစာရင်းမခွဲထားဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကတော့ မောင်တောမြို့နယ်မှာ မဲပေးခွင့်ရှိသူ မွတ်စလင် ၇၁ ဦး ရှိတယ်လို့ မောင်တောခရိုင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်ခဲ့ ဖူးပါတယ်။ ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ပြောဆိုချက်အရ – ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းနိုင်တဲ့ မြို့နယ်တွေနဲ့ ကျေးရွာတွေ မှာ ဒီနှစ် မဲပေးခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ ၁၂ သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီက အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးထွန်းအောင်ကျော်ကတော့ ပြည်သူတွေအတွက် တော်တော်လေးကို ဆုံးရှုံးမှုတွေ ဖြစ်လာမယ်လို့ ထောက်ပြပါတယ်။
အခုလို ရခိုင်ပြည်နယ်က မြို့နယ်တွေ၊ ရပ်ကွက်ကျေးရွားတွေတစ်ချို့မှာ ရွေးကောက်ပွဲ့ကျင်းပပေးဖို့ တောင်းဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရဲ့ သဘောထားကို RFA က ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမယ့် ဒီနေ့ညနေ ၅ နာရီခွဲအထိ တစ်စုံတစ်ရာ တုံ့ပြန်ပြောဆိုခြင်း မရှိပါဘူး။ ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ ဒီအစီအစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် လုံခြုံရေးနဲ့ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး မင်းသန့်ကို RFA က ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှာ သူ့အနေနဲ့ ဘာမှတ်ချက်မှ မပေးလိုကြောင်းပြောပြီး ဖုန်းချသွားခဲ့ပါတယ်။ တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ် ဇော်မင်းထွန်းကတော့ ဖုန်းလက်ခံဖြေကြားခြင်း မရှိပါဘူး။ https://www.rfa.org/burmese/news/goingtosubmitto heldelectionintwotownshipsandothe rs10262020091037
ရန်ကုန်တိုင်းကဲ့သို့ COVID-19 ရောဂါကပ်ဘေး အကြီးအကျယ် ကြုံတွေ့လျက်ရှိသည့် ဒေသတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပ သော်လည်း နယ်မြေလုံခြုံရေး မပျက်ယွင်း၊ COVID-19 ပျံ့နှံ့မှု စိုးရိမ်ဖွယ် မရှိသည့် တိုင်းရင်းသားပါတီများ အားကောင်း သော ပြည်နယ်ဒေသများတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု မရှိခြင်းက ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ သမာသမတ်ရှိမှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာရှိမှုနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုတို့ကို မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်စေသည်ဟု ညီနောင် တိုင်းရင်းသားပါတီများ ဖက်ဒရေးရှင်း (NBF) က အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်သည်။
ထို့ကြောင့် ကော်မရှင်၏ ရွေးကောက်ပွဲနယ်မြေ ဖျက်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ချက်ကို ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ကြောင်းနှင့် အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်ကို အချိန်မီ ပြန်လည် ပြင်ဆင်ပေးရန် တိုင်းရင်းသား မဟာမိတ် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်သည့် NBF က ထုတ်ပြန်သည်။“တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ UEC ရဲ့ သဘောထားက မျှတမှု မရှိဘူးလေ။ ဒါအကုန်သိပြီးသား။ UCE အနေနဲ့ ဒီဟာကို Fair မဖြစ်ဘူး။ အဲ့တော့ ပြန်လည် စဉ်းစားသင့်တယ်” ဟု NBF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ မူဝါဒရေးရာ ဦးဆောင်ကော်မတီဝင် ဦးဦးလှစောက ပြောကြားသည်။ NBF သည် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပါတီ အပါအဝင် တိုင်းရင်းသားပါတီ ၁၅ ပါတီဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် မဟာမိတ် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်သည်။
ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ကချင်၊ ကရင်၊ မွန်နှင့် ပဲခူး စသည့် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်း ခြောက်ခုရှိ မြို့နယ်အချို့မှ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု အချို့ တွင်လည်း ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည် မဟုတ်ကြောင်း ကြေညာချက်တွင် ပါရှိသည်။ အထက်ပါ ရွေးကောက်ပွဲ ပယ်ဖျက် မဲဆန္ဒနယ်များသည် တိုင်းရင်းသားပါတီများ ခိုင်မာအားကောင်းသည့် မဲဆန္ဒနယ်အများစု ဖြစ်သည်ကို ဝမ်းနည်းဖွယ်တွေ့ရှိ ရပြီး ယင်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူများအနေဖြင့် မဲပေးခွင့် အခွင့်အရေးလည်း ဆုံးရှုံးကြမည်ဟု NBF ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြ ထားသည်။ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်သော အခြေအနေမရှိ၍ တိုင်းနှင့် ပြည်နယ် ခြောက်ခုရှိ မဲဆန္ဒနယ်အချို့ကို ပယ်ဖျက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကော်မရှင် ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြသည်။ https://news-eleven.com/a rticle/196240
ကရင်ပြည်နယ် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် မွန်ပြည်သစ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေ တောင်ပေါက်ဒေသ ၂၄ ရွာတွင် နိုင်ငံရေး ကိုယ်စား လှယ်များ လွတ်လပ်စွာဝင်ရောက် မဲဆွယ်စည်းရုံးနိုင်ကြောင်း မွန်ပြည်သစ်ပါတီ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ကော်မတီ(ဗဟို) က ယမန်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ထိုသို့ မဲဆွယ်စည်းရုံးရာတွင် လူ ၃၀ ဦးထက် မပိုစေရန်နှင့် ကျန်းမာရေးဌာနများ၏ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ စုဝေးစည်းရုံးရမည်ဖြစ်သည်။ ယခင်ထုတ်ပြန် ချက်အရ အဆိုပါတောင်ပေါက်ဒေသ ၂၄ ရွာများတွင် အခြားမြို့နယ်မှလာရောက်သော နိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့ဝင်များအား မဲဆွယ်စည်းရုံး ရေးဝင်ရောက်ခွင့်မပြုခဲ့ရာမှ ပြန်လည်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် ပြည်တွင်း Stay at Home သတ်မှတ်ခံထားရသည့်ဒေသမှ မိမိနေရပ်သို့ပြန်လာလိုပါက အနီးစပ်ဆုံးရှိသည့် မွန်ပြည် သစ် ပါတီရုံးများတွင် ခရီးသွားလာခွင့်ထောက်ခံချက်ရယူရမည်ဖြစ်ပြီး မိမိနေရပ်သို့ပြန်ရောက်ပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်နှင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများသို့ အသိပေး၍ မိမိနေအိမ်/ခြံအတွင်း Stay at Home (၇) ရက်ကြာ နေထိုင်ရမည်ဟု ဆိုသည်။ ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်း ကူးစက်မှုမြန်ဆန်လာသဖြင့် ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းကိစ္စများ ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းကိစ္စမှ အပ အရပ် ဖက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် CBO, CSO, NGO, INGO များ ထိန်းချုပ်ဧရိယာအတွင်း ဝင်ရောက်ခွင့် မပြုကြောင်း မွန်ပြည်သစ်ပါတီ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးကော်မတီ(ဗဟို) က ၂၀၂၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့စွဲဖြင့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်၍ ထုတ်ပြန်ထားသည်။
အလားတူ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့တွင် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရန် မဲရုံများအတွက် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနတို့ ညှိနှိုင်းထုတ်ပြန်ထားသော စည်းမျဉ်း၊ စည်ကမ်းများ နှင့် ကိုက်ညီအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လူ ၃၀ ဦးထက်ပို၍ စုဝေးခြင်းကိုခွင့်ပြုကြောင်း ယမန်နေ့တွင် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးက လက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ http://burmese.monnews.org/20 20/10/26/%e1%80%80 %e1%80%bc%e1%80%ac%e1%80%a1%e1%
ပူတာအိုလွင်ပြင်မှာ ကချင်ပြည်နယ်အခြေစိုက် KSPP ပါတီက အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်နေ့က ၀န်းရံသူအင်အား ၁,၃၀၀ လောက်နဲ့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် အင်အားပြလှည့်လည်မဲဆွယ်ခဲ့တယ်လို့ KSPP ပါတီ ပူတာအိုမြို့နယ်အတွင်း‌ရေးမှူး ဦးအောင်ခမ်း က ပြောပါတယ်။ အခုလိုအင်အားပြတာဟာ ကချင်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ပါတီ (KSPP)က ပါတီအသစ်ဖြစ်တာ ကြောင့် လူထုတွေသိအောင် လှည့်လည်မဲဆွယ်တာဖြစ်ပြီး KSPP ပါတီအနေနဲ့ အင်အား တောင့်တင်းမှသာ ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်တာကြောင့် ပြည်သူလူထု သိရှိလာအောင် ခုလိုအင်အားပြတာလို့ ဦးအောင်ခမ်းက ပြောပါတယ်။
“လမ်းကြောင်း ၃ ကြောင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ကာ အင်အားပြလှည့်လည် သွားမှာဖြစ်ပြီး ပထမလမ်းကြောင်းအနေနဲ့ ပူတာအို မြို့နယ် အထက် ဆန်ဂေါင်ထိ ပြီးတော့ လုံရှာယန်၊ နောင်ခိုင် စတဲ့နေရာတွေမှာ လှည့်လည်သွားမှာပါ”လို့ ဆိုပါတယ်။ အင်အားပြ၀န်းရံသူတွေက ပါတီဝင်တချို့နဲ့ ဒေသခံပြည်သူတွေဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာလဆန်းမှာလည်း နောက်ထပ်အင်အားပြ လှည့်လည်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ပါတီ(KSPP) ဟာ ပူတာအိုခရိုင်အတွင်းမှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့ ပြည်နယ် လွှတ်တော် စတဲ့နေရာတွေအတွက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁၆ ဦး ယှဉ်ပြိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ http://burmese.dvb .no/archives/419417
လွိုင်ကော်မြို့နယ်ရှိ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားများနေထိုင်ကြသည့် ကျေးရွာများနှင့် ရပ်ကွက်တချို့တို့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသား အဖွဲ့ ချုပ် ( PNO ) ပါတီက မော်တော်ယာဉ်များ၊ဆိုင်ကယ်များအသုံးပြုကာ အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်နေ့ ၉ နာရီခန့်က ဝန်းရံသူ ၁၅၀၀ ခန့်ဖြင့် လှည့်လည်မဲဆွယ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ထိုသို့လှည့်လည်မဲဆွယ်ရာတွင် လွိုင်ကော်မြို့ရှိ နွားလဝိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ပဒါးညေးကျေးရွာတွင် လူစုဝေးခဲ့ပြီး ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားများနေထိုင်သည့် ကျေးရွာ ၂၈ ရွာနှင့် ရပ်ကွက် သုံးခုတို့တွင် လှည့်လည်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် လိုက်ပါဝန်းရံသူများအား ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် နှာခေါင်းစီးများတပ်ရန်၊ အခြားသောအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ပါတီများအပေါ် စကားပြောဆိုမှုများဆင်ခြင်ရန်၊ဟစ်အော်မှုများ မပြုလုပ်ရန်တို့ကို လိုက်နာစေ ချင်ဖြင့် မဲဆွယ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအုန်းဖေလေးက ပြောသည်။
ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအနေဖြင့် ၎င်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရဒေသတွင် ၂၀၁၀၊၂၀၁၅ ခုနှစ်က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် အထွေ ထွေရွေးကောက်ပွဲများတွင် တခြားသော မဲဆန္ဒနယ်များတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော်လည်း ၂၀၂၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကယားပြည်နယ်၌ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းသည် ပထမဆုံးဖြစ်ကြောင်းလည်း ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအုန်းဖေလေး က ပြောသည်။“လက်ရှိအခြေအနေမှာ ပါတီကြီးတွေနဲ့ယှဉ်ပြိုင်ရတဲ့အခါကျတော့ ပထမဆုံးခြေလှမ်းအနေနဲ့ ကျနော်တို့ ပအိုဝ်းအမျိုးသားပါတီက ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တာပါ။အိုဝ်းတိုင်ရင်းသားဒေသခံအားလုံးရဲ့ဝန်းရံမှုနဲ့ ကျနော်တို့ က ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မှာဖြစ်တယ်ဟု မဲဆွယ် စည်းရုံးရေး မထွက်ခွာမီ ဦးအုန်းဖေလေးက ပြောသည်။
ကယားပြည်နယ်၊လွိုင်ကော်မြို့နယ်တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအနေဖြင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ် လောင်း ဦးအုန်းဖေလေး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁၁) ခွန်အောင်ဇေယျ၊ ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ခွန်ကျော်မင်းထွန်းနှင့် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ဒေါ်ဝင်းပြည့်မွန် တို့ က ယှဉ်ပြိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်သည် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဖြစ်သည့် ဟိုပုန်းမြို့နယ် ၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်တို့အပြင် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားအများစုနေ ထိုင်ကြသည့် ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် မဲဆန္ဒနယ် ၃၅ နေရာအထိ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွား မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ http://www.mizzimaburmese.com/article/74874
လာမည့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် နယ်မြေမအေးချမ်းသော ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝဒေသအချို့တွင် ရွေးကောက်ပွဲမပြု လုပ်သင့်ဟု တပ်မတော်က အကြံပြုခဲ့သော်လည်း UEC က ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပချင်သည့်အတွက် တပ်မတော်ဘက်က ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရကြောင်း တပ်မတော်သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ယနေ့ အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားသည်။ လုံခြုံရေးအရ မဲပေးနိုင်သည့် အခြေအနေမရှိဟု တပ်မတော်က အကြံပြုခဲ့သော မြို့နယ်ပေါင်း ၃၉ မြို့နယ်အထိ ရှိခဲ့ကြောင်း၊ တပ်မတော်က လုံခြုံရေးပေး လျှင် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်သည့်မြို့နယ် ၂၀ အထိ ရှိသည်ဟု အကြံပြုခဲ့ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ပြောသည်။ သို့သော် တပ်မတော်က အကြံပြုရသည့်အခြေအနေသာဖြစ်ပြီး ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ဆုံးဖြတ်ရသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပဖြစ်၍ မဲပေးခွင့်ဆုံးရှုံးရသည့်သူများထဲတွင် တပ်မတော်သားများလည်း ပါဝင် ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ် ၉ မြို့နယ် နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် ရှိ မြို့နယ် ၆မြို့နယ်တို့ကို လုံခြုံရေးအရ ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပရန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက မှတ် ချက်ပေးခဲ့ကြောင်း အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်နေ့ နိုင်ငံတော် သမ္မတအိမ်တော်တွင် ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်း ပွဲတွင် သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးက ပြောဆိုထားသည်။
UEC ၏ ရွေးကောက်ပွဲ မပြုလုပ်နိုင်သောနေရာများ ကြေညာခဲ့သည့်အတွက် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်အတွက် တစ် နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအရ ၃၃ဝနေရာရှိသည့်အနက် ကျင်းပမည့် နေရာပေါင်း ၃၁၅ခုသာရှိပြီး မကျင်းပနိုင်သည့်နေရာ ၁၅ ခုရှိကြောင်း၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အတွက် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေဖြင့် ၁၆၈ နေရာရှိအနက် ကျင်းပနိုင် သည့် မဲဆန္ဒနယ် ၁၆၁ နေရာရှိပြီး မကျင်းပနိုင်သည့် မဲဆန္ဒနယ် ၇ နေရာကာ တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်လွှတ်တော် ၆၄၄ နေ ရာရှိသည့်အနက် ၆၁၄ နေရာသာကျင်းပနိုင်ခြင်းရှိပြီး မကျင်းပနိုင်သည့်နေရာ ၃ဝခု ရှိကြောင်း သမ္မတရုံးထံမှ သိရှိရသည်။ https://www.khitthitnews.com/2020/10/%e1%80%95%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80
အိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံနှင့် အဓိကကုန်သွယ်မှု ပြုလုပ်နေသည့် မြဝတီနယ်စပ် မြန်မာ-ထိုင်း အမှတ် ၂ ချစ်ကြည်ရေး တံတားမှ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုကို ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်နေ့စ၍ ကုန်စည်ဖြတ်သန်းမှုကို ယာယီရပ်ဆိုင်းလိုက်သည့် အတွက် လက်ရှိတွင် ဒေသတွင်းစားသုံးကုန်ဈေးကွက်အပေါ် ရိုက်ခတ်မှုရှိနေကြောင်းသိရသည်။ Covid-19 ရောဂါကူးစက် ပြန့်ပွားမှု ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးအတွက် ထိုင်းနှင့်မြန်မာ နှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုဖြင့် ကုန်သွယ်မှု ယာယီရပ်ဆိုင်းထားသလို covid- 19 ဂယက်ကြောင့် ပြည်တွင်း၌လည်း အသွားအလာ ကန့်သတ်ထားသည့်အတွက် ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူရောင်းချရာ တွင်အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း ၊ ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာခြင်းတို့ရှိနေသည်ဟု ယခင်ထိုင်းဘက်ခြမ်းကနေ၍ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို မြန်မာဘက်သို့ တင်သွင်းပြီး မြဝတီမြို့ ဘုရင့်နောင်ဈေးတွင် ပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးနေသည့် ကုန်စိမ်းဒိုင်များထံမှ သိရ သည်။
ကရင်လေး ကုန်စိမ်းဒိုင်မှ မအေးအေးထွေးက “အရင်ကဆိုရင် ထိုင်းဘက်ခြမ်းမှာ ဝယ်ယူခဲ့စဉ်သခွားသီး ၁၀ ကီ လိုကို ကျပ် ၃၅၀၀ / ၄၀၀၀ ကျပ်သာ ရှိနေပေမယ့် ယခုအခါမှာတော့ မြန်မာပြည်အောက်ဘက်ခြမ်းကနေ သွားဝယ်တဲ့ လမ်းခရီးမှာ သွားရေးလာရေးအခက်အခဲအပြင် သီးနှံဈေးကလည်းကြီးလို့ အခုဆိုရင် ၁၀ ကီလိုပို ၆,၀၀၀ ကျပ်နဲ့ ပြန်လည်ရောင်းချ နေရတယ်။ အခြားကုန်စိမ်းသီးနှံတွေလည်း အလားတူ ဈေးတိုးမြှင့်ရောင်းချနေရတယ်”ဟုပြောသည်။ ၎င်းအပြင် ဈေးသွား ဈေးဝယ်လျော့နည်းလာသလို ဈေးဦးမပေါက်သည့်နေ့ပင်ရှိကြောင်းလည်း မြဝတီမြို့ဘုရင့်နောင်ဈေးအတွင်း အထည် နှင့် အခြားလူသုံးကုန်ပစ္စည်းဆိုင်မှ ဈေးသည်များက ပြောသည်။ မြ၀တီမြို့ဘုရင့်နောင်ဈေးမှ သစ်သီးမျိုးစုံရောင်းချသူ ဒေါ်ခင်ဆွေသက် က“ ပြည်တွင်းကနေမှာ ယူရောင်းချတာ ခရီးဝေးတော့ သစ်သီးတွေ နာလာသလို ဈေးလည်းပိုလာတယ်။ အသီးတွေလည်း မလတ်ဆတ်တော့ရောင်း ပန်းမလှဘူး။ ယခင်ထိုင်းဘက်က၀ယ်ရောင်းရာမှာ သယ်ယူတဲ့နေရာက နီးတယ် လေ။ တစ်နေ့စာကုန်သလောက် သွားဝယ်တော့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ဖြစ်လို့ လူကြိုက်များပါတယ်။ ဈေးနှုန်းလည်း သက်သာတဲ့အတွက် ပြန်ရောင်းရတာပိုပြီးအဆင်ပြေတာပေါ့။ ဒါကြောင့်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ မြဝတီနယ်စပ်တံတား အမြန်ဆုံး ပြန်ဖွင့်ဖို့ ကိုပဲ မျှော်လင့်နေရတယ်”ဟု ဆိုသည်။
မြ၀တီဘက်တွင် ဟင်းသီးဟင်းရွက် ၊သစ်သီး၊ အသား၊ ငါး၊ စားသောက်ကုန်အချို့ဈေးတက်လာသလို ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက် ဈေးကွက်တွင် မြန်မာဘက်မှ ၀ယ်လိုအားမရှိ၍ ကုန်ဈေးနှုန်း ထိုးကျသွားကြောင်းလည်း သိရပြီး လာမည့် အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် အဆိုပါ ထိုင်း-မြန်မာ အမှတ် ၂ တံတားကို နှစ်နိုင်ငံကုန် သွယ်မှုပြန် လည်ပြုလုပ်နိုင်ရန် ထိုင်းဘက်ခြမ်းက ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း သိရသည်။ http://kicnews.org/2020/10/%e1%80 %bb%e1%80%99 %e1%80%9d%e1%80%90%e1%80%ae%e1%
မွန်ပြည်နယ်၊ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ် ပငကျေးရွာ လူငယ်မျိုးဆက်သစ် စက်ဘီးအဖွဲ့က မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ MUP ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေးအတွက် စက်ဘီးစီးနင်း၍ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းအစွန်ရှိ မွန်ကျေးရွာများသို့ ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် လှည့်လည်အင်အားပြခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အသွားအပြန် မိုင် ၅၀ ခန့်ခရီးအကွာအဝေး ရှိသည့်အတွက် အသက် (၁၄) နှစ်အထက်လိုက်ပါရန်နှင့် လူဦးရေ (၅၀) အထိသာ စာရင်းပေးသွင်းသတ်မှတ်ထားသည်ထက် ဝန်းရံသည့်လူငယ်များက ပိုမိုများပြားနေကြောင်း စက်ဘီးစီးအဖွဲ့ဝင် မင်းဂျာနွန်က ဆိုသည်။ “ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ကျွန်တော်တို့စက်ဘီးအဖွဲ့က တစ်နိုင်တစ်ပိုင်အားပေးခွင့်နှိုးဆော်ခွင့်ရလို့ ကျေနပ် မိတယ်၊ နောက်ပြီး မွန်လူငယ်တွေလည်း ကျန်းမာရေးလိုက်စားမှု ရှိကြောင်းကိုပြသချင်တယ်၊ မွန်လူမျိုးတိုင်း မွန်ပါတီကို မဲပေးဖို့လည်း နှိုးဆော် တိုက်တွန်းချင်တယ်”ဟု မင်းဂျာနွန် ပြောသည်။
မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ၏ အင်္ကျီ၊ အလံ Mask, Sticker များကိုယ်စီ တပ်ဆင်၍ မဲဆွယ်အောင်နိုင်ရေး သီချင်းများ ဖွင့်လှစ်ကာ ပင -သံဖြူဇရပ်- ရွာသစ်-ကရုပ္ပိ-ဝဲဂလောင်း-အံခဲ-ကော့လေး-ထင်းရူး၊ ကျောင်းရွာ၊ အနင်း ကျေးရွာများသို့ အသွားခရီးနှင့် အပြန်ခရီး ပငကျေးရွာအထိ စီးနင်းလှည့်လည်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။“ကိုယ့်မွန်ပါတီအတွက် အားပေးခွင့်ရလို့ ဝမ်းသာတယ်၊ ပြည်သူတွေကလည်း ပြန်လည်အားပေးတာတွေ့ရတော့ ပိုပြီးတော့ပီတိဖြစ်မိတယ်၊ ကိုယ့်မွန်လူမျိုးတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ် နှိုးဆော် ချင်လို့ စီးနင်းဖြစ်တာပါ”လို့ စက်ဘီးစီးနင်းလိုက်ပါသူ မိအိန္ဒြာပွင့်ဖြူ ကပြောသည်။ ပငလူငယ်မျိုးဆက်သစ် စက်ဘီးအဖွဲ့ ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး လူငယ်များ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းတတ်ရန်၊ စည်းလုံးမှုရှိရန်နှင့် လူငယ်များ၏ စိတ်ခန္ဓာကျန်းမာရေးအတွက် ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ http://burmese.monnews.org/2020/10/23/%e 1%80%99%e1%80%bd%e1%80%94%e1%80%ba%e1%8
သက်ငယ်မုဒိန်းကျူးလွန်ရန်အားထုတ်သူကို အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်နေ့မနက်တွင် ဟားခါးခရိုင်တရားရုံးမှ ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေပုဒ်မ ၃၇၆ အရ ထောင်ဒဏ် (၁၀)နှစ် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ကြောင်းသိရသည်။
ကလေးငယ်၏ မိခင်မှ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်ပြီး “ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်သည့်အပေါ် ကျေနပ်ပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ တရားခံက ကျွန်မတို့ရဲ့ရန်သူလည်းမဟုတ်ဘာဘူး၊ပိုပြီးအပြစ်ပိုကြီးပါစေဆိုပြီး သဘောထားတာလည်းမရှိဘူး၊ ကျွန်မတို့လိုချင်တာက တရားမျှတမှုပဲဖြစ်ပါတယ်၊ ဥပဒေအရပဲ ဆောင်ရွက်တာပဲလိုခြင်တာဖြစ်တယ်၊တရားသူကြီးကလည်း ကျွန်မတို့ပြောတဲ့ဟာနဲ့သူတို့ပြောတဲ့အပေါ်ကို သုံးသပ်ပြီးတော့ ဒီဟာက တကယ်ကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ ဥပဒေ အရ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တဲ့အပေါ်ကျေနပ်မှုရှိပါတယ်”ဟု Chin World Media သို့ပြောသည်။ အသက် ၄ နှစ် အရွယ်မိန်း ကလေးအပေါ်ကျူးလွန်သောယခုသက်ငယ်မုဒိန်းမှုသည် ၂၄ရက် ၈လပိုင်းတွင် အမှုစတင်ဖွင့်ပြီး ၊ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက် နေ့ တွင် အမှုစစ်ပြီး ယနေ့အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် တရားခံကို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရသည်။
“ဒီလိုကိစ္စမျိုးက ကျွန်မတို့ပြစ်ဒဏ်ကို တရားမျှတမှုပြည့်ဝစွာချစေချင်တယ်ဆိုတာ ကျွန်မတို့က တရားခံကို မုန်းလို့လည်း မဟုတ်ဘူး ၊ဒါပေမယ့် ဒီလိုကိစ္စမျိုးက တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ နောက်တစ်ကြိမ်ဖြစ်ဖို့အလားလာက သိပ်များတယ် ဒါကြောင့် မို့လို့ အမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ တရားမျှတမှု ပြည့်ဝစွာ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်တယ်ဆိုရင် နောက်တစ်ကြိမ်အလားတူ ကိစ္စမျိုး မဖြစ်အောင် အများကြီးအတားအဆီးဖြစ်သွားတယ်၊ကြိုတင်ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်၊ သင်ခန်းစားယူစရာအမျာားကီး ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့၊ တရားမျှတယ် မမျှတဘူးဆိုတာက ဥပဒေက သတ်မှတ်ပြီးသားအကုန်ရှိပြီးသားဆိုတော့ ဥပဒေက သူ့လမ်းကြောင်းနဲ့သူ သွားတာဖြစ်တယ်၊အခုလိုမျိုးအချိန် ၂လလောက်က ဒီ Victoria ကိစ္စတောင်မှ တစ်နှစ်ကျော်ကြာတဲ့ အချိန်မှာ တရားခံကပျောက်သွားသလို ဖြစ်သွားတယ်၊ ဒီကိစ္စက အချိန်ခဏလေးမှာ အပြီးအပျတ် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တဲ့ အထိဖြစ်သွားတော့ ဒီ Case မှာ ကျွန်မတော့ တရားစီရင်ရေးဘက်မှာ တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေရော အထူးသဖြင့် ကျွန်မတို့ စိတ်ရောကိုယ်ရောကူညီပေးတဲ့ အစိုးရဘက်က ပေးတဲ့ ခရိုင်ဥပဒေအရာရှိ နောက်တစ်ခုက Legal Support Team ကော်မတီဆိုတာလည်းရှိတယ်၊သူတို့ဆိုလို့ရှိရင် အခမဲ့ကူညီပေးတဲ့အသင်းလည်းဖြစ်တယ်၊ဒီအဖွဲ့က ရှေ့နေတွေကိုလည်း ကျွန်မတကယ်ကို ကျေးဇူးတင်ချင်တယ်၊” ဟု ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့မှ ဌာနတိုင်းရင်းသားဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် Program Director Mai Thin Yu Mun မှ ပြောသည်။ https://www.bnionline.net/ mm/news-76534
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရရှိပါက အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပြည်သူလူထုကန့်ကွက်နေတဲ့ လွိုင်ကော်မြို့က ခဲသတ္တု သန့်စင်စက်ရုံတည်ဆောက်နေမှုအပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်သွားမည်မယ်လို့ ကယားပြည်နယ်ဒီ မိုကရက်တစ်ပါတီ (KySDP) မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေက ကတိပေးပြောကြားခဲ့သည်။
“သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းလန်းစိုပြေရေးနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် တစ်စိုက်မတ်မတ်လုပ် သွားမယ် လို့ ကတိပေးတယ်။ ခဲသတ္တုသန့်စင်စက်ရုံပုံစံမျိုးကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးတော့မှ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ တွေအတွက် ဘယ်လောက်ထိ အကျိုးရှိစေသလဲ၊ ဘယ်လောက်ထိအကျိုးပျက်ဆီးစေသလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကို ပြန်ပြီး လေ့လာသုံးသပ်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြင်တယ်။ ဒါကြောင့် ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို မဲပေးခဲ့လို့ လွှတ်တော် ထဲရောက်သွားမယ်၊ အစိုးရအဖွဲ့ထဲရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီစီမံကိန်းတွေကို ပြန်ပြီးတော့မှ သုံးသပ်နိုင်ဖို့အတွက် တကယ်ကော သူတို့တွေ EIA/SIA ပုံစံမျိုးတွေ တကယ်ကောလုပ်သလားပေါ့။ EIA၊ SIA နဲ့မပြီးဘူး CRA HIA တို့လိုမျိုး အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော။ အဲဒါတွေနဲ့ ဘယ်လောက်ထိ စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီးတော့မှ သုတေသနလုပ်ပြီးတော့မှ ဒီစက်ရုံတွေ လည်ပတ်ဖို့အတွက် ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကို ပြန်လေ့လာပြီးတော့မှ ပြန်သုံးသပ်ပြီးတော့မှ ရပ်နားသင့်/မသင့် မဟုတ် လို့ရှိရင် ရွေ့ပြောင်းသင့်/မသင့် ဆုံးဖြတ်ရလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ယုံကြည်တယ်ပေါ့။ ဒါတွေကိုလည်း တစ်စိုက် မတ်မတ် လုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ကတိမျိုး ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေးချင်ပါတယ်” ဟု စတီဗင် (ခ) ထွန်းထွန်းက ပြောသည်။
ခဲသတ္တုသန့်စင်စက်ရုံကို Global South Industrial Co.Ltd နှင့် ပြည်တွင်းက ရတနာကုဋေသိုက်ကုမ္ပဏီလိမိတက်တို့ ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်ပြီး ခဲမဖြူ၊ အဖြိုက်နက်နှင့်ရောရာသတ္တုတွေကို ကုန်ချောထုတ်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်ဖို့ သတ္တု သန့်စင်စက်ရုံတည်ဆောက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုစီမံကိန်းအတွက် Global South Industrial Co.Ltdအနေဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၄၅ သန်း (စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏ၏ ၉၀%)၊ ရတနာကုဋေသိုက် ကုမ္ပဏီလိမိတက် အနေ ဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ သန်း (စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံပမာဏ ၏ ၁၀%) စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ စီမံကိန်းအတွက် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ထံကနေ ခွင့်ပြုမိန့်အမိန့် (၁၆၈/၂၀၁၉) ဖြင့် နှစ်၅၀ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၆ ရက်နေ့က ရရှိထားပြီး လုပ်ငန်းကိုအကောင်အထည်ဖော် ဆောင် ရွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းက “ဒီစက်ရုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူထုတွေက မသိနားမလည်ခဲ့ဘူး။ ကုမ္ပဏီတွေက လက်ရှိ ဦးဝင်းမော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Global South Industrial Co.ltd လည်း EIA၊ SIA လုပ်ထားတာလည်း ဘာမှမရှိဘူး။ ပြီးတော့ HIA ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ လေ့လာဆန်းစစ်ချက်တွေ သူတို့ဘားမှမလုပ်ဘူး။ အဲဒါကြောင့် မလုပ်ဘဲနဲ့ ဒီစက်ရုံကို MIC က ဘယ်လိုလုပ် ခွင့်ပြုမှုပေးလဲဆိုတာ ကျတော့်အနေနဲ့စိုးရိမ်မှုဖြစ်တယ်” လို့ပြောပါတယ်။
ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက ပြည်နယ်အခြေစိုက်တိုင်းရင်းသားပါတီဖြစ်ပြီး ကယားပြည်နယ် မြို့နယ် (၇) မြို့နယ် ရှိ မဲဆန္ဒနယ် ၃၄ နေရာအနက် ၃၀ နေရာမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ https://www.bnionline.net /mm/news-76537
Stay at home ကြေညာနိုင်သည့် ကချင်ပြည်နယ်မြို့နယ်နှစ်ခုတွင် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကို တက်သုတ်ရိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ရကြောင်း မြစ်ကြီးနာမြို့နယ် တိုင်းလိုင် (ရှမ်းနီ) အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ ဥက္ကဌ ဦးစိုင်းတင်မောင်လွင်ကပြောသည်။ လက်ရှိတွင် ကချင်ပြည်နယ် မိုးညှင်းမြို့နယ်နှင့် ဖားကန့်မြို့နယ်များကို ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ Stay at home သက်မှတ် ထားပြီး ကိုဗစ်ဖြစ်ပွားမှုများရှိနေသည့် မြစ်ကြီးနားနှင့် ဝိုင်းမော်မြို့နယ်များနှစ်ခုတွင်လည်း Stay at home သတ်မှတ်လာ နိုင်သဖြင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကို အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်တွင် အလျှင်အမြန် ပြုလုပ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
“ကျွန်တော်တို့ကတော့ သေသေချာချာစနစ်တကျလေး စီစဉ်ပြီးတော့မှ အင်အားများများလေးလုပ်ချင်တာ။ ကိုယ်အမျိုးသား ရေးအတွက်ဆိုတော့ ဒါပေမယ့်လည်း Stay at home ကျမ်းမာရေးကိစ္စလဲရှိတော့ မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်လိုက်ရတဲ့ သဘော ပေါ့” ဟု မြစ်ကြီးနာမြို့နယ် တိုင်းလိုင် (ရှမ်းနီ) အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ ဥက္ကဌ ဦးစိုင်းတင်မောင်လွင် က ပြော သည်။ အဆိုပါ မဲဆွယ်စည်းရုံးခြင်းကို မြစ်ကြီးနာမြို့နယ် ရှမ်းနီပါတီနှင့် ဝိုင်းမော်မြို့နယ် ရှမ်းနီပါတီတို့ပူးပေါင်းကာ အင်အား သုံးထောင်ကျော်ဖြင့် မြစ်ကြီးနားမြို့မှ ဝိုင်းမော်မြို့အထိ စီတန်းလှည့်လည်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
တိုင်းလိုင် (ရှမ်းနီ) အမျိုးသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး (ကျားနီ) ပါတီသည် ရွေးကောက်ပွဲတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လောင်း ၄၁ ဦး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ပြီး မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်တွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း လေးဦး၊ ဝိုင်းမော် မြို့နယ်တွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း သုံးဦးနှင့် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားရေရာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ဦး၊ ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦး ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-76530
စစ်အစိုးရလက်ထက် က မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားက သျှမ်းဘာသာစကားနဲ့ သျှမ်းလူမျိုးတွေအတွက် သတင်းတင် ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ သူတဦးကို မှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ည (၈)နာရီ သတင်းကြေညာမှုအပြီး တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး ညီညွတ် ရေး သီချင်းကို ရုပ်မြင်သံကြားမှာ သျှမ်းဘာသာဖြင့် သီဆိုပေးခဲ့တဲ့ နန်းဆာဥ ကို သျှမ်းလူမျိုးတွေ သာမက မြန်မာလူမျိုး အသိုင်းအဝန်းမှာ ချစ်စရာဟန်ပန်နဲ့ ထင်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့သူမဟာ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ်(SNLD)ပါတီ ကိုယ်စားပြုပြီး ၂၀၂၀ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ် သျှမ်းပြည် အရှေ့ပိုင်းတာချီလိတ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) မှာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပိုင်မှာပါ။
“ ကျမ က ပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကို ရှေ့တန်းကနေ မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ပေးပြီး ဖြေရှင်းပေး ချင်တဲ့အတွက် နိုင်ငံရေးဘက်ကို ခြေလှမ်းလှည့်လာခဲ့တာပါ” လို့ နန်းဆာဥ က ဆိုပါတယ်။ သူမ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ သျှမ်းရှေ့ မှာဆိုရင် ပြဿနာတွေ၊ ဥပဒေမဲ့မှုတွေ ရှုပ်ထွေးမှုပေါင်းများစွာရှိပြီး ထိုပြဿနာတွေကို ပြည်သူရဲ့ရှေ့တန်းကနေ ရပ်တည် ဖြေရှင်းပေးချင်တယ်လို့ ပြတ်သားစွာ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ နန်းဆာဥ ဟာ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်ပြီး ကတည်းက အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအောက်ရှိ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးမှာ အငယ်တန်းစာရေး အနေနဲ့ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သူ တဦးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမှ တစ်ဆင့် အစိုးရပိုင် မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားဌာနမှာ သျှမ်းဘာသာ ရေဒီယိုအသံလွှင့် အစီအစဉ် တင်ဆက်သူအဖြစ်လည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး အစိုးရဝန်ထမ်းမှာ လုပ်သက် ၁၆ နှစ် ရှိခဲ့သူ တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ အစိုးရအလုပ်မှရပ်နားလိုက်ပြီး သျှမ်းပြည် လူထု အကျိုးအတွက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းထဲကနေပြီး လယ်ယာမြေအရေး၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအရေး တွေကို တက်ကြွစွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သျှမ်းရှေ့ ပြဿနာ များစွာထဲက အကြီးမားဆုံးပြဿနာ နောက်တခုကတော့ ၂၀၁၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ ဓာတ်သတ္တု တူးဖော်မှုတွေ၊ ကျောက်မီးသွေး တူးဖော်မှုတွေကြောင့် ကျေးရွာပေါင်းရဲ့ လယ်ယာမြေ ပျက်စီးမှုတွေ တောတောင်သဘာဝ သယံဇာတ ပျက်စီးမှုတွေကြောင့် ယခင်မကြုံဖူးတဲ့ ရေကြီးမှုပြဿနာဟာလည်း လွှတ်တော်အမတ်လောင်းနန်းဆာဥ အတွက် စိန်ခေါ်မှုတခုပါပဲ။“သတ္တုတူးဖော်လို့ ထွက်လာတဲ့ မြေစာပုံတွေကြောင့် သူတို့ရဲ့လယ်ယာမြေတွေ ရေလွှမ်းမိုး တာတွေ ဖြစ်လာတယ်။ သတ္တုတူးဖော်မှုကြောင့် ပြည်သူတွေရဲ့ လယ်ယာမြေတွေ ထိခိုက်နစ်နာဆုံးရှုံးတာတွေကိုတွေ့ ရတယ်”လို့ နန်းဆာဥ က စိတ်မကောင်းစွာဖြင့် ပြောပါတယ်။ ၂၀၂၀ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲမှာ နန်းဆာဥ အနေ ဖြင့် အနိုင်ရခဲ့မယ်ဆိုရင် တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု ကင်းမဲ့နေပြီး၊ အမျိုးသမီးငယ်တွေ လူငယ်ကုန်းခံရမှုများတဲ့နယ်မြေအတွက် လွှတ်တော်ထဲမှာ အမျိုးသမီးနှင့် သက်ဆိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး၊ ကလေးသူငယ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခွင့်အရေးကိစ္စ၊ ကျေးလက်နေ ပြည်သူ လူထုရဲ့ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ဆောင်ရွက်ပေးချင်ကြောင်း သူမ ကချပြလိုက်ပါတယ်။ သူမအနေနဲ့ ကတော့ တာချီလိတ်ပြည်သူလူထုရှေ့ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ကာ ဒေသ ပြဿနာတွေ၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ကိစ္စတွေကို ဖြေရှင်းသွားဖို့အတွက် သူမကို မဲပေးကြရန်လည်း တိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ https://burmese.shannews.org/a rchives/19054
မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့နယ်သို့ အခြားဒေသမှ ရောက်ရှိလာပြီး ရက် ၉၀ ထက်မနည်း နေထိုင်ခဲ့သူများက လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဆန္ဒမဲ ပေးနိုင်ရန် ပုံစံ ၃(က)ဖြင့် လျှောက်ထားသူဦးရေ ၂၆၀၀ နီးပါး ရှိခဲ့ကြောင်း မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးထံမှ သိရသည်။“ပုံစံ ၃(က)နဲ့ လျှောက်ထားမှုအခြေအနေကတော့ ၂၅၉၉ ဦး လျှောက် ထားခဲ့တယ်” ဟု မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဌေးလွင်က အောက်တိုဘာ ၂၀ တွင် ပြောကြားသည်။ မဲဆန္ဒနယ် ပြင်ပရောက် ပြည်သူများအနေဖြင့် လက်ရှိရောက်နေရာဒေသတွင်ပင် ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ရန် ပုံစံ ၃(က)ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ပုံစံ ၁၅ ဖြင့်လည်းကောင်း လျှောက်ထားနိုင်ကြကြောင်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ကြေညာ ချက်များ ထုတ်ပြန်ထားခဲ့သည်။
ပုံစံ ၃ (က) ဖြင့် လျှောက်ထားသူသည် ရပ်ကွက်ကျေးရွာကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးအသီးသီးသို့ သွားရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပြီး ပုံစံ ၁၅ ဖြင့် လျှောက်ထားလိုသူမှာမူ မြို့နယ်အဆင့် ရုံးများသို့သာ လျှောက်ထားခွင့် ရှိကြောင်း နှင့် ပုံစံ ၃ (က) ဖြင့် လျှောက် ထား၍ မဲပေးခွင့်ရပါက လက်ရှိရောက်နေရာ မဲဆန္ဒနယ်က လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုသာ ရွေးကောက်ပွဲနေ့၌ မဲပေးခွင့် ရကြမည်ဖြစ်ပြီး ပုံစံ ၁၅ ဖြင့် လျှောက်ထားလျှင် မိမိနေရပ်ရင်း မဲဆန္ဒနယ်က လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း များကို ကြိုတင်မဲစနစ်ဖြင့် ဆန္ဒပြုပိုင်ခွင့် ရရှိကြမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ “မဲပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်မဲဆန္ဒနယ်ထဲက အမတ်လောင်းကိုပဲ မဲပေးချင်တယ်။ မပြန်နိုင်တော့လည်း ဒီ(မော်လမြိုင်)မှာပဲ မဲပေးဖို့ ရပ်ကွက်ရုံးမှာ ပုံစံ ၃ (က) တောင်းပြီး ခုလ ၈ ရက်နေ့မှာ လျှောက်လိုက်တယ်။ လျှောက်ပြီးတဲ့အခါမှ ပုံစံ ၁၅ ကနေ ကိုယ့်မဲဆန္ဒနယ် နယ်မြေရင်းကို လှမ်းပြီး ကြိုတင်မဲ ပေးခွင့် ရှိကြောင်း သိလိုက်ရတယ်။ ကိုယ့်အတွက် လွဲသွားတယ်” ဟု မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှ မော်လမြိုင်သို့ ရောက်ရှိနေခဲ့သည့် မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူ ကိုနေဝင်းမောင် (အမည်လွှဲ) က ပြောသည်။
“တခြားမြို့နယ်ကနေပြီးတော့ ပုံစံ ၁၅ တွေ လျှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့် မဲလက်မှတ် ရောက်လာတာ ရှိတယ်။ မနေ့ ကဆိုလို့ရှိရင် ၄၁ စောင် ရောက်လာတယ်။ အဲဒါကို ညနေ ၆ နာရီကနေ ၇ နာရီအတွင်းမှာ ပြည်သူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ မြို့နယ်ရုံးမှာ ကြိုတင်မဲပေးခဲ့တယ်ပေါ့။ အခုကြိုတင်မဲတွေစပေးနေပါပြီ”ဟု ဒေါ်မိုးဇင်မာဦးက ပြောသည်။ မွန်ပြည်နယ်တွင် လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲ၌ ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ ၁၈ သိန်းဝန်းကျင်ရှိနေပြီး ပထမဆုံးအကြိမ် မဲပေးခွင့်ရလာသူ လူငယ် တစ်သိန်းကျော်ရှိနေသည်။ ဘီးလင်းမြို့နယ် ဘောနော်ခီးကျေးရွာမှအပ ပြည်နယ်တစ်ဝန်းတွင် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည် ဖြစ်သည်။ https:// www.bnionline.net/mm/news-76518
အစိုးရ၊ တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအကြား တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ ယုံကြည်မှုရှိသည့်အတွက် NCA စာချုပ် ဖြစ်ပေါ်လာသော်လည်း လက်ရှိတွင်မူ အဆိုပါ ယုံကြည်မှုပျက်ပြားစေရန် အသေးစိတ်ကအစ အငြင်းပွားမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ပြောကြားသည်။
နေပြည်တော်ရှိ တပ်မတော်စစ်သမိုင်းပြတိုက်တွင် အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်က တပ်မတော်သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အဆိုပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဗိုလ်ချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ထိုသို့ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။“ ပြောချင်တာကတော့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး၊ တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ ယုံကြည်မှုရှိကြ လို့ ဒီစာချုပ်ကို သဘောတူခဲ့ကြတယ်။ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ခဲ့ကြတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ ဒီယုံကြည်မှု ပျက်ပြားဖို့ အသေးစိတ်က အစပေါ့နော် အငြင်းပွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိသလဲဆိုတာကို မေးခွန်းထုတ် စရာ ဖြစ်လာတဲ့သဘော ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ပြောကြားသည်။
NCA စာချုပ်နှင့်ပတ်သက်၍ NCA တွင် မည်သို့ကြိုပမ်းခဲ့ရသည်၊ မည်သို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ရသည်၊ မည်သည့်အချက်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ရသည်ဆိုသည်များအား တရားဝင် စာရွက်စာတမ်းများ၊ စာရင်းဇယားများ ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိ အချိန် စကားလုံးတစ်လုံးချင်းစီအပေါ်တွင် ထပ်မံ၍ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရန် လိုခြင်းသည် ယုံကြည်မှုအပေါ် မူတည်၍သာဖြစ် ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ပြောကြားသည်။ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွင် NCA ကဲ့သို့ EAO အားလုံးနီးပါး ပါဝင် ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း၊ တိုင်းရင်းပြည်သူလူထု လိုလားသည့် ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ်ကို အခြေခံသည့် ပြည်ထောင်စုတည် ဆောက်ရန် အခြေခံသဘောတူညီခဲ့ခြင်းမျိုး သမိုင်းတွင် မရှိခဲ့ဖူးကြောင်း၊ စကားလုံးတစ်ခုခြင်း၊ စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ခြင်း၊ အသေး စိတ် အကျေအလည် ဆွေးနွေးသဘောတူခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားသည်။ https://news-eleven.com/article /196263
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ အမ်းမြို့နယ် ဒါးလက်မြောက်ရွာမှ ရွာသား ၁၂ ဦးနှင့် အနောက်ရွာ (ရှမ်းကုန်းရွာ) မှ ၂ ဦး စုစုပေါင်း ရွာသား ၁၄ ဦးကို တပ်မတော်မှ ခေါ်ဆောင်သွားသည်မှာ တပတ်ခန့်ကြာမြင့်နေပြီ ဖြစ်သော်လည်း ယနေ့အထိ အဆက်အသွယ် မရကြသဖြင့် အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်နေရကြောင်း မိသားစုဝင်များက ပြောသည်။ အဆိုပါ ဒေသခံ ၁၄ ဦးတို့မှာ ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ကျေးရွာအနီး ဒါးလက်ချောင်းထဲတွင် လှေငယ် ၇ စီးနှင့် ငါးရှာနေစဉ် တပ်မတော်စစ်ကြောင်းတခုနှင့် တွေ့ပြီး ကျေးရွာအနီးရှိ တပ်မတော် ယာယီစခန်းသို့ ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်ခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများက ပြောဆိုကြသည်။
ဖမ်းဆီးခံရာတွင်ပါဝင်သော ဦးမောင်ကြည်သန်း၏ ဇနီး မသီတာက “ ငါးရှာတဲ့နေရာကနေ မေးစရာ ရှိတယ် ဆိုပြီး ခေါ်သွား တာ။ လက်ရှိမှာတော့ ချောင်းတဖက်ကမ်းက တပ်မတော် ယာယီစခန်းမှာ ရှိတယ်လို့တော့ သိရတယ်။ ခေါ်သွားတာ အခုဆိုရင် ၅ ရက်၊ ၆ ရက် ရှိပြီတော့ စိုးရိမ်ရတဲ့အတွက် ကျမ ယောက်ျားကို အမြန်ဆုံးလွတ်လာဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ” ဟု ပြောသည်။ ဖမ်းဆီး ခံထားရသူတို့မှာ ဒါးလက်မြောက်ရွာမှ အသက် ၃၄ နှစ်ရှိ ကိုဌေးအောင်၊ အသက် ၃၅ နှစ်ရှိ ကိုညီညီ အောင်၊ အသက် ၃၇ နှစ်ရှိ ကိုလွမ်းဝေ၊ အသက် ၃၅ နှစ်ရှိ ကိုကျော်ဌေးလှိုင်၊ အသက် ၃၀ နှစ်ရှိ ကိုတင်ရွှေ၊ အသက် ၃၀ နှစ်ရှိ ကိုညီသိန်း၊ အသက် ၃၃ နှစ်ရှိ ဦးညီဝင်း၊ အသက် ၂၈ နှစ်ရှိ ကိုမောင်ကြည်သန်း၊ အသက် ၃၀ နှစ်ရှိ ကိုခင်မောင်မြင့်၊ အသက် ၄၀ နှစ်ရှိ ဦးဆန်းဝင်းမောင်၊ အသက် ၂၅ နှစ်ရှိ ကိုစိုးမင်းဌေး၊ အသက် ၂၀ နှစ်ရှိ မောင်စိုးမင်းနိုင်နှင့်အတူ ဒါးလက် အနောက်ရွာမှ ရွာသား ၂ ဦးတို့ ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဒေသခံရွာသားများ ထံမှ သိရသည်။ ဖမ်းဆီးခံထားရသူတို့မှာ ဒေသတွင်း ငါးရှာရန် တပ်မတော်မှ ခွင့်ပြုထားသူများဖြစ်ကြပြီး ရရှိလာသည့်ငါးများကို တပ်မတော်သားများ ဝယ်ယူကာ ပိုလျှံသည့် ငါးများကို ကျေးရွာအတွင်း ရောင်းချလုပ်ကိုင်နေသူတို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဒါးလက်မြောက်ရွာမှ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဦးဝိသုတ္တက “ ဦးဇင်းရွာက ၁၂ ယောက် ဒါးလက် အနောက် ရွာခေါ် ရှမ်းကုန်း က ၂ ယောက် စုစုပေါင်း ၁၄ ယောက်ကို ခေါ်သွားတာ။ သူတို့ကို အဲဒီဒေသမှာ ငါးရှာဖို့ အတွက် တပ်ကလည်း အရင်တုန်း ကလည်း ခွင့်ပြုထားတာ။ ရလာတဲ့ ငါးတွေကို တပ်မတော်သားတွေက ဝယ်တယ်။ ကျန်ပိုလျှံတဲ့ ငါးတွေကို ရွာမှာရောင်း တယ် အဲဒီလိုလုပ်နေကြတာ”ဟု မိန့်ကြားသည်။ အမ်းမြို့နယ်အတွင်း လူမှုကူညီရေးလုပ်ကိုင်နေသူ ကိုမျိုးလွင်က “ အခုလို စားဝတ်နေရေးအတွက် ရှာဖွေနေရတာကို သံသယနဲ့ ဖမ်းဆီးခံရတာတွေဟာ ဒေသခံတွေက ကြောက်လန့်စေတယ်။ နောက်ပြီးတော့ အပြစ် မရှိရင် အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးသင့်ပြီ။ အခုလို အချိန်အကြာကြီး ထိန်းသိမ်းထားတာတွေ မလုပ်သင့်ဘူး ” ဟု ထောက်ပြသည်။ https://burma.irra waddy.com/news/2020/10/26/232334.html
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ ၁ လအတွင်း ခိုးမှု၊ လုယက်မှုတွေ ကျူးလွန်သူ တရားခံအယောက် ၅၀ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး လူငယ်တွေ အများဆုံးပါဝင်တယ်လို့ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးက ပြောပါတယ်။
မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ စက်တင်ဘာ ဒုတိယအပတ်ကနေ အောက်တိုဘာ ဒုတိယအပတ်အထိ ၁ လအတွင်း ခိုးမှု၊ လုယက်မှုများ ကျူးလွန်သူ တရားခံအယောက် ၅၀ ကို ဖမ်းမိခဲ့တာပါ။ ဖမ်းမိခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာ ဖုန်းနဲ့ ပိုက်ဆံအိတ် လုယက်သူ လူငယ်တွေ အများဆုံးပါဝင်တယ်လို့ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးက ရဲမှူးမြင့်မိုးက ပြောပါတယ်။
မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ ဒေသခံတွေရဲ့ အကူအညီကိုရယူပြီး ခိုးမှု၊ လုယက်မှု ကျူးလွန်သူတွေကို ဖော်ထုတ် ဖမ်းဆီးရေး အရှိန် အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ၁၈ နှစ်အောက် တရားခံ ၈ ယောက်၊ ၁၈ နှစ်အထက် အယောက် ၄၀ ကို တလအတွင်းမှာ ဖမ်းဆီးမိခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။ ဖမ်းမိတဲ့အမှုတွေထဲမှာ ရဲစခန်းမှာ လာရောက်အမှုဖွင့်တိုင်ကြားခြင်းမရှိတဲ့ အမှုတွေလည်း ပါဝင်ခဲ့ပြီး ထိရောက်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archi ves/419085
လာမယ့် နိုဝင်ဘာ ၈ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ၂၀၂၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်ကာလအတွင်း ကရင်ပြည်နယ်တွင် ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ-KNDP နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်-NLD ပါတီတို့ စည်းရုံးရေးအင်အားကောင်း နေကြောင်း သိရသည်။ ကရင်ပြည်နယ်တွင် ယခုရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပါတီ ၁၄ ပါတီနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ် လောင်းများ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် KNDP နှင့် NLD ပါတီတို့မှာ အခြားနိုင်ငံရေးပါတီများ ထက် စည်းရုံးရေးအားကောင်းနေသည်ဟု မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများက ပြောဆိုနေကြသည်။
ထိုကိစ္စအပေါ် မကြာသေးခင်က ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ဖျက်သိမ်းလိုက်သည့် နှင်းဆီပါတီဟု လူသိများ သော UDP မှ ကရင်ပြည်နယ်၊ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားရေးရာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဖြစ်ခဲ့ သူ ခွန်အောင်မြင့်မြတ် က “ကရင်ပြည်နယ်မှာ NLD လည်းအားကောင်းတယ်။ ကရင်အမျိုးသား ဒီမိုကရက် တစ်ပါတီလည်းအား ကောင်းတယ်။ အဲဒီ ၂ ခုပဲ ကျနော်မြင်တယ်။ ကျန်တဲ့ပါတီကတော့ ကျနော်အဲလောက်ထိတော့ အားမရဘူးပေါ့နော်။”ဟု ယနေ့ (အောက် တိုဘာ ၂၃ ရက်)တွင် ပြောသည်။ ကရင်ပြည်နယ်ပါတီများပူးပေါင်းကာ KNDP ပေါ်ပေါက်လာခြင်း၊ ဌာနေတိုင်းရင်းသား များအနေဖြင့် ဆုံးရှုံးနေ သော အခွင့်အရေးများ ရရှိရန် စိတ်အားထက်သန် မျှော်လင့်နေခြင်းများကြောင့် ဒေသခံပါတီ KNDP ကို ပိုမို ဝန်းရံ အားပေးလာသည်ဟု မြင်မိကြောင်း KNDP မှ ဖားအံမြို့နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း နန်းလှယဉ်မေ က ပြောသည်။
“လူငယ်ရဲ့ ဝန်းရံမှုအားကို ကြည့်ရင် KNDP က ပိုအင်အားကောင်းနေတယ်ပေါ့နော်။ မြဝတီ၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီး၊ လှိုင်းဘွဲ တို့မှာ အင်အားထောင်၊ သောင်းချီပြီး ဝန်းရံခဲ့ကြတယ်လေ။ ဖားအံမှာလည်း သူ့ခွင်အလိုက်ဝန်းရံ ကြတယ်။”ဟု နန်းလှယဉ်မေ က ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။ မဲဆွယ်ကာလဖြစ်သည့် စက်တင်ဘာ ၈ ရက်မှ အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်နေ့ အထိ ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း KNDP နှင့် NLD ပါတီ ထောက်ခံသူများက မြို့နယ်အလိုက် ကား၊ ဆိုင်ကယ်များဖြင့် စီတန်းလှည့်လည် ဝန်းရံခြင်း၊ စည်းရုံးဟောပြောခြင်းများကို ပိုမိုပြုလုပ်နေကြသည်။ http://kicnews.org/2020/10/%e1% 80%80%e1%8 0%9b%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%bb%e1%
အေအေနဲ့ဆက်စပ်တယ်ဆိုပြီး ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ရဲတပ်သား ၁ ဦးကို ရဲတရားရုံးက ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်ချမှတ်ပြီး အကြမ်း ဖက် ဥပဒေတွေနဲ့ ထပ်မံအမှုဖွင့်ထားတာ ၁ လကျော်အကြာမှ သိရတယ်လို့ မိသားစုက ပြောပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့နယ် စနဲမြို့ရဲစခန်းမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ရဲတပ်သား ရဲကိုနိုင်ဆိုသူဟာ အေအေနဲ့ ဆက်စပ်တယ် ဆိုပြီး ဇူလှိုင် ၂၈ ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပြီး စက်တင်ဘာ ၉ ရက်နေ့မှာ ရဲတရားရုံးကနေပြီး ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် ချမှတ်လိုက်တာပါ။
အခုလို ထောင်ဒဏ်အမိန့်ချမှတ်တာကို မိသားစုဝင်တွေအား ပြောဆိုဆက်သွယ်မှုမရှိခဲ့ဘဲ အောက်တာဘာ ၁၈ ရက်နေ့ကမှ သိရပြီး အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့လည်း ထပ်မံအမှုဖွင့်ခံထားရတယ်လို့ အစ်မဖြစ်သူ မခင်မီမီအောင်က ပြောပါ တယ်။“ကျမရဲ့ မောင်လေးကို စက်တင်ဘာ ၉ ရက်နေ့က ရဲတရားရုံးက ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်ချလိုက်တယ်ဆိုပြီး အောက်တို ဘာ ၁၈ ရက်နေ့ညမှာ အကျဉ်းထောင်ဝန်ထမ်း ၁ ဦးက ဆက်သွယ်ပြောဆိုလာလို့ မိသားစုတွေ သိခွင့်ရတယ်၊ ဘာပုဒ်မ တွေနဲ့ အမိန့်ချတယ်ဆိုတာလည်း အတိအကျမသိရဘူး၊ အမိန့်ချတာတောင် တစ်လကျော်ကြာပြီးမှ သိရတယ်၊ ကျမ မောင်လေး အတွက် လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ရှေ့နေလည်း မသိလိုက်ဘူး။ ကျမတို့ ဖုန်းဆက်ပြောတော့ သူက လိုက်လံစုံစမ်းမှ ထောင်ချလိုက်တာ ဟုတ်တယ်ဆိုပြီး ပြန်ပြောတယ်။ ကျမမောင်ကို အရပ်ဘက်တရားရုံးမှာလည်း အကြမ်း ဖက် ဥပဒေတွေနဲ့ ထပ်ပြီး အမှုဖွင့်လှစ်ထားတယ်။ အခုလို အမိန့်ချမယ်ဆိုရင်လည်း မိသားစုကိုတော့ အကြောင်းကြားသင့် တာပေါ့။ အခုက သူများပြောမှသိရတာဆိုတော့ ကျမတို့ကတော့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိစေချင်တာပေါ့။”
ရဲတပ်သား ရဲကိုနိုင်ဟာ ရဲစည်းကမ်းထိန်းရေးဥပဒေကို ချိုးဖောက်တာကြောင့် ရဲတရားရုံးကနေပြီးတော့ ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် ချမှတ်လိုက်တာလို့ ကျောက်ဖြူမြို့မရဲစခန်းမှူး ဒုရဲမှူးကျော်ဇောက ပြောပါတယ်။ “ရဲကိုနိုင်ကို ရဲစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့က ထုတ်ပယ်ပြီးတော့ ရဲတရားရုံးကနေ ပြစ်ဒဏ်ချလိုက်တာ၊ ၃ နှစ် ချလိုက်တာပါ၊ နယ်ဘက်တရားရုံး မဟုတ်ဘူး၊ စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်လို့ပေါ့။”ကျောက်ဖြူမြို့နယ်မှာ ၂၀၂၀ မေလနောက်ပိုင်းကစပြီး အေအေနဲ့ဆက်စပ်တယ်ဆိုပြီး သံသယ နဲ့ ဖမ်းဆီးခံရသူ ၅၀ လောက်ရှိပြီး တချို့ကို ပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့ကာ အမှုဖွင့်လှစ် တရားစွဲဆိုခံနေရသူက ၃၀ ဝန်းကျင် လောက်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/419090
ရှမ်းပြည်နယ်၊ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်မှာ ငွေကျပ် သန်းပေါင်း ၂ သောင်းခွဲကျော် တန်ဖိုးရှိတဲ့ မူးယစ်ဆေးတွေနဲ့ သယ်ဆောင်သူ တစ်ယောက်ကို ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ အစိုးရပြန်ကြားရေး သတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။ အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက် မနက် ၁၀ နာရီ လောက်က မူးယစ်ဆေးဝါး တားဆီးနှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါတဲ့ ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဟာ သတင်းအရ မိုင်းဆတ်မြို့နယ် မိုင်းတွမ်း-မိုင်းဆတ်သွား ကားလမ်း ပါခါးရွာနားမှာ မိုင်းတွမ်းကနေ မိုင်းဆတ်ဘက်ကို အားဖျော်(ခ)အားဖြိုး၊ ဆိုသူ မောင်းနှင် လာတဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို ရပ်တန့်ရှာဖွေရာမှာ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား ၂၀၀၀ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။
ကွင်းဆက်ဖော်ထုတ်ချက်အရ မနက် ၁၁ နာရီခွဲလောက်မှာ မိုင်းဆတ်မြို့နယ် မိုင်းတွမ်းအုပ်စု နမ့်ခမ်း(၁)အောက်ရွာက လော်ချာနဲ့ လော်ဖာတို့ရဲ့ နေအိမ်ကို ရှာဖွေရာမှာ သူတို့ကိုမတွေ့ဘဲ အိမ်ထဲကနေ အိုက်စ် ၁၂၄ ကီလို၊ ကဖင်း ကီလို ၆၅၀၊ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား ရိုက်နှိပ်ရာမှာ သုံးတဲ့ သံမို WY စာတန်း ပါ ၁၁ ချောင်းနဲ့ စာတန်းမပါ ၁၁ ချောင်းတို့ကို သိမ်းဆည်း ရမိခဲ့ပါတယ်။ လော်ဖာဟာ တာချီလိတ်မြို့မှာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မေ ၇ ရက်က စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား ၃ သိန်း ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့ အမှုက ကွင်းဆက်တရားခံပြေးဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖမ်းမိထားတဲ့ အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် အားဖျော်(ခ) အားဖြိုး၊ တိမ်းရှောင်သူ အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ် လော်ဖာ၊ အသက် ၃၀ အရွယ် လော်ချာတို့ကို မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ စိတ်ကို ပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ အမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်က ထားဝယ်မြို့ ထိန်သစ်ရပ်ကွက်မှာ ဆိုင်ကယ်တစီးကို ရပ်တန့်စစ်ဆေးရင်း WY စိတ်ကြွ ရူးသွပ်ဆေးပြား ၄၀၀ ရှာဖွေတွေ့ရှိသိမ်းဆည်းရမိပြီး သူ့အိမ်ကိုသွားရောက်ရှာဖွေရာ WY စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား ၁၆၁၂ ပြား ထပ်ပြီး ဖမ်းဆီးရမိပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/arch ives/419281
သစ်တောဦးစီးဌာနက ချင်းပြည်နယ်ရှိ တောင်ဇလပ်ပန်း ဖြူ၊ နီ၊ ဝါနှင့် သစ်ခွပန်းများကို သဘာဝအပင်များ စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းလိုက်ခြင်းကြောင့် ထိုအပင်များကို ထုတ်ယူဖျက်ဆီးသူများအား အရေးယူတော့မည်ဟု နတ်မတောင် အမျိုးသား ဥယျာဉ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးစိန်ထွန်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ ဦးစိန်ထွန်းက “အရေးယူနေပါတယ်။ အရင်က ပညာပေး ဟောပြောတာတွေလောက်ပဲလုပ်တာ အခုတော့ ပုံစံပြောင်းပြီး ပညာပေးတဲ့သဘောမျိုးတွေ လုပ်နေတယ်။ ကြပ်ကြပ် မတ်မတ် ပြန်လုပ်တဲ့သဘောပေါ့။ တနှစ်လောက်ရှိပြီ လုပ်နေတာ။ အပင်လိုက်ခုတ်သွားတာမျိုးတွေ မဖြစ်အောင်လည်း အစီအစဉ်တွေ အခုလုပ်နေပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
သယံဇာတနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဌာန၊ သစ်တော ဦးစီးဌာနသည် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့် သဘာဝထိန်း သိမ်းရေးနယ်မြေများ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ ပုဒ်မ ၁၉(ဂ)အရ မျိုးဆက်ပြတ်သုန်းမည့် အန္တရာယ်ရှိသော ကာ ကွယ်ထားသည့် သဘာဝအပင်များကို ၂၀၂၀ ခုနစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်က ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ သဘာဝအပင်စာရင်းတွင် ချင်းပြည်နယ်ရှိ တောင်ဇလပ် (ဖြူ၊ နီ၊ ဝါ)၊ တောင်ဇလပ်နှင်းဆီ၊ မြန်မာဂျင် ဆင်း၊ သစ်ခွ နက်၊ ချင်းသစ်ခွနီ၊ ဘုံမ္မရာဇာ၊ တောင်လုံးကျော်/ ဆာချီ၊ မြေပုဇွန်ကွေးတို့ ပါဝင်သည်။ အဆိုပါ အပင်မျိုးစိတ်များကို မျိုးတုန်း မည့်အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ရန်အတွက် သဘာဝအပင်စာရင်းတွင် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဦးစိန်ထွန်းက ဆိုသည်။
ထိုကာကွယ်ထားသည့် သဘာဝအပင်တမျိုးမျိုးကို သတ်မှတ်ထားသည့် နေရာဒေသအတွင်း ခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲ ထုတ်ယူ၊ စုဆောင်း၊ ဖျက်ဆီးပါက ထိုသူကို ဇီဝမျိုးစုံ၊ မျိုးကွဲနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းနယ်မြေများ ကာကွယ်စောင့် ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၄၀ (ခ) အရ အရေးယူနိုင်သည်။ ထို့ပြင် သဘာဝအပင်စာရင်း သတ်မှတ်ရာတွင်လည်း လုံးဝအကာအကွယ်ထား သည့် အပင်မျိုးစိတ်နှင့် နေရာဒေသအလိုက် ကာကွယ်ထားသည့် အပင်မျိုးစိတ်ဟူ၍လည်း ကွဲပြားသွားသလို ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ် များလည်း ကွာခြားသွားသည်။ လုံးဝကာကွယ်ရမည့် အပင်မျိုးစိတ်များတွင် တောင်ဇလပ်ဝါ၊ တောင်ဇလပ်နှင်းဆီနှင့် ချင်း သစ်ခွနီတို့သည် မြန်မာတပြည်လုံးအနက် ချင်းပြည်နယ်တခုတွင်သာရှိသည့် ရှားပါးအပင်မျိုးစိတ်များဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/26/232336.html
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်၊ ပြင်ရှည်(မွတ်ဆလင်)ကျေးရွာမှ ကလေးငယ်နှစ်ဦးသေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်း စစ်ဆေးမှုများ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်၌ပြု လုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ တပ်မတော်အနေဖြင့် ကလေးငယ်နှစ်ဦး သေဆုံးမှုဖြစ်ပွားသည့် အချိန်မှစ၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို စတင်လုပ် ဆောင်လျက်ရှိကြောင်း တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှ ဗိုလ်ချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ပြောသည်။“ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ ချို့ယွင်းချက် အားနည်းချက်ရှိရင် သိနိုင်အောင်လို့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု တွေကို အဲဒီကစပြီး လုပ်နေပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု လုပ်နေတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ ထုတ်ပြန်ပြီးသားလည်း ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
အောက်တိုဘာလ(၅)ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ပြင်ရှည်(မွတ်ဆလင်)ကျေးရွာအနီး တပ်မတော်နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်တော်(AA)တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တပ်မတော်စစ်ကြောင်းက ခေါ်ဆောင်သွားသော မွတ်ဆလင် ရွာသားများ အနက် ကျည်ထိမှန်ထားသော ကလေးငယ်နှစ်ဦး၏ ရုပ်အလောင်းကို အောက်တိုဘာလ (၆)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားသည်။ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်အတွင်း တပ်မတော်နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်တော် (AA)တို့အကြား တိုက်ပွဲအတွင်း ကလေးငယ် နှစ်ဦး သေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ယင်းကိစ္စရပ် ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ လျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်ရန် အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်နေ့က ကုလသမဂ္ဂဦးဆောင်သော နိုင်ငံအဆင့် စောင့်ကြည့်ရေးနှင့် အစီရင်ခံရေးအထူးတာဝန်အဖွဲ့( CTFMR ) က တိုက်တွန်းထားသည်။
ရခိုင့်လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်မြှင့်တင်သူများအဖွဲ့မှ ဒါရိုက်တာ ဦးမြတ်ထွန်း က “ကလေးတွေ သေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ အစိုးရနဲ့ တပ်မတော်မှာ တာဝန်ရှိတယ်။ ရခိုင်မှာ ကလေးတွေမသေသင့်ဘဲ သေနေရတယ်။ ပြီးခဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းကလည်း မြောက်ဦးမှာအမြောက်ကျည်ကျလို့ ကလေးငယ်တစ်ဦး ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် တပ်မတော်ကတော့ ငြင်းဆို ချင်တိုင်း ငြင်းဆိုနေတယ်။ ဒါတွေက မကောင်းဘူး။ တာဝန်ခံမှု တာဝန်ယူမှု မရှိဘူး”ဟု ပြောသည်။ https://www.bnion line.net/mm/news-76513
ဖရူမြို့နယ် အနောက်ဘက်ခြမ်း ဘီယာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ နှစ်စဉ်ပျှမ်းမျှကျောင်းသား/ သူ ပေါင်း ၄၀၀ နီးပါးရှိပြီး စာသင်ခန်း ၃ ခန်းသာရှိတဲ့အတွက် စာသင်တဲ့အချိန်မှာ အခက်အခဲဖြစ်တယ်လို့ ဘီယာကျေးရွာ ဆယ်အိမ်မှူး ဦးဂျိုဝါးနီ ကပြောပါတယ်။ ဘီယာကျေးရွာက မူလွန်ကျောင်းဖြစ်ပေမယ့် သတ္တမတန်းအထိ ဖွင့်ထားတဲ့အတွက် စာသင်ခန်းတစ်ခန်းကို ၃ ခန်းဖွဲ့ပြီး သင် ခဲ့ရတယ်လို့် ပြောပါတယ်။“ အဲ့တာကို ဖြစ်နိုင်ရင် နိုင်ငံတော်ကို နောက်ထပ်တစ်လုံး ထပ်ပေးစေချင်တယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆို တော့ မူလွန်ကျောင်းဆိုတာ သတ္တမတန်းအထိတော့ဖွင့်နေပါတယ် အခန်းက သုံးခန်းတည်းဆိုတော့ ကျနော်တို့ တစ်ခန်းကို သုံးခန်းပြန်ခွဲတော့ တအားကျဉ်းတယ်။ ရုံးခန်းတစ်ခန်းရယ်၊ ခုနှစ်တန်းတစ်ခန်းရယ်၊ ခြောက်တန်းတစ်ခန်းရယ် ကျနော်တို့ တွဲပြီးတော့ အဲ့တစ်ခန်းတည်းကို သုံးခန်းကျနော်တို့ပြန်လုပ်နေရတဲ့ ဘဝရောက်နေတယ်။”ဦးဂျိုဝါးနီ ကပြောပါတယ်။
ဦးသဲရယ် ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဖရူဆိုမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ကလည်း ဘီယာကျေးရွာတွင် ကျောင်း ဆောင်သစ်တစ်ဆောင် တိုးချဲ့တည်ဆောက်ပေးရန်ရှိမရှိ အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့က လွတ်တော်ထဲ ကြယ်ပွင့်မပြ မေးခွန်းမေးမြန်းခဲ့ပေမယ့် ခုချိန်ထိ အကြောင်းမပြန်သေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။“ ဘီယာကျေးရွာပေါနော အဲ့ရွာက လူဦးရေ အိမ်ခြေလည်းများတယ် နောက်ပြီးတော့ ကျောင်းဆောင်ကလည်း တစ်ဆောင်ပဲရှိတယ်လို့ကြားတယ်ပေါ့နော်။ အဲ့တာ ကျေးရွာလူငယ်တွေကပြောပြတယ်ပေါ့ သူတို့အနေနဲ့ကတော့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့ စာသင်ကျောင်းကို တည်ဆောက် စေချင်တယ်ပေါ့။” သူကဆက်ပြောပါတယ်။ ဟိုယာကျေးရွာရှိ ဒေသခံများသည် တောင်ယာလုပ်ငန်းအပြင် အခြားသော စီးပွားရေး လုပ်ငန်း မလုပ်ကိုင်တဲ့အတွက် ဝင်ငွေနည်းပါးတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဖရူဆိုမြို့နယ်အတွင်းမှာဆို ကျောင်းမလုံလောက်တဲ့ရွာတွေကတော့ ကိုယ်ထူကိုယ်ထကျောင်း လောပလျားလဲရွာ ၊ အလယ် တန်းကျောင်းခွဲ ခါးဘယ်ရွာ ၊ အ.မ.က စောပလိခိုရွာ ၊ မူ/လွန် ဘီယာရွာ၊ မူ/လွန် ထိုခွီဆိုရွာ ၊ အ.မ.က ခေါလေရွာ၊ မူလွန် ဖာဝယ်ရွာ၊ မူ/လွန် ထေခိုရွာ၊ အ.မ.က ကေသဲဒိုး ၊ အ.မ.က ထီးသောတနေးကူးရွာ၊ အ.မ.က ဒေါကူလဲရွာ၊ အ.မ.ကခွဲ ဆောလယ်ရွာ၊ အ.မ.ကခွဲ ရိုစပရားရွာဟောင်း ၊ အ.မ.က သိုသီးဖိုရွာ ၊ မူ/လွန် ပလဲလယ်ရွာ၊ အ.မ.က ဒိုးပရယ်ရွာ၊ အ.မ.က ဒိုးမူခေါရွာ၊ အ.မ.က ပလိုဒေးခိုရွာ၊ အ.မ.က ယိုပရားရွာ၊ အ.မ.က လောဂျာရွာ၊ အ.မ.က လောကျေခူရွာ၊ အ.မ.က ဒေါလောခူရွာ စတဲ့မူလတန်းကျောင်းတော်တော်များများ ကျောင်းဆောင်တွေလိုအပ်နေပါသေးတယ်လို့ ဖရူဆိုမြို့ ပညာ ရေးမှူး ရုံးကနေတဆင့်သိရပါတယ်။ https://www.bnionline.net/mm/news-76538
၁။ အစိုးရတပျ အရာရှိ ၂ ဦးကို RCSS/SSA မှ ဖမျးဆီး၊ ရိုကျနှကျ ဟု တပျမတျောထုတျပွနျ
၂။ KIA ဖမျးသှားတဲ့ ရှကေူက သုံးဦး ပွနျလှတျလာ
၃။ တပျမတျော ဖမျးဆီးခဲ့သညျ့ ကြောကျတျော ဒသေခံတဦး ဒဏျရာမြားဖွငျ့ ဆေးကုနရေ
၄။ KBC ဥက်ကဌ ညှိနှိုငျးပေးမှုကွောငျ့ တပျမတျောနှငျ့ KIO အပဈရပျလကျမှတျထိုးတော့မညျဟူသော သတငျးမှား
၅။ မွောငျးမွမွို့တှငျ ကရငျပွညျသူ့ပါတီ (KPP) ဝနျးရံသူမြားက အငျအား တဈသောငျးကြျောဖွငျ့ လှညျ့လညျ
၆။ ရေးမွို့နယျအတှငျး မှနျညီညှတျရေးပါတီ (MUP) အား ထောကျခံဝနျးရံသူ ထောငျနှငျ့ခြီ၍ အငျအားပွလှညျ့လညျ
၇။ ကိုဗဈဒုတိယလှိုငျးတှငျ ရာဘာခွံလုပျငနျးခှငျဝငျရနျအခကျတှေ့
၈။ ဦးဂါရှာသူအမှု စဈတရားရုံးဖှဲ့၍ စဈဆေးနဟေု တပျမတျောပွော
၉။ လူသတျမှုကြူးလှနျသူ ၃ ဦးကို KIO က အမွငျ့ဆုံးပွဈဒဏျခမြှတျ
၁၀။ ပလကျဝတှငျ လုံခွုံရေးအားနညျးကွောငျး အကွံပွုခဲ့ဟု တပျမတျောပွော
၁၁။ PNO ပါတီက တောငျကွီးမွို့တှငျ ဒုတိယအကွိမျ မဲဆှယျစညျးရုံးရေး အငျအားပွ လှညျ့လညျ
၁၂။ ငွိမျးခမျြးရေးနှငျ့ နိုငျငံသားအခှငျ့အရေးရရှိရေး ကြောကျမဲစဈဒဏျသငျ့လူငယျနှငျ့ရပျမိရပျဖမြား တောငျးဆို
၁၃။ ဒသေခံ ကြောငျးအုပျဆရာတဈဦးကို KNU မှ အဓမ်မဖမျးဆီးခဲ့ကွောငျး တပျမတျောထုတျပွနျ၊ အဓမ်မဖမျး ဆီးခွငျးမရှိဟု KNU ပွော
၁၄။ ဖှဲ့စညျးပုံပွငျဆငျရေးအတှကျ ရှေးကောကျပှဲ နိုငျဖို့လိုတယျလို့ SNLD ဥက်ကဋ်ဌ ပွော
၁၅။ မောငျတောနဲ့ ပေါကျတောမှာ ရှေးကောကျပှဲလုပျနိုငျဖို့ ပွညျနယျကျောမရှငျ ကွိုးပမျး
၁၆။ တိုငျးရငျးသား ပွညျနယျမြားတှငျ ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပနိုငျမှု မရှိခွငျးက ကျောမရှငျ၏ သမာသမတျရှိမှု၊ ပှငျ့လငျးမွငျ သာရှိမှုနှငျ့ ဂုဏျသိက်ခာရှိမှုတို့ကို မေးခှနျးထုတျစရာ ဖွဈကွောငျးနှငျ့ ပွငျးထနျစှာ ကနျ့ကှကျကွောငျး NBF ထုတျပွနျ
၁၇။ ကွာအငျးဆိပျကွီးမွို့နယျ မှနျပွညျသဈနယျမွအေတှငျး မဲဆှယျစညျးရုံးရေး ပွနျလညျဖွလြှေော့ပေး
၁၈။ ပူတာအိုတှငျ KSPP ပါတီဝနျးရံသူမြား ပထမဦးဆုံးအကွိမျ လှညျ့လညျအငျအားပွ
၁၉။ လှိုငျကျောမွို့နယျတှငျ ပအိုဝျးအမြိုးသား အဖှဲ့ခြုပျ ( PNO ) ပါတီ အငျအား ၁၅၀၀ ဖွငျ့လှညျ့လညျမဲဆှယျ
၂၀။ ပလကျဝတှငျ ရှေးကောကျပှဲမလုပျရနျ အကွံပွုသျောလညျး UEC က ကငျြးပခငျြသဖွငျ့ တပျမတျောဘကျက ညှိနှိုငျး ပေးခဲ့ရဟု တပျမတျော ရှငျးလငျး
၂၁။ မွဝတီနယျစပျ အမှတျ ၂ တံတားမှ နှဈနိုငျငံကုနျသှယျမှု ရပျဆိုငျးထား၍ ဒသေတှငျး စားသုံးကုနျဈေးကှကျအပျေါ ရိုကျခတျ မှုရှိနေ
၂၂။ မှနျပါတီမဲအောငျနိုငျရေး ပငလူငယျမြိုးဆကျသဈစကျဘီးအဖှဲ့ လှညျ့လညျအငျအားပွ
၂၃။ သကျငယျမုဒိနျးကြူးလှနျရနျအားထုတျသူကို ထောငျဒဏျ (၁၀)နှဈ ပွဈဒဏျခမြှတျ
၂၄။ ကနျ့ကှကျမှုတှရှေိနတေဲ့ ခဲသတ်တုသနျ့စငျစကျရုံတညျဆောကျမှုကို ပွနျလညျသုံးသပျသှားမညျဟု KySDP ၏ ကိုယျစား လှယျလောငျးကတိပေး
၂၅။ ကခငျြပွညျနယျမွို့နယျနှဈခုတှငျ တကျသုတျရိုကျပွုလုပျခဲ့ရသညျ့ တိုငျးလိုငျ (ရှမျးနီ) အမြိုးသားဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးပါတီ ၏ မဲဆှယျစညျးရုံးရေး
၂၆။ စဈအစိုးရလကျထကျ က သြှမျးဘာသာဖွငျ့ ရုပျသံမှာ သတငျးကွညောသူ(သို့) ပွညျသူ့ပွဿနာကို ရှထှေ့ကျ ဖွရှေငျး ပေးခငျြသူ နနျးဆာဥ
၂၇။ မျောလမွိုငျသို့ အခွားဒသေမှ ရောကျလာပွီး မဲပေးရနျ ပုံစံ ၃(က) ဖွငျ့ လြှောကျထားသူ ၂၆၀၀ နီးပါး ရှိ
၂၈။ တဈဖှဲ့နှငျ့တဈဖှဲ့ ယုံကွညျမှုရှိသညျ့အတှကျ NCA စာခြုပျ ဖွဈပျေါလာသျောလညျး လကျရှိတှငျ ယုံကွညျမှုပကျြပွား ရနျ အသေးစိတျကအစ အငွငျးပှားမှုမြားဖွဈပျေါနကွေောငျး တပျမတျောဘကျက ပွောကွား
၂၉။ ဖမျးဆီးခံ အမျး ဒသေခံ ၁၄ ဦး၏ အသကျအန်တရာယျ စိုးရိမျကွောငျး မိသားစုမြားက ပွော
၃၀။ မွဈကွီးနား၌ ၁ လအတှငျး ခိုးမှု၊ လုယကျမှုကြူးလှနျသူ ၅၀ ဖမျးမိ၊ လူငယျ အမြားဆုံးပါဝငျ
၃၁။ ကရငျပွညျနယျတှငျ KNDP နှငျ့ NLD ပါတီတို့ စညျးရုံးရေး အားကောငျးနေ
၃၂။ ဖမျးဆီးခံရသညျ့ရဲတပျသားအား ထောငျဒဏျ ၃ နှဈခမြှတျခဲ့မှု ၁ လကြျောကွာမှသိရဟု မိသားစု ပွော
၃၃။ မိုငျးဆတျတှငျ ငှကေပျြ သနျးပေါငျး ၂ သောငျးခှဲကြျော တနျဖိုးရှိ မူးယဈဆေးမြား ဖမျးမိ
၃၄။ တောငျဇလပျပနျးနှငျ့ ခငျြးသဈခှတို့အား ခူးယူဖကျြဆီးပါက အရေးယူတော့မညျ
၃၅။ ဘူးသီးတောငျတှငျ မှတျဆလငျ ကလေးငယျနှဈဦးသဆေုံးမှု စုံစမျးစဈဆေးမှုလုပျဆောငျနကွေောငျး တပျမတျောပွော
၃၆။ ဘီယာကြေးရှာ စာသငျကြောငျးဆောငျအလုံအလောကျမရှိသေး
သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး ကြောကျမဲမွို့နယျ တောငျရှညျကြေးရှာ အနီးတှငျ အစိုးရ တပျမတျောသား ၂ဦးကို RCSS/SSA မှ ဖမျးဆီးချေါဆောငျခဲ့သညျ ဟု တပျမတျော သတငျးမှနျ ပွနျကွားရေး က ထုတျပွနျလိုကျသညျ။ အောကျတိုဘာ ၆ ရကျ က သြှမျးပွညျပွနျလညျထူထောငျရေးကောငျစီ၊ သြှမျးပွညျတပျမတျော(RCSS/SSA) မှ အစိုးရတပျမတျော ၂ ဦးကို ဖမျးဆီးချေါ ဆောငျသှားခဲ့ပွီး အောကျတိုဘာ ၂၂ ရကျမှသာ ပွနျလညျပို့ဆောငျပေးခဲ့သညျဟု ယနေ့ အောကျတိုဘာလ ၂၄ ရကျ က တပျမတျော သတငျးမှနျ ပွနျကွားရေးမှ သတငျးထုတျပွနျခဲ့သညျ။
အဆိုပါ ကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျပွီး RCSS/SSA မှ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဒုဗိုလျမှူးကွီး စဝျအုမျခေး က “ ဒီသတငျး ကနြျော မကွား သိရသေးဘူး။ ကနြေျာ့ဆီမရောကျရှိလာသေးဘူး”ဟု သြှမျးသံတျောဆငျ့ကို ပွောသညျ။ ယခုရကျပိုငျး အစိုးရ တပျမတျော ဘကျမှ RCSS/SSA ကို မဟုတျမမှနျ သတငျးထုတျပွနျခဲ့သညျ့အပျေါ တှရှေိ့ကွောငျး၊ တပျမတျော အနဖွေငျ့ အမှနျတကယျ ငွိမျးခမျြးရေး လိုလားပါက ယခုကဲ့သို့ မလုပျသငျ့ကွောငျးလညျး ဒုဗိုလျမှူးကွီး အုမျခေး ကဆိုသညျ။ “ ကနြျောတို့ နယျမွေ သတျမှတျခကျြတှေ သဘောတူညီခဲ့တာ ဘာမှမရှိခဲ့ဘူး။ အကွောငျးတခုမဟုတျတခု ရှာပွီးပွော လရှေိ့တယျ။ ကနြျောတို့ လညျး အခုအခွအေနေ စောငျ့ကွညျ့နတေယျ”ဟု ဒုဗိုလျမှူးကွီး အုမျခေး က ထပျလောငျးပွောသညျ။
ပွညျထောငျစု အဆငျ့ ငွိမျးခမျြးရေး ဆှေးနှေးရေး အဖှဲ့နှငျ့ RCSS/SSA အဖှဲ့တို့သညျ ၂၀၁၂ ဇနျနဝါရီ နှငျ့ မလေ ကြိုငျးတုံမွို့ တှဆေုံ့ပှဲတှငျ နှဈဘကျ သဘောတူညီခကျြအရ RCSS/SSA အဖှဲ့ မှ ဟိုမိနျးနှငျ့ မုံးထားနယျမွသေို့ ကြျောလှနျ လှုပျရှားခွငျး မပွုရနျ သတျမှတျခဲ့ကွောငျးလညျး တပျမတျော သတငျးမှနျ ပွနျကွားရေးထုတျပွနျခကျြတှငျ ရေးထားသညျ။ တိုကျပှဲမြား ဖွဈပှားမှု နယျမွေ မတညျငွိမျမှုကွောငျ့ ကြောကျမဲမွို့နယျအတှငျး ကြေးရှာအုပျစု (၁၂) အုပျစု ရှေးကောကျပှဲ မကငျြးပရနျ လညျး ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျက အောကျတိုဘာ ၁၆ ရကျတှငျ ကွညောခကျြထုတျပွနျခဲ့သညျ။ ထို ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပနိုငျရေးသညျ အစိုးရတပျမတျောပျေါ မူတညျကွောငျး၊ အစိုးရတပျမတျောတပျဆုတျပွီး တိုကျပှဲ မဖနျတီး ပါက ရှေးကောကျပှဲကို အေးခမျြးစှာ ကငျြးပနိုငျကွောငျးလညျး သြှမျးမွောကျအတှငျး လှုပျရှားနသေညျ့ တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျ တပျဖှဲ့မြားက ပွောဆိုလိုကျသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/19060
ကခငျြလှတျမွောကျရေး တပျမတျော(KIA) တပျရငျး ၅ က ဖမျးချေါသှားခဲ့တယျဆိုတဲ့ ကခငျြပွညျနယျ၊ ရှကေူ မွို့နယျ၊ ကြောကျကွီးကြေးရှာ ဒသေခံသုံးဦး အောကျတိုဘာ ၂၁ ရကျနကေ့ ပွနျလညျလှတျမွောကျလာခဲ့ပါတယျ။ လူငယျ သုံးဦး ပွနျလှတျလာတယျလို့ မိသားစုဝငျတဈဦးနဲ့ အရပျဘကျအဖှဲ့အစညျး တာဝနျရှိသူတို့က ပွောပါတယျ။ ဖမျးဆီးချေါခံရသူတှေ က မောငျကြျောခိုငျဦး (၃၁) နှဈ၊ မောငျထှနျးရဲမိုး (၁၆) နှဈနဲ့ မောငျနိုငျလငျး (၂၆) နှဈတို့ဖွဈကွပွီး ရှကေငျြတောမှာ အလုပျသှားလုပျနတေဲ့ စကျတငျဘာ ၁၈ ရကျ နကေ့ ဖမျးချေါသှားတာလို့ မောငျနိုငျလငျး ဖခငျက ပွောပါတယျ။
“ရှကေငျြတောမှာဗြ။ ဟုတျတယျ နစေ့ားသှားလိုကျတဲ့အခြိနျမှာ။ ကလေးတှကေတော့ အဲဒီမှာ ဘာခိုငျးလဲ ဆိုတော့ ထမငျးခကျြ၊ ရခေပျ၊ ထငျးခှတော လုပျခိုငျးတယျတဲ့။ သငျတနျးတှကေတော့ မတကျခဲ့ရဘူး ပွောတယျ” သူတို့တှဟော မိသားစုနဲ့ တဈလကြျောကွာ ဝေးကှာခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ။ ငွိမျးခမျြးရေးအကြိုးဆောငျအဖှဲ့(PCG) ၊ ပွညျနယျအစိုးရ အဖှဲ့ တှကေို အကွောငျးကွားစာ ပေးပို့အကူအညီ တောငျးခဲ့ပွီးတဲ့နောကျ အခုလို လှတျလာတာလို့ မွနျမာပွညျမွောကျပိုငျး-သြှမျးမြိုးနှယျစုရေးရာအဖှဲ့ ဥက်ကဋ်ဌ စိုငျးစနျးဝကေ ပွောပါတယျ။
အဖမျးခံရသူ ၆၀၀ ကြျောရှိတဲ့အထဲမှာ အသကျ ၁၈ နှဈအောကျ ၈၁ ယောကျ ပါဝငျတဲ့အတှကျ ကလေးသူငယျ၊ လူငယျ အခှငျ့အရေးတို့နဲ့ဆိုငျတဲ့ UN အဖှဲ့ဆီကို သီးခွားစာရငျးပွုစုပွီး ပေးပို့ခဲ့တယျလို့ မွနျမာပွညျမွောကျပိုငျး-ရှမျးမြိုးနှယျစုရေး ရာအဖှဲ့ ဒု-ဥက်ကဋ်ဌ စိုငျးခငျမောငျအေးက RFA ကို ပွောပါတယျ။ ဒီစာရငျးတှဟော တိုငျးကွားလာတဲ့စာရငျးတှသောဖွဈပွီး ဘယျနှဈယောကျပွနျလှတျတယျ၊ ဘယျလောကျဆကျလကျဖမျးဆီးခံထားရတယျ ဆိုတာတော့ မသိဘူးလို့ စိုငျးခငျမောငျအေး က ပွောပါတယျ။ ဒီပွောဆိုခကျြတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး မေးမွနျးရာမှာ ဗိုလျမှူးကွီး နျောဘူက အောကျခွတေပျအဆငျ့ဆငျ့ကို ဆကျသှယျစဈဆေးမယျလို့သာ ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ https://www.rfa.org/burmese/news/shwegu-three-villagers-released-10252020051600.html
တပျမတျောမှ ဖမျးဆီးခဲ့သညျ့ ရခိုငျပွညျနယျ၊ ကြောကျတျောမွို့နယျ၊ ရုပျသားကြေးရှာ သားတဦးမှာ စဈကွောရေး ကာလ အတှငျး ရိုကျနှကျခံရသညျ့ ဒဏျရာပွငျးထနျမှုကွောငျ့ ကြောကျတျောဆေးရုံတှငျ ဆေးကုသမှု ခံယူနရေကွောငျး မိသားစုမြား ထံမှသိရသညျ။ ဆေးကုသခံယူနရေသူမှာ အသကျ ၅၂ နှဈအရှယျ ဦးမောငျကြျောသနျး ဖွဈပွီး အောကျတိုဘာလ ၁၇ ရကျ နံနကျပိုငျးက ကြေးရှာအတှငျး မိမိ နအေိမျ၌ရှိနစေဉျ တပျမတျောသားမြားက ဖမျးဆီးသှားခွငျးဖွဈကွောငျး မိသားစုဝငျမြားက ပွောသညျ။ ဇနီးဖွဈသူ ဒျေါဦးလှယဉျက “ ခွထေောကျ၊ ပေါငျ၊ ရငျဘတျတှနေဲ့ ခန်ဓာကိုယျအနှံ့မှာ ညိုမဲနတေဲ့ ဒဏျရာတှေ အသကျရှု ကပျြတာတှဖွေဈနတေယျ။ စဈသားတှကေ ဖမျးဆီးသှားပွီးတော့ လညျပငျးတှကေို ကွိုးကှငျးစှပျတာတှေ၊ ခွထေောကျတှေ၊ ခန်ဓာကိုယျအနှံ့ကို သနေတျတှနေဲ့ ထုထောငျးခဲ့တာ။ ဒဏျရာတှကေ ပွငျးထနျနတေဲ့ အတှကျ ဆေးကုသ နရေတာ” ဟု ဆိုသညျ။
ပွီးခဲ့သညျ့ အောကျတိုဘာလ ၁၇ ရကျနကေ့ တပျမတျောသားမြားသညျ ရုပျသားကြေးရှာသို့ သနေတျပဈဖောကျ ဝငျရောကျ လာပွီး အမြိုးသား၊ အမြိုးသမီးမြားနှငျ့ ကလေးငယျမြားအားလုံးကို နအေိမျပွငျပသို့ချေါထုတျပွီး ကြေးရှာရှိ စာသငျကြောငျး၌ စဈဆေးမှုမြားပွုလုပျခဲ့သညျ့နောကျ ၁၈ ရကျနတှေ့ငျ ဦးမောငျကြျောသနျးတဦးကို ဖမျးဆီးချေါဆောငျသှားခွငျးဖွဈသညျ။ ဆကျလကျပွီး ဒျေါဦးလှယဉျက “ ကိုယျ့အိမျကနေ ဆေးကုသစခေငျြတာ အခုတော့ ရဲစခနျးမှာကနေ လာပွီး ပွနရေတယျ။ ဆရာဝနျကွီးကလညျး ဆေးရုံတကျပွီးကုသပေးရမယျလို့ ပွောတယျ။ အခုကတော့ ရဲစခနျးကတော့ ဒီလိုကုသဖို့ ခှငျ့ပွုမပွုကို မသိရသေးဘူး” ဟုဆိုသညျ။ အဆိုပါ ကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျပွီး တပျမတျောသတငျးပွနျကွားရေးအဖှဲ့က ပွီးခဲ့သညျ့ အောကျတိုဘာ ၂၁ ရကျနကေ့ ထုတျပွနျရာတှငျ ၎င်းငျးမှာ AA အမာခံတဦးဖွဈကွောငျး ဖျောပွသညျ။
ရခိုငျလူ့အခှငျ့အရေး ကာကှယျမွှငျ့တငျသူမြားအဖှဲ့မှ ရှနေ့ဦေးဇျောဇျောမငျးက “သံသယနဲ့ ဖမျးဆီးပွီးတော့ တဦး တယောကျကိုမြှ ထိခိုကျညှငျးပနျး ဆကျဆံမှုမြိုး မပွုလုပျရလို့ လူ့အခှငျ့အရေး ကွညောခကျြမှာ ပွဌာနျးထားတဲ့အတှကျ ကြူးလှနျသူတှကေို ပွဈဒဏျပေးဖို့လိုတယျ။ လကျရှိမှာ တပျမတျောဘကျက ပွဈဒဏျပေးမှု မရှိသလို ဖွဈနတေယျ။ ဒါကွောငျ့ အခုလို ကိစ်စမြိုးတှေ ထပျမံကြူးလှနျဖို့အတှကျ တှနျးအားပေးနသေလိုပဲ”ဟု ဆိုသညျ။ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး တပျမတျော နှငျ့ AA တို့၏ တိုကျပှဲဖွဈပှားနသေညျ့ကာလ၌ တပျမတျောက ထိနျးသိမျးစဈဆေးခဲ့စဉျ စဈကွောရေးကာလအတှငျး ဒဏျရာ ရသူ၊ သဆေုံးသူတို့လညျး မြားပွားလာနသေညျ။ https://burma.irrawaddy.co m/news/2020/10/24/232262.html
မွနျမာ့တပျမတျောနှငျ့ ကခငျြလှတျလပျရေးအဖှဲ့ KIO တို့ကွား ကခငျြနှဈခွငျးခရဈယာနျအဖှဲ့ခြုပျ KBC ဥက်ကဌ Rev. Dr. Hkalam Samson က ကွားဝငျညှိနှိုငျးဆောငျရှကျပေးသောကွောငျ့ မကွာခငျ Bilateral အပဈအခတျရပျစဲရေး လကျမှတျ ရေးထိုးနိုငျတော့မညျဟူသောသတငျးသညျ သတငျးမှားဖွဈသညျဟု သကျဆိုငျသူမြားပွောသညျ။‘Mirror Kachin’ အမညျရှိ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှုးကွီးမငျးအောငျလှိုငျနှငျ့ KBC ဥက်ကဌ Rev. Dr. Hkalam Samson တို့သညျ မကွာခဏတှဆေုံ့ဆှေးနှေးနသေောကွောငျ့ မကွာခငျ တပျမတျော နှငျ့ KIA သို့မဟုတျ မွောကျပိုငျးမဟာမိတျအဖှဲ့တို့နှငျ့အတူ တရုတျပွညျတှငျ လကျမှတျရေးထိုးဖှယျရှိကွောငျး ကခငျြဘာသာဖွငျ့ ရေးသားထား သညျကို တှရေ့သညျ။
အဆိုပါသတငျးနှငျ့ပတျသကျပွီး KBC ဥက်ကဌ Rev.Dr.Hkalam Samson ကို မေးမွနျးကွညျ့ရာ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျဖွငျ့ တဈခါမြှသာ တှဆေုံ့ဖူးကွောငျးနှငျ့ အဆိုပါသတငျးသညျ အမှားဖွဈကွောငျး ပွောဆိုသညျ။ “အဲ့အကောငျ့ပိုငျရှငျ ရေးသားထားတဲ့ပုံစံက စဈတပျ ၂ ဖကျ သဘောတူညီလကျမှတျထိုးဖို့ ကနြျောက ဘဲ ကွားကနေ ညိနှိုငျးပေးနတေဲ့ ပုံစံဖွဈနေ တယျ။ ဒါကလုံးဝမဟုတျပါဘူး။ အဲ့လို ၂ဖကျကွား Bilateral လကျမှတျထိုးဖို့ ညိနှိုငျးပေးဖို့လညျး ကနြေျာ့အလုပျမဟုတျသလို သကျဆိုငျမှုလညျးမရှိဘူး။ မထိုးဖို့တောငျပွောဆိုနတော အားလုံးသိပါ တယျ။ အခုနောကျပိုငျး မွောကျပိုငျးမဟာမိတျ ၄ဖှဲ့ သဘောတူညီရငျ ထိုးမယျဆိုတာကလညျး အားလုံးသိကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့လုပျငနျးစဉျတှကေ အခုထိမအောငျမွငျသေး ဘူး။ သတငျးအမှားဖွဈတယျ”ဟု ပွောဆိုသညျ။‘Mirror Kachin’ သညျ အဆိုပါသတငျးကို Mizzima TV မှ ကိုးကားကာ ရေးသားထားသညျဟု ဖျောပွထားသညျ။ သို့သျော အဆိုပါသတငျးနှငျ့ဆကျစပျသောအကွောငျးအရာကို Mizzima သတငျးစာမကျြတှငျလညျး ရေးသားထားခွငျး မတှရေ့ပါ။
ကခငျြလှတျလပျရေးအဖှဲ့ KIO ဗဟိုဌာနခြုပျပွနျကွားရေးတာဝနျခံ ဗိုလျမှုးကွီးနျောဘူကလညျး လတျတလော ငွိမျးခမျြးရေး ဆှေးနှေးမှုမြား မရှိကွောငျး ကခငျြသတငျးဌာန KNG ကို ပွောသညျ။ ကခငျြနှဈခွငျးခရဈယာနျအဖှဲ့ခြုပျ KBC ဥက်ကဌ Rev.Dr.Hkalam Samson သညျ ကခငျြစဈပွေးဒုက်ခသညျမြား နရေပျပွနျရေးအတှကျလုပျဆောငျနသေော KHCC အဖှဲ့၏ ဥက်ကဌ လညျးဖွဈသညျဟု သိရသညျ။ https://burmese. kachinnews.com/2020/10/23/l2-17/
မွောငျးမွမွို့တှငျ(အောကျတိုဘာ ၂၆ ရကျ) နံနကျ ၉ နာရီခနျ့ ကရငျပွညျသူ့ပါတီ (KPP) ဝနျးရံထောကျခံသူမြားက အငျးအား တဈသောငျးကြျောဖွငျ့ မွို့အနှံ့ လှညျ့လညျခဲ့ကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။ အငျအားပွ ထောကျခံသူမြားသညျ မွောငျးမွမွို့ သူနာပွုသငျတနျးကြောငျးအနီးတှငျ စတငျစုဝေးကာ ထျောလာဂြီမြား၊ မျောတျောဆိုငျကယျမြား၊ မျောတျောယာဉျမြားဖွငျ့ ကရငျတိုငျးရငျးသားရိုးရာ ဝတျစုံအား ဝတျစုံကာ လှညျ့လညျအငျအားပွခဲ့ခွငျး ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
“ကြှနျတျောတို့ ကရငျပါတီအတှကျ ကြှနျတျောတို့ ဝနျးရံသူအဖှဲ့က စုပေါငျးပွီးတော့ ကိုယျ့ရဲ့အငျအားကိုပွခွငျး ဖွဈပါတယျ၊ ဒီနပှေဲ့က ပါတီကစီစဉျတာမဟုတျဘူးခငျဗြ၊ ဝနျးရံသူအဖှဲ့ စီစဉျပွီးတော့ လုပျတာဖွဈပါတယျ၊ ကြှနျတျောတို့ လကျရှိ အငျအား က တဈထောငျတော့ ကြျောလိမျ့မယျခငျဗြ၊ ကြှနျတျောတို့ တနျးတူအခှငျ့အရေးရရှိဖို့ လုပျရခွငျး ဖွဈပါတယျ”ဟု အငျအားပွ လှညျ့လညျပှဲတှငျ ပါဝငျခဲ့သူ စောဝငျးခြိုက ပွောသညျ။ အငျအားပွလှညျ့လညျပှဲမြား အားလုံးမှာ မွို့နယျရဲတပျဖှဲ့ထံတှငျ ငွိမျးခမျြးစုဝေး လှညျ့လညျခှငျ့နှငျ့ မွို့နယျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ အဖှဲ့ခှဲထံတှငျ အငျအားပွမဲဆှယျ စညျးရုံးခှငျ့မြားကို လြှောကျထားထားခွငျး မရှိကွောငျး သိရသညျ။
မွောငျးမွမွို့တှငျ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ၊ ပွညျထောငျစုကွံခိုငျရေးနှငျ့ဖှံဖွိုးရေးပါတီ၊ ပွညျထောငျစုကောငျးကြိုး ဆောငျပါတီ၊ လူ့ဘောငျသဈဒီမိုကရကျတဈပါတီ၊ ကရငျပွညျသူ့ပါတီ၊ ကရငျအမြိုးသားပါတီ၊ တိုငျးရငျးသားစညျးလုံးရေး ညီညှတျရေးပါတီတို့မှ ဝငျရောကျ ရှေးခယျြခံကွမညျ ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ https://news-eleven.com/article/196355
ရေးမွို့နယျအတှငျး မှနျညီညှတျရေးပါတီ (MUP) အား ထောကျခံဝနျးရံသူ ထောငျနှငျ့ခြီ၍ အငျအားပွလှညျ့လညျမှုကို (အောကျတိုဘာ ၂၆ ရကျ) နံနကျပိုငျးက ပွုလုပျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ ရေးမွို့အနီးရှိ လယောဉျကှငျးဟောငျးတှငျ စုရပျ အဖွဈပွုလုပျပွီးနောကျ ရေးမွို့နှငျ့ အနီးဝနျးကငျြရှိ ရပျကှကျနှငျ့ကြေးရှာမြားသို့ အငျအားပွလှညျ့လညျ မဲဆှယျစညျးရုံးမှု ပွုလုပျခဲ့ကွကွောငျး အဆိုပါ အငျအားပွလှညျ့လညျပှဲ စီစဉျသူမြားထံမှ သိရသညျ။
မိမိတို့အနဖွေငျ့ မှနျညီညှတျရေးပါတီအား ယုံကွညျ၊ အားကိုး၊ လေးစားကွသညျ့အတှကျ ယခုလို လာရောကျဝနျးရံကွခွငျး ဖွဈ ကွောငျး အဆိုပါ အငျအားပွလှညျ့လညျပှဲအား စီစဉျသူတဈဦးဖွဈသူ မငျးအောငျစိုး က ပွောကွားသညျ။ “ပှငျ့ပှငျ့ လငျးလငျးပွောရရငျ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ကံကွမ်မာကို ကြှနျတျောတို့ဖနျတီးခှငျ့ရမှသာ မိမိတို့လူမြိုး၊ စီးပှားရေး၊ နိုငျငံရေး၊ ယဉျကြေးမှု၊ စာပေ၊ အနုပညာ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျဖို့အတှကျက လှတျတျောမှာ တိုငျးရငျးသားပါတီတှကေ လှတျတျောကိုယျ စားလှယျတှေ မြားမြားရောကျရှိနဖေို့လိုပါမယျ။ ဒါကွောငျ့ တိုငျးရငျးသားဒသေတှမှော တိုငျးရငျးသားပါတီတှကေ အနိုငျရမှ သာလြှငျ စဈမှနျသော ငွိမျးခမျြးရေးနှငျ့ စဈမှနျသော ဖယျဒရယျဒီမိုကရစေီစနဈ တညျဆောငျနိုငျရေးအတှကျ လှတျတျော ကိုယျစားလှယျနရောတှမှော တိုငျးရငျးသားတှမြေားမြား လိုတဲ့အတှကျကွောငျ့ ယခုလို ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ အငျတိုကျအား တိုကျ ဆောငျရှကျခွငျးဖွဈပါတယျ” ဟု အငျအားပွလှညျ့လညျပှဲအား စီစဉျသူတဈဦးဖွဈသူ မငျးအောငျစိုး က ပွောကွားသညျ။
မှနျညီညှတျရေးပါတီသညျ ကိုယျဒသေအတှကျ အကြိုးပွုနိုငျမညျဟု ယုံကွညျသညျ့အတှကျ လာရောကျထောကျခံ ဝနျးရံရ ခွငျးဖွဈကွောငျး ရေးမွို့နယျတောငျပိုငျး၊ ဟံဂံကြေးရှာနေ မိသူရိနျမှနျ ကပွောကွားသညျ။ “တခွားပါတီတှကေ ဒသေဖှံ့ဖွိုး ရေးတဈခုတညျးလုပျပေးနိုငျတယျ။ မှနျညီညှတျရေးပါတီကို ထောကျခံမယျဆိုရငျ ကိုယျ့စာပယေဉျကြေးမှု မွှငျ့တငျနိုငျအောငျ ဆောငျရှကျပေးနိုငျမယျလို့မြှျောလငျ့တယျ။ ဒီမှာရှိတဲ့ တိုငျးရငျးသားညီအဈကို မောငျနှမတှအေနနေဲ့ကိုယျ့ တိုငျးရငျးသား ပါတီကို မဲထညျ့ပေးကွပါလို့တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ” ဟု မိသူရိနျမှနျ က ဆကျလကျပွောကွားသညျ။ မှနျညီညှတျရေးပါတီ သညျ မှနျတိုငျးရငျးသားပါတီအားလုံးစုစညျးထားသညျ့ပါတီဖွဈသညျ့အပွငျ မှနျသံဃာတျောမြား၊ မှနျပွညျသူမြား၊ မှနျလူငယျ မြား အားလုံး၏ သဘောဆန်ဒနှငျ့အညီ ပေါငျးစညျးထားသညျ့ မှနျတိုငျးရငျးသားပါတီလညျးဖွဈသညျ့အတှကျ မှနျလူငယျ တဈယောကျအနဖွေငျ့ မှနျညီညှတျရေးပါတီအား လာရောကျဝနျးရံရခွငျးဖွဈကွောငျး ရေးမွို့ခံ မှနျလူငယျတဈဦးဖွဈသူ မငျးမှနျထော က ပွောကွားသညျ။ https://news-eleven.com/article/196357
မှနျပွညျနယျနှငျ့ ကရငျပွညျနယျတို့တှငျ ကိုဗဈ ၁၉ ရောဂါဒုတိယလှိုငျးကာလအတှငျး အသှားအလာကနျ့သတျမှုမြားကွောငျ့ ရာဘာခွံမြားသို့ သှားရောကျအလုပျလုပျကိုငျမညျ့ ခွံလုပျသားမြား လုပျငနျးခှငျဝငျရနျအခကျတှနေ့ကွေောငျး သိရသညျ။
ပွညျနယျအတှငျး ကုနျတငျယာဉျမြားကိုသာ သှားလာခှငျ့ပွုသဖွငျ့ ခွံလုပျသားနှငျ့ လုပျငနျးရှငျမြား သကျဆိုငျရာခွံ အသီးသီး သို့ လိုငျးကားမြားဖွငျ့ သှားရောကျနိုငျခွငျးမရှိသညျ့အတှကျ အလုပျသမားအနညျးငယျဖွငျ့သာ လုပျကိုငျနရေကွောငျး ရာဘာ လုပျငနျးရှငျ ဦးသိနျးထှနျး ဆိုသညျ။ “ဇာသပွငျအလှနျမှာခွံတှရှေိတယျ လုပျသားတှကေိုကွီးကွပျလို့မရတော့ဘူး ဟိုမှာလုံးဝ ကွီးလှတျထားရတဲ့ အနအေထားတှဖွေဈသှားတယျ သူတို့လိုအပျတာတှကေို လုပျပေးဖို့အတှကျခကျသှားတယျ ကြှနျတျော တို့ ရှိမှ လုပျလို့ကိုငျလို့ရတဲ့အလုပျတှလေညျးရှိပါတယျ”ဟု ဦးသိနျးထှနျး ကပွောသညျ။ မှနျပွညျနယျမှ ရာဘာခွံလုပျသား မြားအပွငျ ဧရာဝတီတိုငျးနှငျ့ အခွားဒသေတှကေ လာရောကျလုပျကိုငျကွသညျ့ အလုပျသမားမြားလညျးရှိကွောငျးသိရ သညျ။“အဆငျမပွဘေူး ပွညျနယျတဈခုနဲ့တဈခုကိုကူးလို့မရဘူးဖွဈနတေယျ။ ရောကျတဲ့သူတှကေလညျး တဈခြို့လောကျ ကတော့ရောကျနပွေီး ဟိုမှနပွေီးတော့ သှားလုပျရတာ။ ရာဘာခွဈဖို့အတှကျ ပထမဆုံး ဝဲထိုး(ဓါတျမွသွေဇာထညျ့) ရတယျ၊ ခွုံတှရှေငျးရတယျ။ ဒါမြိုးမလုပျထားရငျ ရာဘာခွဈလို့မရဘူးလေ အဲ့တာတှတေောငျမလုပျရသေးဘူး”ရာဘာလုပျငနျးရှငျ ဦးဝငျးလှ ကပွောသညျ။
လကျရှိရာဘာခွံလုပျငနျးတှငျ ခွံပိုငျရှငျနှငျ့ အစေးခွဈလုပျသားမြားအကွား ခွံအနီးအဝေးသှားလာမှုလှယျကူသညျ့အပျေါ မူတညျ၍ ရာဘာအစေးခွဈရာမှ ထှကျရှိလာသညျ့ငှတေနျဖိုးအပျေါ ခွံရှငျ ၅၀%= လုပျသား ၅၀%၊ ခွံရှငျ ၄၀%= လုပျသား ၆၀% စသညျဖွငျ့ တဈရာသီစာ သငျ့ရာဈေးနှုနျးညှိပွီး လုပျကိုငျလြှကျရှိကွသညျ။ မှနျပွညျနယျတှငျ ရျောဘာစိုကျပြိုးဧက (၅)သိနျးကြျောအနကျ စိုကျပြိုးမှု ရပျနားထားသောဧက(၁)သိနျးကြျောရှိပွီး တဈနှဈလြှငျရျောဘာတနျခြိနျ ၁ဝ၆,ဝဝဝ တနျ ထုတျလုပျနိုငျခဲ့ကွောငျး၊ သို့ရာတှငျ တရုပျနိုငျငံမှ ရာဘာဝယျယူမှု ကဆြငျးလာသဖွငျ့ ရာဘာဈေးနှုနျးမြားလညျး နှဈအလိုကျ ကဆြငျးလာပွီး ယခုအခါ ရာဘာပငျမြားကို ခုတျလှဲ၍ ပရိဘောဂသဈမြားအဖွဈရောငျးခပြွီး အစားထိုးအပငျမြား စိုကျပြိုးလာ သညျကို တှရေ့သညျ။ http://burmese.monnews.org/ 2020/10/24/%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af %e1%80%97%e1%
ရခိုငျပွညျနယျ၊ ရသတေ့ောငျမွို့နယျ၊ ဦးဂါကြေးရှာမှ အမြိုးသမီး ၁ ဦးကို တပျမတျောသား ၃ ဦးက အဓမ်မပွုကငျြ့သညျ ဆိုသညျ့ ဖွဈစဉျနှငျ့ ပတျသကျ၍ စဈတှတေပျနယျတှငျ စဈတရားရုံးဖွငျ့ စဈဆေး ဆောငျရှကျနကွေောငျး တပျမတျော သတငျး ပွနျကွားရေးအဖှဲ့ ဥက်ကဋ်ဌ ဗိုလျခြုပျဇျောမငျးထှနျးက ပွောသညျ။ အောကျတိုဘာလ ၂၄ ရကျနကေ့ နပွေညျတျောတှငျ ပွုလုပျသညျ့ တပျမတျော သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲတှငျ အမှုအခွအေနနှေငျ့ပတျသကျပွီး ဧရာဝတီမှ မေးမွနျခဲ့ရာ အထကျပါ အတိုငျး ဖွကွေားခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။ ဗိုလျခြုပျဇျောမငျးထှနျး က “အဲဒီ ဦးဂါရှာဖွဈစဉျနဲ့ပတျသကျပွီးတော့ စဈတှမှော စဈဆေး လြှကျရှိပါတယျ။ တပျမတျော အကျဥပဒေ အရပါ မကပါဘူး၊ နယျဘကျ ဥပဒေ အရပါ အရေးယူသှားပါမယျ။ ကနြျောတို့ ပွောထားတဲ့အတိုငျး ပွငျးထနျထနျ အရေးယူပါမယျ” ဟု ပွောသညျ။
အဆိုပါ အရေးအား လိုကျပါကူညီသူ ရခိုငျအမြိုးသမီးမြား ကှနျရကျဥက်ကဌ ဒျေါညိုအေး ကတော့ ဦးဂါရှာသူအမှုတှငျ ကြူးလှနျ သူ တပျမတျောသားမြားအား စဈတရားရုံးမှ စဈဆေးနသေညျဟုသာ သိရှိရပွီး လကျရှိအခြိနျအထိ ကယကံရှငျ မိသားစု အပါအဝငျ လိုကျပါကူညီသူ အမြိုးသမီးအရပျဘကျအဖှဲ့အစညျးမြားအနဖွေငျ့လညျး တိတိကကြတြခုမှ မသိရှိရသဖွငျ့ ပှငျးလငျးမွငျသာမှုရှိအောငျ အရပျဘကျတရားရုံးသို့ လှဲပေးရနျ လိုအပျကွောငျး ပွောသညျ။ ဒျေါညိုအေးက “ဦးဂါရှာသူ အမှုနဲ့ ပတျသကျပွီး အခုထိ ဘာမှမသိရဘူး။ တစုံတရာ အကွောငျးကွားတာလညျး မရှိဘူး၊ ရဲတပျဖှဲ့ကို မေးကွညျ့တော့ လညျး သူတို့ကလညျး အကွောငျးမပွနျနိုငျသေးဘူးလို့ပွောတယျ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။
တရားလှတျတျောရှနေ့ေ ဒျေါမွသူဇာ က “ကမြတို့ အဲဒီအမှုနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ စဈတရားရုံးဖှဲ့ စဈဆေးနတေယျဆိုတာပဲ သတငျးတှမှော ဖတျရလို့ သိရတယျ။ ကြူးလှနျသူတှကေ ဝနျခံထားတယျလို့လညျး ပွောတယျ။ ဘယျသူ၊ ဘယျအဆငျ့ဆို တာလညျး ဘာမှမသိရဘူး။ ဘယျလို စဈဆေးနတေယျ။ အမှုအခွအေနဘေယျလိုရှိတယျ။ ဘယျမှာ စဈဆေးနတေယျဆို တာလညျး ကာယကံရှငျတှေ ဆီကိုလညျး အကွောငျးကွာတာမရှိဘူး”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။ တပျမတျောသတငျး ပွနျကွားရေးအဖှဲ့မှ ဗိုလျခြုပျဇောမငျးထှနျးကတော့ စဈဆငျရေးတာဝနျထမျးဆောငျနစေဉျကာလအတှငျး ဖွဈပှားခဲ့ခွငျးဖွဈ သညျ့အတှကျ ကြူးလှနျသူ တပျမတျောသား ၃ ဦးမှာအမှုကို အရပျဘပျတရားရုံးသို့ လှဲပွောငျးပေးမညျ မဟုတျဘဲ စဈ တရား ရုံးဖွငျ့ စဈဆေးကာ တပျမတျော အကျဥပဒေ အရသျောလညျးကောငျး၊ နယျဘကျ ဥပဒေ အရသျောလညျးကောငျး အပွဈပေး အရေးယူသှားမညျဖွဈကွောငျး ပွောသညျ။ ထိုတိုငျကွားခကျြအပျေါ စဈတှမွေို့မ ရဲစခနျးမှ ပ / ၃၅၅ / ၂၀၂၀၊ ရာဇသတျကွီး ပုဒျမ ၁၁၄ ပူးပေါငျးပါဝငျမှု၊ ရာဇသတျကွီး ပုဒျမ ၃၆၆ မတရားသဖွငျ့ ကာမယှကျစပျမှု၊ ရာဇသတျကွီး ပုဒျမ ၃၇၆ မုဒိနျးမှု စသညျ့ ပုဒျမ မြားဖွငျ့ အမှုဖှငျ့ထားသညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/24/232260.html
ဗနျးမျောခရိုငျ ဂိုငျဒေါကြေးရှာတှငျဖွဈပှားခဲ့သော ငါးလောငျးပွိုငျ လူသတျမှုကြူးလှနျခဲ့သူ (၃) ဦးကို ကခငျြလှတျလပျရေးအဖှဲ့ KIO အရှပေို့ငျခရိုငျတရားရုံးက အမွငျ့ဆုံးပွဈဒဏျ ခမြှတျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ လူသတျမှုနှငျ့ပတျသကျပွီး ဖမျးဆီး ထားသော တရားခံ ၃ ဦးကို စဈဆေးရာတှငျ သူတို့ကိုယျတိုငျ လူသတျမှုကြူးလှနျကွောငျး ဝနျခံခဲ့သညျ့အတှကျ လှနျခဲ့သညျ့ စကျတငျဘာ ၂၈ ရကျနတှေ့ငျ အပွီးသတျပွဈဒဏျစီရငျခဲ့ကွောငျး KIO ဗဟိုဌာနခြုပျ ဗိုလျမှူးကွီးအငျဖနျနျောဘူ က ပွော သညျ။“သူတို့ကိုယျတိုငျ လူသတျမှုနှငျ့ပတျသကျပွီး ဝနျခံတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ အခြိနျတှမှောလညျး လူ ၄ ယောကျကို သတျလိုကျပွီ၊ သူတို့သတျလိုကျတဲ့လူ ၉ ဦး ရှိပွီ။ ဒါကွောငျ့ သူတို့လူသတျတာ သခြောမှနျကနျပွီး သူတို့ကိုယျတိုငျ ဝနျခံပွီဖွဈ တဲ့ အတှကျ KIO အရှပေို့ငျခရိုငျတရားရုံးမှ အမွငျ့ဆုံးပွဈဒဏျ စီရငျခဲ့တယျ” ဟု KNG ကိုပွောသညျ။
ဗနျးမျောခရိုငျ မနျစီမွို့နယျ ဂိုငျဒေါကြေးရှာ၌ ဇူလိုငျလ ၂ ရကျနညေ့ မိသားစုဝငျ ၅ ဦးဖွဈသညျ့ ဒျေါယမျထု (အသကျ(၇၀)၊ ဦးယာကုလနျဇိနျတနျဂှနျ(ဖခငျ)၊ ဒျေါမျောရိနျးဆှမျလှတျထုနနျ (မိခငျ)၊ မောငျလနျဇိနျဆနျလီနျော၊ မောငျလနျဇိနျဒှဲဆနျအောငျ တို့ ဓါးခုတျဒဏျရာမြားဖွငျ့ သဆေုံးခဲ့သညျ။ လူသတျမှုဖွဈပှားခဲ့သညျ့ အဓိကပွဿနာအကွောငျးအရငျးမှာ ဘိုးဘေးစဉျဆကျ လုပျကိုငျစားသောကျခဲ့သညျ့ လယျယာမွေ အငွငျးပှားမှုကွောငျ့ဖွဈသညျဟု စဈဆေးတှရှေိ့ကွောငျးဆိုသညျ။ လယျယာမွေ အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျပွီး တရားခံတဈဦးသာပါဝငျသျောလညျး လူသတျရာတှငျမူတဈဦးတညျးမဟုတျကွောငျးပွောသညျ။
ဇူလိုငျ ၂ရကျနေ့ လူသတျမှုဖွဈပှားခဲ့ပွီးနောကျ ၃ ရကျနတှေ့ငျ တရားခံ ၃ ဦးကို ဖမျးဆီးခဲ့ပွီး ၎င်းငျးတို့ ၃ ဦးကို၂၀၂၀ စကျတငျဘာလ ၂၈ ရကျနေ့ KIO အရှပေို့ငျးခရိုငျတရားရုံးမှ အမွငျ့ဆုံးပွဈဒဏျအဖွဈ အပွီးသတျအမိနျ့ခမြှတျခဲ့သညျ။ https://burmese.kachinnews.com/20 20/10/23/l2-18/
ခငျြးပွညျနယျ၊ ပလကျဝမွို့နယျကို လုံခွုံရေးအားနညျးတဲ့ ၃၉ နယျမွထေဲမှာ ထညျ့သှငျး အကွံပွုခဲ့ပမေဲ့ ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျက ညှိနှိုငျးပွီး ရှေးကောကျပှဲကငျြးပဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့တာလို့ တပျမတျောသတငျးမှနျပွနျကွားရေးအဖှဲ့မှ ဗိုလျမှူးခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးက ပွောပါတယျ။ ၂၀၂၀ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲ ကငျြးပဖို့နဲ့ပတျသကျပွီး လုံခွုံရေးအရ ကငျြးပနိုငျခွငျး ရှိ၊ မရှိ တပျမတျောက သဘောထားတငျပွရာမှာ ခငျြးပွညျနယျ ပလကျဝမွို့နယျကို လုံခွုံရေး အားနညျးတဲ့ မွို့နယျတှထေဲမှာ ထညျ့သှငျးတငျပွခဲ့တာပါ။ “ပလကျဝက လုံခွုံရေးအားနညျးတဲ့အတှကျ မကငျြးပရမယျ့နရော ၃၉ နယျမွထေဲမှာ ကနြျောတို့ ထညျ့သှငျးထားပါတယျ။ ဒီကွားထဲမှာ ညှိနှိုငျးမှုတှေ ရှိပါတယျ။ လုံခွုံရေးအရ ဆောငျရှကျပေးပါဆိုတဲ့ဟာတှေ ရှိပါတယျ။ တတျနိုငျသမြှ ဆောငျရှကျပေးမယျဆိုပွီး ပွနျပွီးတော့ အကွောငျးပွနျခဲ့ပါတယျ။ ပွနျပွီးတငျပွခဲ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မိုလို့ ပလကျဝသညျ စာရငျးထဲမှာ ပါသှားတယျ။”
အထှထှေရှေေးကောကျပှဲ ကငျြးပနိုငျတဲ့ နယျမွတှေေ၊ ကငျြးပနိုငျခွငျးမရှိတဲ့ နယျမွတှေနေဲ့ပတျသကျပွီး ပွညျထောငျစုရှေး ကောကျပှဲကျောမရှငျက အောကျတိုဘာ ၁၆ ရကျက ထုတျပွနျကွညောခဲ့ရာမှာ တိုကျပှဲထိတှမှေု့ မွငျ့တကျနတေဲ့ ပလကျဝ မွို့နယျက ရှေးကောကျပှဲကငျြးပနိုငျတဲ့ စာရငျးထဲမှာ ပါဝငျလာပွီး တခြို့နယျမွအေေးခမျြးတဲ့ဒသေတှကေတော့ စာရငျးထဲ ပါဝငျလာခွငျး မရှိတာပါ။ ဒါနဲ့ပတျသကျပွီး ဒသေခံတှနေဲ့ တိုငျးရငျးသားပါတီအခြို့က ဝဖေနျမှုတှလေညျး ရှိခဲ့ပါတယျ။ ရှေးကောကျပှဲကငျြးပနိုငျခွငျးမရှိတဲ့ ဒသေတှထေဲမှာ ပါဝငျတဲ့ ရခိုငျပွညျနယျက မွို့နယျ ၉ မွို့နယျနဲ့ ရှမျးပွညျနယျ က ၆ မွို့နယျတို့နဲ့ပတျသကျပွီး ရှမျးရဲ့ဒသေတခြို့နဲ့ ရခိုငျရဲ့ဒသေတခြို့ကိုလညျး ရှေးကောကျပှဲကငျြးပ ဖို့အတှကျ လုံခွုံရေးရရှိ အောငျ ဆောငျရှကျပေးမယျလို့ တပျမတျောဘကျက ပွနျလညျတငျပွထားတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျရဲ့ အောကျတိုဘာ ၁၆ ရကျ ထုတျပွနျကွညောခကျြအရ ပွညျသူ့လှတျတျော မဲဆန်ဒနယျ စုစုပေါငျး ၃၃၀ မှာ ရှေးကောကျပှဲ မပွုလုပျနိုငျတဲ့ ဆန်ဒနယျ ၁၅ နယျနဲ့ အမြိုးသားလှတျတျော ၁၆၈ နယျမှာ ရှေးကောကျပှဲ မပွုလုပျနိုငျတာ ၇ နရောရှိတယျလို့ သိရပါတယျ။ http://burmese.dvb.no/archives/419078
ပအိုဝျးအမြိုးသားအဖှဲ့ခြုပျ PNO ပါတီမှ တောငျကွီးမွို့တှငျ ဒုတိယအကွိမျမွောကျ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးအငျအားပွ စီတနျး လှညျ့လညျခွငျးကို (အောကျတိုဘာ ၂၄) ရကျက ပွုလုပျခဲ့ကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။ တောငျကွီးမွို့နယျတှငျးရှိ ကြေးရှာ အုပျစုမြားမှ ပအိုဝျးတိုငျးရငျးသား အမြားအပွား တကျရောကျလာကွပွီး၊ ထောငျနှငျ့ခြီသော စီတနျးလှညျ့လညျရေးယာဉျတနျး သညျ မြားပွားလှနျးသဖွငျ့ အနောကျမွို့ပတျလမျး နှငျ့ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးလမျးမကွီးတဈလြှောကျ ပွညျ့လြှံခဲ့ပွီး၊ နာရီ ပေါငျး မြားစှာကွာမွငျ့သညျအထိ အငျအားပွယာဉျတနျးသညျ ရှညျလြားခဲ့ကွောငျးသိရသညျ။ မျောတျောယာဉျအစီးရပေေါငျး ထောငျ ကြျောခနျ့ ပါဝငျသော ယာဉျတနျးသညျ PNO ပါတီအမှတျတံဆိပျအလံနှငျ့ ပအိုဝျးအမြိုးသားအလံမြားကိုငျဆောငျကာ ပါတီ အလံမြား ဝှရေ့မျး၍ ပါတီစညျးရုံးရေးသီခငျြးမြားဖွငျ့ မဲဆှယျ စညျးရုံးရေး အငျအားပွလှညျ့လညျခဲ့ခွငျး ဖွဈကွောငျးသိရသညျ။
“ ဒီနတေ့ော့ ပါတီပုံရိပျပွတဲ့သဘောပါ၊ တောငျကွီးမွို့နယျမှာ ကြှနျတျောတို့ PNOပါတီ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမယျ ဆိုတာ အသိပေးလိုကျတဲ့သဘောပါ။ သကျဆိုငျရာရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျကိုလညျး ခှငျ့ပွုခကျြတောငျးတာပေ့ါ။ ဒီနထေူ့းခွားတာ တဈခုက ဖှငျ့ပေးလိုကျတာပေ့ါ။ အုပျစုနှဈစု လမျးကွောငျးနှဈကွောငျးပေါ့။ ဘယျသူမဆို လိုကျပါနိုငျအောငျပေ့ါ။ ကားတှေ ခညျြးပဲ မခနျ့မှနျးနိုငျတော့ဘူး။ တောငျကွီးမွို့ ကြောကျတဈလုံးအထှကျ ကုနျပွီ၊ မွပေုံနားမှာ မကုနျသေးဘူး၊ အနောကျ မွို့ပတျလမျးလညျး ရှိနသေေးတုနျးပဲ၊ ကားတှေ အရမျးမြားသှားတယျ။ ဆိုငျကယျတော့ မရှိသလောကျပေ့ါ။ ဗိုလျခြုပျ အောငျဆနျးလမျးနဲ့ အနောကျမွို့ပတျလမျး အကုနျပွညျ့သှားတယျ။ ကြှနျတျောတို့ ကိုယျစားလှယျလောငျးတှေ မပါဘူး။ ထောကျခံသူတှကေ ဝနျးရံခငျြတယျဆိုလို့ ကျောမရှငျက ခှငျ့ပွုတယျ။ အခုဝနျးရံတာ ထငျတာထကျကို မြားတယျ။ ကြှနျတျော တို့က စညျးကမျးခကျြလညျး ထုတျတယျ။ လိုကျနာကွဖို့ အားလုံးကိုယျ့အစီအစဉျနဲ့ ကိုယျလာကွဖို့ ထုတျတယျ။ တောငျကွီး မွို့နယျ တဈခုပဲ၊ တခွားမွို့နယျ မပါဘူး။ တခွား ဟိုပုံးနဲ့ညောငျရှမှောလညျး သူတို့ဘာသာ သူတို့ သှားနတေယျ။ တောငျကွီး မွို့နယျတှငျး ထောကျခံသူတှပေေ့ါ။ တောငျနီ ဘနျ့ကှေး မှတေျောတို့ ပါတယျ။ အဲဒီဘကျလမျးကွောကနေ လာတာပါတယျ။ အဓိကတော့ လှတျတျောထဲမှာ တိုငျးရငျးသားကိုယျစားလှယျရှိဖို့လိုတယျ။ တိုငျးရငျးသားတှဟော အစိုးရမဖှဲ့နိုငျပမေယျ့ ကြှနျတျော တို့အခှငျ့အရေး၊ အထူးသဖွငျ့ ဒသေအခှငျ့အရေးပေါ့။ တောငျကွီးမွို့ဆိုရငျ ဒသေတှကျလုပျတာ အားနညျးတယျ လို့မွငျတယျ။ လူထုလိုအပျတာတှေ ပိုပွီးလုပျဆောငျနိုငျမယျလို့ ယုံကွညျတာပေ့ါ။ ကိုယျစားလှယျရှိဖို့ လိုတယျ။ ဒသေဖှံ့ဖွိုး ရေးကိုလညျး ပိုပွီးလုပျနိုငျမယျ။ ပွီးတော့အ လုပျလုပျရငျလညျး လူထု အတှကျ ပိုလုပျနိုငျမယျလို့ ယုံကွညျတယျ။ ဒါကွောငျ့ တိုငျးရငျးသားတှကေို အားပေးသငျ့တယျ ”ဟု PNO ပါတီ ဗဟိုအလုပျအမှုဆောငျအဖှဲ့ဝငျ စောခှနျကြျောဝငျးက ပွောကွား သညျ။
တောငျကွီးမွို့နယျတှငျ ပွညျသူ့လှတျတျော ကိုယျစားလှယျလောငျး၊ ပွညျနယျ အမှတျ(၁) နှငျ့ အမှတျ(၂) လှတျတျော ကိုယျစားလှယျလောငျး၊ စုစုပေါငျး (၃) ဦး ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျသှားမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ ပအိုဝျးအမြိုးသားအဖှဲ့ခြုပျ PNO ပါတီသညျ မွနျမာတဈနိုငျငံလုံးတှငျ ရှမျးပွညျနယျတောငျပိုငျး၊ ကယားပွညျနယျ၊ မှနျပွညျနယျ၊ ကရငျပွညျနယျ၊ ပဲခူး တိုငျးတို့တှငျ လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး (၂၈) ဦး ပါဝငျယှဉျပွိုငျသှားမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ https://news-ele ven.com/article/196251
ဒသေခံလူထု ငွိမျးခမျြးစှာနထေိုငျနိုငျရေးနှငျ့နိုငျငံသားအခှငျ့အရေးအပွညျ့အ၀ ရရှိရေးအတှကျ စဈမွပွေငျအတှငျးနထေိုငျ သညျ့ လူငယျမြားနှငျ့ ရပျမိရပျဖ မြားက ကနျြးမာရေးဌာန ထုတျပွနျခကျြနှငျ့အညီ ငွိမျးခမျြးစှာ တောငျးဆိုလိုကျသညျ။ သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး ကြောကျမဲမွို့နယျရှိ တိုကျပှဲကွောငျ့ စဈဘေးရှောငျလူထု ၁၀၀၀ ခနျ့ခိုလှုံခဲ့သညျ့ ပုံဝိုးဘုနျးကွီးကြောငျး တှငျ (စဈရှောငျမြားနရေပျပွနျကွပွီးနောကျ ) အောကျတိုဘာ ၂၂ ရကျက ကြောကျမဲလူငယျမြားနှငျ့ရပျမိရပျဖမြားတှဆေုံ့ကာ Silent Campaign လုပျကွခွငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။“ကနြျောတို့ မနကျ ၁၀ နာရီခှဲကနေ ၁၁ နာရီခှဲလောကျအထိ အဲ့မှာ လူ ၃၀ လောကျတှဆေုံ့ပွီးတော့ တိုကျပှဲတှေ အလို မရှိတော့တဲ့အကွောငျး၊ ရှေးကောကျပှဲမကငျြးပရ နယျမွလေို့သတျမှတျ ကွညော တာကွောငျ့ နိုငျငံသားမှတျပုံတငျ ကိုငျထားတဲ့ ကနြျောတို့ရှာသားတှေ ရသငျ့ရထိုကျတဲ့အခှငျ့အရေးတှေ ဆုံးရှုံးခဲ့ ရတဲ့အကွောငျး ဆန်ဒအစဈအမှနျကို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ဆှေးနှေးကွတယျ။ ပွီးတော့ စာရှကျကွီးအပျေါရေးခပြွီးတော့ အဲဒီမှာ Silent Campaign လုပျကွတာဖွဈပါတယျ။” ဟု ကြောကျမဲလူငယျတဉီးဖွဈသော စိုငျးစှမျမိနျးက သြှမျးသံတျောဆငျ့ အား ပွောပွသညျ။
ကြောကျမဲမွို့ ပုံဝိုးအုပျစု နောငျဆငျမျရှာသညျ ရှေးကောကျပှဲမကငျြးပနယျမွေ အထဲတှငျပါဝငျပါ သညျ။ မိမိတို့ရှာသားမြား အရေးဆောငျရှကျပေးမညျ့ ကိုယျစားလှယျကိုရှေးခွယျရနျအခှငျ့ မရှိတော့သညျ့အပျေါ ရှာသားမြား မကမြေနပျဖွဈကွရ ကွောငျး Silent Campaign တှငျပါဝငျလာသူ နောငျဆငျဒသေခံမြားကပွောဆိုနကွေသညျ။“အခုလို ရှေးကောကျပှဲ မကငျြးပနဲ့နယျမွအေဖွဈ ကွညောလိုကျတာဟာ နိုငျငံသားအခှငျ့အရေးသာမက လူသားတယောကျရဲ့အခှငျ့အရေးအထိပါ ခြိုးဖောကျခံရတာဖွဈတယျ။ ဒီခြိုးဖောကျခံရမှုတှကေို ကိုယျတိုငျထပွီး ကွိုးစားဆောငျရှကျမှသာ ကနြျောတို့လိုခငျြတဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးအခှငျ့အရေးမြှျောလငျ့ခကျြရောငျခွညျကိုရရှိမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ကနြျောတို့လိုဘဲ အခှငျ့အရေးပိတျပငျ ခံရ တဲ့ လူငယျအားလုံးကို မိမိတို့နိုငျငံသားအခှငျ့အရေးအတှကျ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ထပွီးဆောငျရှကျဖို့တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ။” – ဟု လညျး စိုငျးစှမျမိနျးက ပွောဆိုလိုကျသညျ။
အဆိုပါဒသေသညျ အောကျတိုဘာလ ၂ ရကျနကေ့စပွီး ၁၃ ရကျနအေ့ထိ NCA လကျမှတျထိုးသညျ့ RCSS/SSA အားအစိုးရ တပျမတျောကထိုးစဈဆငျသဖွငျ့ စဈဘေးရှောငျ ၄၀၀၀ ထကျမနညျး ရှိခဲ့ပါသညျ။ ရှာမြားအတှငျး အစိုးရစဈသားမြား နထေိုငျလှုပျရှားနဆေဲဖွဈသညျ့အပွငျ မပေါကျကှဲသေးသညျ့လကျနကျကွီးမြား ၊ မိုငျးမြား ရှိနသေေးသဖွငျ့ အကွောကျ တရားနှငျ့ လှတျလပျမှုကငျးမဲ့သညျ့အခွအေနကွေား နထေိုငျနကွေောငျး ရှာသားမြားပွောပွခကျြအရသိရသညျ။ https://bu rmese.shannews.org/archives/19040
ကရငျပွညျနယျ၊ ဖာပှနျမွို့နယျ၊ မထောကြေးရှာအုပျစု၊ မထောကြေးရှာရှိ အခွခေံပညာမူလတနျးကြောငျးအုပျ ဆရာဖွဈသူ ဦးမွငျ့ဇျောကို KNU ဘကျမှ အဓမ်မဖမျးဆီးချေါဆောငျသှားခဲ့သညျဟု (အောကျတိုဘာလ ၂၆ ရကျ)တှငျ တပျမတျောသတငျး မှနျပွနျကွားရေးအဖှဲ့က သတငျးထုတျပွနျခဲ့သညျ။
ကြောငျးအုပျဆရာ ဦးမွငျ့ဇျောကို KNU မှ ဖမျးဆီးပွီး ၎င်းငျး၏ သားဖွဈသူကို KNU တှငျ စဈသားပွုလုပျရနျ ထိကျောထ ကြေးရှာ၌ ပွီးခဲ့သညျ့ အောကျတိုဘာလ ၂၁ ရကျနကေ့ လဲလှယျရေး ပွုလုပျနကွေောငျး၊ ပညာရေးဆုံးရှုံးမညျကို မလိုလား သညျ့ ဒသေခံ ရှာသားမြားမှ နီးစပျရာ တပျစခနျးမြားမှတဆငျ့ တိုငျကွားခဲ့ သညျဟု တပျမတျော၏ သတငျးထုတျပွနျမှု၌ ဖျောပွထားသညျ။ ထို့အပွငျ အဆိုပါ ကိစ်စအပျေါ သကျဆိုငျရာ တိုငျးစဈဌာနာခြုပျက KNU ဗဟို နှငျ့ အမြိုးသား ပွနျလညျသငျ့ မွတျရေးနှငျ့ ငွိမျးခမျြးရေးဗဟိုဌာန (NRPC) သို့ တဈနိုငျငံလုံး ပဈခတျတိုကျခိုကျမှုရပျစဲရေး သဘောတူ စာခြုပျ (NCA) အခနျး(၃)၊ အပိုဒျ (၆)၊ စာပိုဒျခှဲ(၉)(ခ) ကို ဖောကျဖကျြမှုအတှကျ အဖမျးဆီးခံထားရသညျ့ ကြောငျးအုပျအား အမွနျဆုံးပွနျ လှတျပေးရေး ကနျ့ကှကျအကွောငျးကွားထားကွောငျးလညျး ဆကျလကျဖျောပွ ထားသညျ။
အဆိုပါ ကိစ်စနှငျ့ပတျသကျပွီး ၎င်းငျးကြောငျးအုပျဆရာကို အဓမ်မဖမျးဆီးချေါဆောငျခွငျးမြိုးမဟုတျဘဲ ၎င်းငျး၏ စိတျဆန်ဒအရ သား ဖွဈသူ ကိုယျစားသှားရောကျပေးရနျ KNU အောကျခွတောဝနျရှိသူမြားနှငျ့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးခဲ့ခွငျးသာဖွဈကွောငျး ကရငျ အမြိုးသားအစညျးအရုံး – KNU မူတွျောခရိုငျ(တပျမဟာ ၅)ဘကျက တုံ့ပွနျပွောဆိုသညျ။ မူတွျောခရိုငျ ဥက်ကဋ်ဌ ပဒို စောထဲဒယျ က “အမှနျက အဓမ်မဖမျးတာမဟုတျပါဘူး။ တခွားရှာတှလေိုပဲ ကနြျော တို့ရဲ့ ဖွညျ့တငျးအငျအား လိုအပျခကျြမှာ အဲ့ဒီ ဆရာရဲ့သားလညျး ပါဝငျရမယျလို့ ကြေးရှာအုပျစုက ရှုမွငျတဲ့ အပျေါမှာ သူ့ရဲ့သားကိုယျစား ဒီကြောငျးပိတျရကျ ကာလမှာ သှားလုပျမယျဆိုပွီး တာဝနျရှိသူတှနေဲ့ လာဆှေးနှေးတယျ။ အဲ့မှာရှာဥက်ကဋ်ဌကော သူ့မိနျးမလညျးပါတယျ။ ဆှေးနှေး တဲ့အခါ သူ့သားမရောကျ နိုငျသေးတဲ့ အခြိနျမှာ သူခဏလာနပေေးမယျ။ အခုက ရပျမိရပျဖကနေ မဲရုံကိစ်စအတှကျ ပွနျလာ ကူဖို့ ပွောလာတော့ တပျရငျးကနေ ပွနျခိုငျးလိုကျတယျ။ ဒီကိစ်စတှပွေီးလို့ သူကိုယျတိုငျမဟုတျရငျ သူ့သားတဈယောကျ ယောကျ ပွနျတကျလာရမယျလို့ ပွောတော့ ဒါကိုသူက သဘောတူတဲ့အတှကျ ရှာကိုပွနျသှားခိုငျးတာမြိုးပါပဲ”ဟု ကအေိုငျစီ သို့ ပွော သညျ။
အဆိုပါ ဖွဈစဉျ ဖွဈပှားသညျ့ မထောကြေးရှာသညျ KNU တပျမဟာ (၅) ထိနျးခြုပျ နယျမွေ၊ ဒှယျလိုးမွို့နယျ အတှငျး တှငျတညျရှိနခွေငျးဖွဈပွီး KNU တပျပိုငျးဆိုငျရာအုပျခြုပျရေး လုပျငနျးစဉျအရ ၎င်းငျးတို့ထိနျးခြုပျနယျ မွအေတှငျး၏ မွို့နယျ၊ ကြေးရှာအသီးသီးရှိသော အိမျထောငျစု တဈခုစီတိုငျးရှိ အမြိုးသားတိုငျး စဈမှုမ ထမျးမနရေ မူဝါဒရှိကွောငျး KNUဘကျက ဆိုသညျ။ KNU နှငျ့ အစိုးရ ၊ တပျမတျောတို့အကွား NCA အပဈရပျလကျမှတျထိုးခွငျး (၅)နှဈပွညျ့သှားခဲ့သျောလညျး ယနေ့ အခြိနျထိ လုံခွုံရေးနှငျ့ တပျပိုငျးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြား၊ နယျမွပေိုငျးခွားသတျမှတျခွငျးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြား မဆှေးနှေးနိုငျသေး သောကွောငျ့ KNU နှငျ့တပျမတျောအကွား အလားတူကိစ်စရပျမြား အကွိမျကွိမျဖွဈပှားလကျြရှိပွီး အပွနျအလှနျကနျ့ကှကျ တိုငျကွာမှုမြားလညျး မကွာခဏ ပွုလုပျကွသညျ။ http://kicnews.org/2020/10/% e1%80%b1%e1%80%92%e1 %80%9e%e1%80%81%e1%80%b6-
ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ SNLD အနနေဲ့ ၂၀၀၈ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒကေို အစကနေ အဆုံးတိုငျ ပွနျလညျ ပွငျဆငျရေး၊ စဈအာဏာရှငျ တိုကျဖကျြရေးနဲ့ လူမြိုးကွီးဝါဒ တိုကျဖကျြရေးလုပျငနျးတှကေို ဆကျလကျဆောငျရှကျသှားမယျ လို့ ပါတီဥက်ကဋ်ဌ ဦးခှနျထှနျးဦး ကပွောပါတယျ။ ဒီနေ့ ကရြောကျတဲ့ SNLD ပါတီ တညျထောငျခွငျး ၃၂ မွောကျနေ့ နှဈပတျ လညျ အခမျးအနားကို အှနျလိုငျးကနေ ကငျြးပရာမှာ ပါတီ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးခှနျထှနျးဦးက တကျရောကျ မိနျ့ခှနျးပွောခဲ့ တာဖွဈပါ တယျ။
ပါတီရဲ့ ရညျရှယျခကျြလုပျငနျးစဉျတှေ အကောငျအထညျဖျောဆောငျရှကျနိုငျဖို့ လှတျတျောတှငျးနဲ့ လှတျတျောပွငျပ အားကောငျးဖို့လိုပွီး ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲမှာ SNLD ပါတီအနနေဲ့ ရာခိုငျနှုနျးမြားမြားနဲ့ ရှေးကောကျပှဲအောငျနိုငျဖို့ လိုတယျလို့ သူကပွောပါတယျ။ ပါတီဝငျတှေ၊ ကိုယျစားလှယျလောငျးတှအေနနေဲ့လညျး နိုငျငံရေးဝမျးစာပွညျ့အောငျ ဖွညျ့ကွဖို့ ပါတီ ဥက်ကဋ်ဌ က တိုကျတှနျးလိုကျပါတယျ။
SNLD ပါတီဟာ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲမှာ ကိုယျစားလှယျလောငျး ၁၃၀ ကြျောနဲ့ ရှေးကောကျပှဲဝငျပွိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ မိုငျးကိုငျမွို့နယျမှာ ရှေးကောကျပှဲမကငျြးပနိုငျကွောငျး ကျောမရှငျက ကွညောထားတာကို ကငျြးပပေးဖို့ ထပျမံတောငျးဆို သှားမယျလို့လညျး ပါတီအထှထှေေ အတှငျးရေးမှူး ဦးစိုငျးလိတျ ကပွောပါတယျ။ https://www.rfa.org/burmese/ne ws/snld-chairman-said-they-need-to-win-election-to-amend-constitution-10262020051222.html
ရခိုငျပွညျနယျထဲက တခြို့မဲဆန်ဒနယျမွတှေမှော ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပခှငျ့ရအောငျ တောငျးဆိုသှားမယျလို့ ပွညျနယျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျက ပွောလိုကျပါတယျ။ ပေါကျတောမွို့နယျနဲ့ မှတျစလငျ အမြားစုနထေိုငျရာ မောငျတောမွို့နယျ အပါအဝငျ စဈတှနေဲ့ တောငျကုတျမွို့နယျထဲက ရပျကှကျကြေးရှာတခြို့မှာ ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပခှငျ့ရဖို့ စီစဉျနတောပါ။
စဈရေးတငျးမာမှုတှဖွေဈနတေဲ့ ရခိုငျပွညျနယျမှာ လုံခွုံရေးအရ မကငျြးပနိုငျတဲ့ မဲဆန်ဒနယျမွတှေေ ရှိပါတယျ။ အဲဒီအထဲက ပေါကျတောနဲ့ မောငျတောမွို့နယျ အပါအဝငျ စဈတှနေဲ့ တောငျကုတျမွို့နယျထဲက ရပျကှကျ၊ ကြေးရှာတခြို့မှာ ရှေးကောကျ ပှဲ ကငျြးပခှငျ့ရဖို့ ပွညျနယျရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျနဲ့ နိုငျငံရေးပါတီတှေ ဒီမနကျ စဈတှမွေို့ ပွညျနယျကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲရုံးမှာ ဆှေးနှေးခဲ့ကွတာပါ။ ဒီဆှေးနှေးခကျြတှကေို ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျဆီ တငျပွသှားမယျလို့ ရခိုငျပွညျနယျ ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲ ဥက်ကဋ်ဌ ဒျေါတငျလှိုငျ ပွောပါတယျ။ ဒီနှဈ ရှေးကောကျပှဲမကငျြးပနိုငျဘူးလို့ အောကျတိုဘာ ၁၆ ရကျနကေ့မှ ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ ကနေ ထုတျပွနျထားတာ မွို့နယျ ၉ မွို့နယျနဲ့ ကြေးရှာပေါငျး ၁၅ဝ ကြျောရှိပါတယျ။
မှတျစလငျအမြားစု နထေိုငျရာ မောငျတောမွို့နယျမှာဆိုရငျ လကျရှိ မဲပေးခှငျ့ရှိသူ ၂၈၀၅၄ ဦးရှိတယျလို့ မောငျတောမွို့နယျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲ အတှငျးရေးမှူး ဒျေါအေးမွတျသူဇာကြျောက ပွောပါတယျ။ ဒီအထဲမှာ မှတျစလငျ ဘယျနှဈဦး ပါဝငျတယျဆိုတာကိုတော့ သီးခွားစာရငျးမခှဲထားဘူးလို့ ပွောပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၅ ရှေးကောကျပှဲတုနျးကတော့ မောငျတောမွို့နယျမှာ မဲပေးခှငျ့ရှိသူ မှတျစလငျ ၇၁ ဦး ရှိတယျလို့ မောငျတောခရိုငျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျက ထုတျပွနျခဲ့ ဖူးပါတယျ။ ပွညျနယျရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျရဲ့ပွောဆိုခကျြအရ – ရှေးကောကျပှဲမကငျြးနိုငျတဲ့ မွို့နယျတှနေဲ့ ကြေးရှာတှေ မှာ ဒီနှဈ မဲပေးခှငျ့ရှိသူ ခနျ့မှနျးခွေ ၁၂ သိနျးကြျောရှိတယျလို့ သိရပါတယျ။ ရခိုငျအမြိုးသားပါတီက အမြိုးသားလှတျတျော ကိုယျစားလှယျလောငျး ဦးထှနျးအောငျကြျောကတော့ ပွညျသူတှအေတှကျ တျောတျောလေးကို ဆုံးရှုံးမှုတှေ ဖွဈလာမယျလို့ ထောကျပွပါတယျ။
အခုလို ရခိုငျပွညျနယျက မွို့နယျတှေ၊ ရပျကှကျကြေးရှားတှတေဈခြို့မှာ ရှေးကောကျပှဲ့ကငျြးပပေးဖို့ တောငျးဆိုတာနဲ့ ပတျသကျလို့ ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျရဲ့ သဘောထားကို RFA က ဆကျသှယျမေးမွနျးခဲ့ပမေယျ့ ဒီနညေ့နေ ၅ နာရီခှဲအထိ တဈစုံတဈရာ တုံ့ပွနျပွောဆိုခွငျး မရှိပါဘူး။ ပွညျနယျရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျရဲ့ ဒီအစီအစဉျနဲ့ ပတျသကျပွီး ရခိုငျပွညျနယျ လုံခွုံရေးနဲ့ နယျစပျရေးရာဝနျကွီး ဗိုလျမှူးကွီး မငျးသနျ့ကို RFA က ဆကျသှယျမေးမွနျးရာမှာ သူ့အနနေဲ့ ဘာမှတျခကျြမှ မပေးလိုကွောငျးပွောပွီး ဖုနျးခသြှားခဲ့ပါတယျ။ တပျမတျောသတငျးမှနျပွနျကွားရေးအဖှဲ့ ဥက်ကဋ်ဌ ဗိုလျခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးကတော့ ဖုနျးလကျခံဖွကွေားခွငျး မရှိပါဘူး။ https://www.rfa.org/burmese/ news/goingtosubmitto heldelectionintwotownshipsandothers10262020091037
ရနျကုနျတိုငျးကဲ့သို့ COVID-19 ရောဂါကပျဘေး အကွီးအကယျြ ကွုံတှလေ့ကျြရှိသညျ့ ဒသေတှငျ ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပ သျောလညျး နယျမွလေုံခွုံရေး မပကျြယှငျး၊ COVID-19 ပြံ့နှံ့မှု စိုးရိမျဖှယျ မရှိသညျ့ တိုငျးရငျးသားပါတီမြား အားကောငျး သော ပွညျနယျဒသေမြားတှငျ ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပရနျ စီစဉျဆောငျရှကျနိုငျမှု မရှိခွငျးက ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျ၏ သမာသမတျရှိမှု၊ ပှငျ့လငျးမွငျသာရှိမှုနှငျ့ ဂုဏျသိက်ခာရှိမှုတို့ကို မေးခှနျးထုတျစရာ ဖွဈစသေညျဟု ညီနောငျ တိုငျးရငျးသားပါတီမြား ဖကျဒရေးရှငျး (NBF) က အောကျတိုဘာ ၂၁ ရကျတှငျ ထုတျပွနျသညျ။
ထို့ကွောငျ့ ကျောမရှငျ၏ ရှေးကောကျပှဲနယျမွေ ဖကျြသိမျးခွငျးဆိုငျရာ ထုတျပွနျခကျြကို ပွငျးထနျစှာ ကနျ့ကှကျကွောငျးနှငျ့ အဆိုပါ ထုတျပွနျခကျြကို အခြိနျမီ ပွနျလညျ ပွငျဆငျပေးရနျ တိုငျးရငျးသား မဟာမိတျ အဖှဲ့အစညျး တဈခုဖွဈသညျ့ NBF က ထုတျပွနျသညျ။“တိုငျးရငျးသားဒသေတှမှော UEC ရဲ့ သဘောထားက မြှတမှု မရှိဘူးလေ။ ဒါအကုနျသိပွီးသား။ UCE အနနေဲ့ ဒီဟာကို Fair မဖွဈဘူး။ အဲ့တော့ ပွနျလညျ စဉျးစားသငျ့တယျ” ဟု NBF ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ရခိုငျအမြိုးသားပါတီ မူဝါဒရေးရာ ဦးဆောငျကျောမတီဝငျ ဦးဦးလှစောက ပွောကွားသညျ။ NBF သညျ ရခိုငျအမြိုးသားပါတီ၊ ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြား ဒီမိုကရကျတဈပါတီ၊ ဖကျဒရယျပွညျထောငျစုပါတီ အပါအဝငျ တိုငျးရငျးသားပါတီ ၁၅ ပါတီဖွငျ့ ဖှဲ့စညျးထားသညျ့ မဟာမိတျ အဖှဲ့အစညျး တဈခုဖွဈသညျ။
ရခိုငျ၊ ရှမျး၊ ကခငျြ၊ ကရငျ၊ မှနျနှငျ့ ပဲခူး စသညျ့ ပွညျနယျနှငျ့ တိုငျး ခွောကျခုရှိ မွို့နယျအခြို့မှ ရပျကှကျ၊ ကြေးရှာအုပျစု အခြို့ တှငျလညျး ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပမညျ မဟုတျကွောငျး ကွညောခကျြတှငျ ပါရှိသညျ။ အထကျပါ ရှေးကောကျပှဲ ပယျဖကျြ မဲဆန်ဒနယျမြားသညျ တိုငျးရငျးသားပါတီမြား ခိုငျမာအားကောငျးသညျ့ မဲဆန်ဒနယျအမြားစု ဖွဈသညျကို ဝမျးနညျးဖှယျတှရှေိ့ ရပွီး ယငျးမဲဆန်ဒနယျမှ ပွညျသူမြားအနဖွေငျ့ မဲပေးခှငျ့ အခှငျ့အရေးလညျး ဆုံးရှုံးကွမညျဟု NBF ထုတျပွနျခကျြတှငျ ဖျောပွ ထားသညျ။ လှတျလပျပွီး တရားမြှတသော ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပနိုငျသော အခွအေနမေရှိ၍ တိုငျးနှငျ့ ပွညျနယျ ခွောကျခုရှိ မဲဆန်ဒနယျအခြို့ကို ပယျဖကျြခွငျးဖွဈသညျဟု ကျောမရှငျ ကွညောခကျြတှငျ ဖျောပွသညျ။ https://news-eleven.com/a rticle/196240
ကရငျပွညျနယျ ကွာအငျးဆိပျကွီးမွို့နယျ မှနျပွညျသဈထိနျးခြုပျနယျမွေ တောငျပေါကျဒသေ ၂၄ ရှာတှငျ နိုငျငံရေး ကိုယျစား လှယျမြား လှတျလပျစှာဝငျရောကျ မဲဆှယျစညျးရုံးနိုငျကွောငျး မှနျပွညျသဈပါတီ COVID-19 ကာကှယျထိနျးခြုပျရေး ကျောမတီ(ဗဟို) က ယမနျနေ့ ရကျစှဲဖွငျ့ ကွညောခကျြထုတျပွနျလိုကျသညျ။ ထိုသို့ မဲဆှယျစညျးရုံးရာတှငျ လူ ၃၀ ဦးထကျ မပိုစရေနျနှငျ့ ကနျြးမာရေးဌာနမြား၏ လမျးညှနျခကျြမြားနှငျ့အညီ စုဝေးစညျးရုံးရမညျဖွဈသညျ။ ယခငျထုတျပွနျ ခကျြအရ အဆိုပါတောငျပေါကျဒသေ ၂၄ ရှာမြားတှငျ အခွားမွို့နယျမှလာရောကျသော နိုငျငံရေးပါတီအဖှဲ့ဝငျမြားအား မဲဆှယျစညျးရုံး ရေးဝငျရောကျခှငျ့မပွုခဲ့ရာမှ ပွနျလညျဖွလြှေော့ပေးခွငျးဖွဈသညျ။
ထို့ပွငျ ပွညျတှငျး Stay at Home သတျမှတျခံထားရသညျ့ဒသေမှ မိမိနရေပျသို့ပွနျလာလိုပါက အနီးစပျဆုံးရှိသညျ့ မှနျပွညျ သဈ ပါတီရုံးမြားတှငျ ခရီးသှားလာခှငျ့ထောကျခံခကျြရယူရမညျဖွဈပွီး မိမိနရေပျသို့ပွနျရောကျပါက သကျဆိုငျရာ မွို့နယျနှငျ့ ကြေးရှာအုပျခြုပျရေးမှူးရုံးမြားသို့ အသိပေး၍ မိမိနအေိမျ/ခွံအတှငျး Stay at Home (၇) ရကျကွာ နထေိုငျရမညျဟု ဆိုသညျ။ ကိုဗဈဒုတိယလှိုငျး ကူးစကျမှုမွနျဆနျလာသဖွငျ့ ကနျြးမာရေးလုပျငနျးကိစ်စမြား ဆောငျရှကျသညျ့ လုပျငနျးကိစ်စမှ အပ အရပျ ဖကျ လူမှုအဖှဲ့အစညျးမြားဖွဈသညျ့ CBO, CSO, NGO, INGO မြား ထိနျးခြုပျဧရိယာအတှငျး ဝငျရောကျခှငျ့ မပွုကွောငျး မှနျပွညျသဈပါတီ COVID-19 ကာကှယျထိနျးခြုပျရေးကျောမတီ(ဗဟို) က ၂၀၂၀ ခုနှဈ စကျတငျဘာ ၁၁ ရကျနစှေဲ့ဖွငျ့ စညျးကမျးသတျမှတျခကျြ၍ ထုတျပွနျထားသညျ။
အလားတူ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ နိုဝငျဘာ ၈ ရကျနတှေ့ငျ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲအောငျမွငျစှာကငျြးပနိုငျရနျ မဲရုံမြားအတှကျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျနှငျ့ ကနျြးမာရေးနှငျ့အားကစားဝနျကွီးဌာနတို့ ညှိနှိုငျးထုတျပွနျထားသော စညျးမဉျြး၊ စညျကမျးမြား နှငျ့ ကိုကျညီအောငျ ဆောငျရှကျနိုငျရနျ လူ ၃၀ ဦးထကျပို၍ စုဝေးခွငျးကိုခှငျ့ပွုကွောငျး ယမနျနတှေ့ငျ သကျဆိုငျရာဝနျကွီးက လကျမှတျရေးထိုး ထုတျပွနျလိုကျကွောငျး တှရေ့သညျ။ http://burmese.monnews.org/2020/10/26/%e1%80%80 %e1%80%bc%e1%80%ac%e1%80%a1%e1%
ပူတာအိုလှငျပွငျမှာ ကခငျြပွညျနယျအခွစေိုကျ KSPP ပါတီက အောကျတိုဘာ ၂၆ ရကျနကေ့ ဝနျးရံသူအငျအား ၁,၃၀၀ လောကျနဲ့ ပထမဦးဆုံးအကွိမျ အငျအားပွလှညျ့လညျမဲဆှယျခဲ့တယျလို့ KSPP ပါတီ ပူတာအိုမွို့နယျအတှငျး‌ရေးမှူး ဦးအောငျခမျး က ပွောပါတယျ။ အခုလိုအငျအားပွတာဟာ ကခငျြပွညျနယျ ပွညျသူ့ပါတီ (KSPP)က ပါတီအသဈဖွဈတာ ကွောငျ့ လူထုတှသေိအောငျ လှညျ့လညျမဲဆှယျတာဖွဈပွီး KSPP ပါတီအနနေဲ့ အငျအား တောငျ့တငျးမှသာ ပွညျနယျဖှံ့ဖွိုး တိုးတကျရေး လုပျဆောငျနိုငျမှာ ဖွဈတာကွောငျ့ ပွညျသူလူထု သိရှိလာအောငျ ခုလိုအငျအားပွတာလို့ ဦးအောငျခမျးက ပွောပါတယျ။
“လမျးကွောငျး ၃ ကွောငျးအဖွဈသတျမှတျကာ အငျအားပွလှညျ့လညျ သှားမှာဖွဈပွီး ပထမလမျးကွောငျးအနနေဲ့ ပူတာအို မွို့နယျ အထကျ ဆနျဂေါငျထိ ပွီးတော့ လုံရှာယနျ၊ နောငျခိုငျ စတဲ့နရောတှမှော လှညျ့လညျသှားမှာပါ”လို့ ဆိုပါတယျ။ အငျအားပွဝနျးရံသူတှကေ ပါတီဝငျတခြို့နဲ့ ဒသေခံပွညျသူတှဖွေဈပွီး နိုဝငျဘာလဆနျးမှာလညျး နောကျထပျအငျအားပွ လှညျ့လညျဖို့ အစီအစဉျရှိတယျလို့ပွောပါတယျ။
ကခငျြပွညျနယျ ပွညျသူ့ပါတီ(KSPP) ဟာ ပူတာအိုခရိုငျအတှငျးမှာ ပွညျသူ့လှတျတျော၊ အမြိုးသားလှတျတျောနဲ့ ပွညျနယျ လှတျတျော စတဲ့နရောတှအေတှကျ လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ၁၆ ဦး ယှဉျပွိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ http://burmese.dvb .no/archives /419417
လှိုငျကျောမွို့နယျရှိ ပအိုဝျးတိုငျးရငျးသားမြားနထေိုငျကွသညျ့ ကြေးရှာမြားနှငျ့ ရပျကှကျတခြို့တို့တှငျ ပအိုဝျးအမြိုးသား အဖှဲ့ ခြုပျ ( PNO ) ပါတီက မျောတျောယာဉျမြား၊ဆိုငျကယျမြားအသုံးပွုကာ အောကျတိုဘာ ၂၅ ရကျနေ့ ၉ နာရီခနျ့က ဝနျးရံသူ ၁၅၀၀ ခနျ့ဖွငျ့ လှညျ့လညျမဲဆှယျမှုမြားပွုလုပျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ ထိုသို့လှညျ့လညျမဲဆှယျရာတှငျ လှိုငျကျောမွို့ရှိ နှားလဝိုးကြေးရှာအုပျစု၊ပဒါးညေးကြေးရှာတှငျ လူစုဝေးခဲ့ပွီး ပအိုဝျးတိုငျးရငျးသားမြားနထေိုငျသညျ့ ကြေးရှာ ၂၈ ရှာနှငျ့ ရပျကှကျ သုံးခုတို့တှငျ လှညျ့လညျမှုမြားပွုလုပျခဲ့သညျ။ ထို့ပွငျ လိုကျပါဝနျးရံသူမြားအား ကိုဗဈရောဂါကာကှယျရေးအတှကျ နှာခေါငျးစီးမြားတပျရနျ၊ အခွားသောအဖှဲ့ အစညျးမြားနှငျ့ ပါတီမြားအပျေါ စကားပွောဆိုမှုမြားဆငျခွငျရနျ၊ဟဈအျောမှုမြား မပွုလုပျရနျတို့ကို လိုကျနာစေ ခငျြဖွငျ့ မဲဆှယျမှုပွုလုပျခဲ့ကွောငျး ပါတီဥက်ကဋ်ဌ ဦးအုနျးဖလေေးက ပွောသညျ။
ပအိုဝျးအမြိုးသားအဖှဲ့ခြုပျပါတီအနဖွေငျ့ ၎င်းငျးကိုယျပိုငျအုပျခြုပျရဒသေတှငျ ၂၀၁၀၊၂၀၁၅ ခုနှဈက ကငျြးပပွုလုပျခဲ့သညျ့ အထှေ ထှရှေေးကောကျပှဲမြားတှငျ တခွားသော မဲဆန်ဒနယျမြားတှငျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျခဲ့သျောလညျး ၂၀၂၀ အထှထှေေ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ကယားပွညျနယျ၌ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျခွငျးသညျ ပထမဆုံးဖွဈကွောငျးလညျး ပါတီဥက်ကဋ်ဌ ဦးအုနျးဖလေေး က ပွောသညျ။“လကျရှိအခွအေနမှော ပါတီကွီးတှနေဲ့ယှဉျပွိုငျရတဲ့အခါကတြော့ ပထမဆုံးခွလှေမျးအနနေဲ့ ကနြျောတို့ ပအိုဝျးအမြိုးသားပါတီက ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျတာပါ။အိုဝျးတိုငျရငျးသားဒသေခံအားလုံးရဲ့ဝနျးရံမှုနဲ့ ကနြျောတို့ က ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျမှာဖွဈတယျဟု မဲဆှယျ စညျးရုံးရေး မထှကျခှာမီ ဦးအုနျးဖလေေးက ပွောသညျ။
ကယားပွညျနယျ၊လှိုငျကျောမွို့နယျတှငျ ပအိုဝျးအမြိုးသားအဖှဲ့ခြုပျပါတီအနဖွေငျ့ ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျ စားလှယျ လောငျး ဦးအုနျးဖလေေး၊ အမြိုးသားလှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး မဲဆန်ဒနယျအမှတျ (၁၁) ခှနျအောငျဇယြေ၊ ပွညျနယျ လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး မဲဆန်ဒနယျအမှတျ (၁) ခှနျကြျောမငျးထှနျးနှငျ့ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ (၂) ဒျေါဝငျးပွညျ့မှနျ တို့ က ယှဉျပွိုငျမညျ ဖွဈသညျ။ ပအိုဝျးအမြိုးသားအဖှဲ့ခြုပျသညျ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ပအိုဝျးကိုယျပိုငျ အုပျခြုပျခှငျ့ရဒသေ ဖွဈသညျ့ ဟိုပုနျးမွို့နယျ ၊ ပငျလောငျးမွို့နယျ၊ ဆီဆိုငျမွို့နယျတို့အပွငျ ပအိုဝျးတိုငျးရငျးသားအမြားစုနေ ထိုငျကွသညျ့ ရှမျးပွညျနယျ၊ ကရငျပွညျနယျ၊ မှနျပွညျနယျ၊ ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီးတို့တှငျ မဲဆန်ဒနယျ ၃၅ နရောအထိ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျသှား မညျ ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ http://www.mizzimaburmese.com/article/74874
လာမညျ့ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျ နယျမွမေအေးခမျြးသော ခငျြးပွညျနယျ ပလကျဝဒသေအခြို့တှငျ ရှေးကောကျပှဲမပွု လုပျသငျ့ဟု တပျမတျောက အကွံပွုခဲ့သျောလညျး UEC က ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပခငျြသညျ့အတှကျ တပျမတျောဘကျက ညှိနှိုငျးဆောငျရှကျပေးခဲ့ရကွောငျး တပျမတျောသတငျးပွနျကွားရေးအဖှဲ့ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဗိုလျခြုပျဇျောမငျးထှနျးက ယနေ့ အောကျတိုဘာလ ၂၄ ရကျနတှေ့ငျ ပွုလုပျသညျ့ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲတှငျ ပွောကွားသညျ။ လုံခွုံရေးအရ မဲပေးနိုငျသညျ့ အခွအေနမေရှိဟု တပျမတျောက အကွံပွုခဲ့သော မွို့နယျပေါငျး ၃၉ မွို့နယျအထိ ရှိခဲ့ကွောငျး၊ တပျမတျောက လုံခွုံရေးပေး လြှငျ ရှေးကောကျပှဲကငျြးပနိုငျသညျ့မွို့နယျ ၂၀ အထိ ရှိသညျဟု အကွံပွုခဲ့ကွောငျး ဗိုလျခြုပျဇျောမငျးထှနျးက ပွောသညျ။ သို့သျော တပျမတျောက အကွံပွုရသညျ့အခွအေနသောဖွဈပွီး ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျက ဆုံးဖွတျရသော အဖှဲ့အစညျးဖွဈသညျဟု ၎င်းငျးက ဆိုသညျ။
ရခိုငျပွညျနယျတှငျ ရှေးကောကျပှဲ မကငျြးပဖွဈ၍ မဲပေးခှငျ့ဆုံးရှုံးရသညျ့သူမြားထဲတှငျ တပျမတျောသားမြားလညျး ပါဝငျ ကွောငျး ဗိုလျခြုပျဇျောမငျးထှနျးက ဆကျလကျပွောကွားသညျ။ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျးရှိ မွို့နယျ ၉ မွို့နယျ နှငျ့ ရှမျးပွညျနယျ ရှိ မွို့နယျ ၆မွို့နယျတို့ကို လုံခွုံရေးအရ ရှေးကောကျပှဲမကငျြးပရနျ ကာကှယျရေးဝနျကွီးဌာနနှငျ့ ပွညျထဲရေးဝနျကွီးဌာနက မှတျ ခကျြပေးခဲ့ကွောငျး အောကျတိုဘာလ ၂၃ ရကျနေ့ နိုငျငံတျော သမ်မတအိမျတျောတှငျ ပွုလုပျသညျ့ သတငျးစာရှငျးလငျး ပှဲတှငျ သမ်မတရုံးပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဦးဇျောဌေးက ပွောဆိုထားသညျ။
UEC ၏ ရှေးကောကျပှဲ မပွုလုပျနိုငျသောနရောမြား ကွညောခဲ့သညျ့အတှကျ ပွညျသူ့လှတျတျော မဲဆန်ဒနယျအတှကျ တဈ နိုငျငံလုံးအတိုငျးအတာအရ ၃၃ဝနရောရှိသညျ့အနကျ ကငျြးပမညျ့ နရောပေါငျး ၃၁၅ခုသာရှိပွီး မကငျြးပနိုငျသညျ့နရော ၁၅ ခုရှိကွောငျး၊ အမြိုးသားလှတျတျောမဲဆန်ဒနယျအတှကျ တဈနိုငျငံလုံးအတိုငျးအတာအနဖွေငျ့ ၁၆၈ နရောရှိအနကျ ကငျြးပနိုငျ သညျ့ မဲဆန်ဒနယျ ၁၆၁ နရောရှိပွီး မကငျြးပနိုငျသညျ့ မဲဆန်ဒနယျ ၇ နရောကာ တိုငျးဒသေကွီးပွညျနယျလှတျတျော ၆၄၄ နေ ရာရှိသညျ့အနကျ ၆၁၄ နရောသာကငျြးပနိုငျခွငျးရှိပွီး မကငျြးပနိုငျသညျ့နရော ၃ဝခု ရှိကွောငျး သမ်မတရုံးထံမှ သိရှိရသညျ။ https://www.khitthitnews.com/2020/1 0/%e1%80%95%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80
အိမျနီးခငျြးထိုငျးနိုငျငံနှငျ့ အဓိကကုနျသှယျမှု ပွုလုပျနသေညျ့ မွဝတီနယျစပျ မွနျမာ-ထိုငျး အမှတျ ၂ ခဈြကွညျရေး တံတားမှ နှဈနိုငျငံကုနျသှယျမှုကို ပွီးခဲ့သညျ့ အောကျတိုဘာလ ၁၉ ရကျနစေ့၍ ကုနျစညျဖွတျသနျးမှုကို ယာယီရပျဆိုငျးလိုကျသညျ့ အတှကျ လကျရှိတှငျ ဒသေတှငျးစားသုံးကုနျဈေးကှကျအပျေါ ရိုကျခတျမှုရှိနကွေောငျးသိရသညျ။ Covid-19 ရောဂါကူးစကျ ပွနျ့ပှားမှု ထိနျးခြုပျကာကှယျရေးအတှကျ ထိုငျးနှငျ့မွနျမာ နှဈဖကျသဘောတူညီမှုဖွငျ့ ကုနျသှယျမှု ယာယီရပျဆိုငျးထားသလို covid- 19 ဂယကျကွောငျ့ ပွညျတှငျး၌လညျး အသှားအလာ ကနျ့သတျထားသညျ့အတှကျ ကုနျပစ်စညျးသယျယူရောငျးခရြာ တှငျအခကျအခဲဖွဈခွငျး ၊ ဈေးနှုနျးမွငျ့တကျလာခွငျးတို့ရှိနသေညျဟု ယခငျထိုငျးဘကျခွမျးကနေ၍ ဟငျးသီးဟငျးရှကျမြားကို မွနျမာဘကျသို့ တငျသှငျးပွီး မွဝတီမွို့ ဘုရငျ့နောငျဈေးတှငျ ပွနျလညျဖွနျ့ဖွူးရောငျးခပြေးနသေညျ့ ကုနျစိမျးဒိုငျမြားထံမှ သိရ သညျ။
ကရငျလေး ကုနျစိမျးဒိုငျမှ မအေးအေးထှေးက “အရငျကဆိုရငျ ထိုငျးဘကျခွမျးမှာ ဝယျယူခဲ့စဉျသခှားသီး ၁၀ ကီ လိုကို ကပျြ ၃၅၀၀ / ၄၀၀၀ ကပျြသာ ရှိနပေမေယျ့ ယခုအခါမှာတော့ မွနျမာပွညျအောကျဘကျခွမျးကနေ သှားဝယျတဲ့ လမျးခရီးမှာ သှားရေးလာရေးအခကျအခဲအပွငျ သီးနှံဈေးကလညျးကွီးလို့ အခုဆိုရငျ ၁၀ ကီလိုပို ၆,၀၀၀ ကပျြနဲ့ ပွနျလညျရောငျးခြ နရေတယျ။ အခွားကုနျစိမျးသီးနှံတှလေညျး အလားတူ ဈေးတိုးမွှငျ့ရောငျးခနြရေတယျ”ဟုပွောသညျ။ ၎င်းငျးအပွငျ ဈေးသှား ဈေးဝယျလြော့နညျးလာသလို ဈေးဦးမပေါကျသညျ့နပေ့ငျရှိကွောငျးလညျး မွဝတီမွို့ဘုရငျ့နောငျဈေးအတှငျး အထညျ နှငျ့ အခွားလူသုံးကုနျပစ်စညျးဆိုငျမှ ဈေးသညျမြားက ပွောသညျ။ မွဝတီမွို့ဘုရငျ့နောငျဈေးမှ သဈသီးမြိုးစုံရောငျးခသြူ ဒျေါခငျဆှသေကျ က“ ပွညျတှငျးကနမှော ယူရောငျးခတြာ ခရီးဝေးတော့ သဈသီးတှေ နာလာသလို ဈေးလညျးပိုလာတယျ။ အသီးတှလေညျး မလတျဆတျတော့ရောငျး ပနျးမလှဘူး။ ယခငျထိုငျးဘကျကဝယျရောငျးရာမှာ သယျယူတဲ့နရောက နီးတယျ လေ။ တဈနစေ့ာကုနျသလောကျ သှားဝယျတော့ လတျလတျဆတျဆတျဖွဈလို့ လူကွိုကျမြားပါတယျ။ ဈေးနှုနျးလညျး သကျသာတဲ့အတှကျ ပွနျရောငျးရတာပိုပွီးအဆငျပွတောပေါ့။ ဒါကွောငျ့ယာယီပိတျထားတဲ့ မွဝတီနယျစပျတံတား အမွနျဆုံး ပွနျဖှငျ့ဖို့ ကိုပဲ မြှျောလငျ့နရေတယျ”ဟု ဆိုသညျ။
မွဝတီဘကျတှငျ ဟငျးသီးဟငျးရှကျ ၊သဈသီး၊ အသား၊ ငါး၊ စားသောကျကုနျအခြို့ဈေးတကျလာသလို ထိုငျးနိုငျငံ မဲဆောကျ ဈေးကှကျတှငျ မွနျမာဘကျမှ ဝယျလိုအားမရှိ၍ ကုနျဈေးနှုနျး ထိုးကသြှားကွောငျးလညျး သိရပွီး လာမညျ့ အောကျတိုဘာလ ၂၇ ရကျနတှေ့ငျ အဆိုပါ ထိုငျး-မွနျမာ အမှတျ ၂ တံတားကို နှဈနိုငျငံကုနျ သှယျမှုပွနျ လညျပွုလုပျနိုငျရနျ ထိုငျးဘကျခွမျးက ကွိုတငျပွငျဆငျမှုမြား ပွုလုပျနကွေောငျး သိရသညျ။ http://kicnews.org/2020/10/%e1%80%bb%e1%80%99 %e1%80%9d%e1%80%90%e1%80%ae%e1%
မှနျပွညျနယျ၊ သံဖွူဇရပျမွို့နယျ ပငကြေးရှာ လူငယျမြိုးဆကျသဈ စကျဘီးအဖှဲ့က မှနျညီညှတျရေးပါတီ MUP ရှေးကောကျပှဲ အောငျနိုငျရေးအတှကျ စကျဘီးစီးနငျး၍ သံဖွူဇရပျမွို့နယျတောငျပိုငျးအစှနျရှိ မှနျကြေးရှာမြားသို့ ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ လှညျ့လညျအငျအားပွခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
အသှားအပွနျ မိုငျ ၅၀ ခနျ့ခရီးအကှာအဝေး ရှိသညျ့အတှကျ အသကျ (၁၄) နှဈအထကျလိုကျပါရနျနှငျ့ လူဦးရေ (၅၀) အထိသာ စာရငျးပေးသှငျးသတျမှတျထားသညျထကျ ဝနျးရံသညျ့လူငယျမြားက ပိုမိုမြားပွားနကွေောငျး စကျဘီးစီးအဖှဲ့ဝငျ မငျးဂြာနှနျက ဆိုသညျ။ “ဒီလိုအခြိနျမြိုးမှာ ကြှနျတျောတို့စကျဘီးအဖှဲ့က တဈနိုငျတဈပိုငျအားပေးခှငျ့နှိုးဆျောခှငျ့ရလို့ ကနြေပျ မိတယျ၊ နောကျပွီး မှနျလူငယျတှလေညျး ကနျြးမာရေးလိုကျစားမှု ရှိကွောငျးကိုပွသခငျြတယျ၊ မှနျလူမြိုးတိုငျး မှနျပါတီကို မဲပေးဖို့လညျး နှိုးဆျော တိုကျတှနျးခငျြတယျ”ဟု မငျးဂြာနှနျ ပွောသညျ။
မှနျညီညှတျရေးပါတီ၏ အင်ျကြီ၊ အလံ Mask, Sticker မြားကိုယျစီ တပျဆငျ၍ မဲဆှယျအောငျနိုငျရေး သီခငျြးမြား ဖှငျ့လှဈကာ ပင -သံဖွူဇရပျ- ရှာသဈ-ကရုပ်ပိ-ဝဲဂလောငျး-အံခဲ-ကော့လေး-ထငျးရူး၊ ကြောငျးရှာ၊ အနငျး ကြေးရှာမြားသို့ အသှားခရီးနှငျ့ အပွနျခရီး ပငကြေးရှာအထိ စီးနငျးလှညျ့လညျခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။“ကိုယျ့မှနျပါတီအတှကျ အားပေးခှငျ့ရလို့ ဝမျးသာတယျ၊ ပွညျသူတှကေလညျး ပွနျလညျအားပေးတာတှရေ့တော့ ပိုပွီးတော့ပီတိဖွဈမိတယျ၊ ကိုယျ့မှနျလူမြိုးတှရေဲ့ စိတျဓါတျ နှိုးဆျော ခငျြလို့ စီးနငျးဖွဈတာပါ”လို့ စကျဘီးစီးနငျးလိုကျပါသူ မိအိန်ဒွာပှငျ့ဖွူ ကပွောသညျ။ ပငလူငယျမြိုးဆကျသဈ စကျဘီးအဖှဲ့ ကို ၂၀၁၆ ခုနှဈတှငျ ဖှဲ့စညျးခဲ့ပွီး လူငယျမြား သဘာဝ ပတျဝနျးကငျြထိနျးသိမျးတတျရနျ၊ စညျးလုံးမှုရှိရနျနှငျ့ လူငယျမြား၏ စိတျခန်ဓာကနျြးမာရေးအတှကျ ရညျရှယျဖှဲ့စညျးခဲ့သညျဟု သိရသညျ။ http://burmese.monnews.org/2020/10/23/%e 1%80%99%e1%80%bd%e1%80%94%e1%80%ba%e1%8
သကျငယျမုဒိနျးကြူးလှနျရနျအားထုတျသူကို အောကျတိုဘာ ၂၆ ရကျနမေ့နကျတှငျ ဟားခါးခရိုငျတရားရုံးမှ ရာဇသတျကွီး ဥပဒပေုဒျမ ၃၇၆ အရ ထောငျဒဏျ (၁၀)နှဈ ပွဈဒဏျခမြှတျလိုကျကွောငျးသိရသညျ။
ကလေးငယျ၏ မိခငျမှ ပွဈဒဏျခမြှတျခွငျးနှငျ့ ပတျသတျပွီး “ ပွဈဒဏျခမြှတျသညျ့အပျေါ ကနြေပျပါတယျ၊ ဘာဖွဈလို့လဲ ဆိုတော့ တရားခံက ကြှနျမတို့ရဲ့ရနျသူလညျးမဟုတျဘာဘူး၊ပိုပွီးအပွဈပိုကွီးပါစဆေိုပွီး သဘောထားတာလညျးမရှိဘူး၊ ကြှနျမတို့လိုခငျြတာက တရားမြှတမှုပဲဖွဈပါတယျ၊ ဥပဒအေရပဲ ဆောငျရှကျတာပဲလိုခွငျတာဖွဈတယျ၊တရားသူကွီးကလညျး ကြှနျမတို့ပွောတဲ့ဟာနဲ့သူတို့ပွောတဲ့အပျေါကို သုံးသပျပွီးတော့ ဒီဟာက တကယျကိုအမှနျတကယျဖွဈတယျဆိုပွီးတော့ ဥပဒေ အရ ပွဈဒဏျခမြှတျတဲ့အပျေါကနြေပျမှုရှိပါတယျ”ဟု Chin World Media သို့ပွောသညျ။ အသကျ ၄ နှဈ အရှယျမိနျး ကလေးအပျေါကြူးလှနျသောယခုသကျငယျမုဒိနျးမှုသညျ ၂၄ရကျ ၈လပိုငျးတှငျ အမှုစတငျဖှငျ့ပွီး ၊ စကျတငျဘာလ ၂၈ ရကျ နေ့ တှငျ အမှုစဈပွီး ယနအေ့ောကျတိုဘာလ ၂၆ ရကျနတှေ့ငျ တရားခံကို ပွဈဒဏျခမြှတျခွငျးဖွဈကွောငျးလညျးသိရသညျ။
“ဒီလိုကိစ်စမြိုးက ကြှနျမတို့ပွဈဒဏျကို တရားမြှတမှုပွညျ့ဝစှာခစြခေငျြတယျဆိုတာ ကြှနျမတို့က တရားခံကို မုနျးလို့လညျး မဟုတျဘူး ၊ဒါပမေယျ့ ဒီလိုကိစ်စမြိုးက တဈကွိမျဖွဈပွီဆိုတာနဲ့ နောကျတဈကွိမျဖွဈဖို့အလားလာက သိပျမြားတယျ ဒါကွောငျ့ မို့လို့ အမှုတဈခုဖွဈပွီဆိုတာနဲ့ တရားမြှတမှု ပွညျ့ဝစှာ ပွဈဒဏျခမြှတျနိုငျတယျဆိုရငျ နောကျတဈကွိမျအလားတူ ကိစ်စမြိုး မဖွဈအောငျ အမြားကွီးအတားအဆီးဖွဈသှားတယျ၊ကွိုတငျကာကှယျပွီးသားဖွဈသှားတယျ၊ သငျခနျးစားယူစရာအမြာားကီး ဖွဈသှားတယျပေါ့၊ တရားမြှတယျ မမြှတဘူးဆိုတာက ဥပဒကေ သတျမှတျပွီးသားအကုနျရှိပွီးသားဆိုတော့ ဥပဒကေ သူ့လမျးကွောငျးနဲ့သူ သှားတာဖွဈတယျ၊အခုလိုမြိုးအခြိနျ ၂လလောကျက ဒီ Victoria ကိစ်စတောငျမှ တဈနှဈကြျောကွာတဲ့ အခြိနျမှာ တရားခံကပြောကျသှားသလို ဖွဈသှားတယျ၊ ဒီကိစ်စက အခြိနျခဏလေးမှာ အပွီးအပတျြ ပွဈဒဏျခမြှတျတဲ့ အထိဖွဈသှားတော့ ဒီ Case မှာ ကြှနျမတော့ တရားစီရငျရေးဘကျမှာ တာဝနျရှိတဲ့သူတှရေော အထူးသဖွငျ့ ကြှနျမတို့ စိတျရောကိုယျရောကူညီပေးတဲ့ အစိုးရဘကျက ပေးတဲ့ ခရိုငျဥပဒအေရာရှိ နောကျတဈခုက Legal Support Team ကျောမတီဆိုတာလညျးရှိတယျ၊သူတို့ဆိုလို့ရှိရငျ အခမဲ့ကူညီပေးတဲ့အသငျးလညျးဖွဈတယျ၊ဒီအဖှဲ့က ရှနေ့တှေကေိုလညျး ကြှနျမတကယျကို ကြေးဇူးတငျခငျြတယျ၊” ဟု ခငျြးလူ့အခှငျ့အရေးအဖှဲ့မှ ဌာနတိုငျးရငျးသားဖှံ့ဖွိုးမှုအစီအစဉျ Program Director Mai Thin Yu Mun မှ ပွောသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-76534
၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲမှာ အနိုငျရရှိပါက အရပျဖကျအဖှဲ့အစညျးနှငျ့ ပွညျသူလူထုကနျ့ကှကျနတေဲ့ လှိုငျကျောမွို့က ခဲသတ်တု သနျ့စငျစကျရုံတညျဆောကျနမှေုအပျေါ ပွနျလညျသုံးသပျသှားမညျမယျလို့ ကယားပွညျနယျဒီ မိုကရကျတဈပါတီ (KySDP) မှ လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျးတှကေ ကတိပေးပွောကွားခဲ့သညျ။
“သဘာဝပတျဝနျးကငျြစိမျးလနျးစိုပွရေေးနဲ့ သဘာဝပတျဝနျးကငျြထိနျးသိမျးရေးအတှကျ တဈစိုကျမတျမတျလုပျ သှားမယျ လို့ ကတိပေးတယျ။ ခဲသတ်တုသနျ့စငျစကျရုံပုံစံမြိုးကို ပွနျလညျသုံးသပျပွီးတော့မှ ကြှနျတျောတို့ပွညျသူ တှအေတှကျ ဘယျလောကျထိ အကြိုးရှိစသေလဲ၊ ဘယျလောကျထိအကြိုးပကျြဆီးစသေလဲဆိုတဲ့ဟာမြိုးကို ပွနျပွီး လလေ့ာသုံးသပျဖို့ လိုအပျတယျလို့ ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့မွငျတယျ။ ဒါကွောငျ့ ပွညျသူလူထုတှအေနနေဲ့ ကြှနျတျောတို့ကို မဲပေးခဲ့လို့ လှတျတျော ထဲရောကျသှားမယျ၊ အစိုးရအဖှဲ့ထဲရောကျသှားမယျဆိုလို့ရှိရငျ ဒီစီမံကိနျးတှကေို ပွနျပွီးတော့မှ သုံးသပျနိုငျဖို့အတှကျ တကယျကော သူတို့တှေ EIA/SIA ပုံစံမြိုးတှေ တကယျကောလုပျသလားပေါ့။ EIA၊ SIA နဲ့မပွီးဘူး CRA HIA တို့လိုမြိုး အမြားကွီးရှိတယျပေါ့နော။ အဲဒါတှနေဲ့ ဘယျလောကျထိ စမျးသပျစဈဆေးပွီးတော့မှ သုတသေနလုပျပွီးတော့မှ ဒီစကျရုံတှေ လညျပတျဖို့အတှကျ ကွိုးစားနတေယျဆိုတဲ့ဟာကို ပွနျလလေ့ာပွီးတော့မှ ပွနျသုံးသပျပွီးတော့မှ ရပျနားသငျ့/မသငျ့ မဟုတျ လို့ရှိရငျ ရှပွေ့ောငျးသငျ့/မသငျ့ ဆုံးဖွတျရလိမျ့မယျလို့ ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ ယုံကွညျတယျပေါ့။ ဒါတှကေိုလညျး တဈစိုကျ မတျမတျ လုပျသှားမယျဆိုတဲ့ကတိမြိုး ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ပေးခငျြပါတယျ” ဟု စတီဗငျ (ခ) ထှနျးထှနျးက ပွောသညျ။
ခဲသတ်တုသနျ့စငျစကျရုံကို Global South Industrial Co.Ltd နှငျ့ ပွညျတှငျးက ရတနာကုဋသေိုကျကုမ်ပဏီလိမိတကျတို့ ဖကျစပျလုပျကိုငျခွငျးဖွဈပွီး ခဲမဖွူ၊ အဖွိုကျနကျနှငျ့ရောရာသတ်တုတှကေို ကုနျခြောထုတျလုပျငနျးကိုလုပျဆောငျဖို့ သတ်တု သနျ့စငျစကျရုံတညျဆောကျနခွေငျးဖွဈပါတယျ။ ထိုစီမံကိနျးအတှကျ Global South Industrial Co.Ltdအနဖွေငျ့ အမရေိကနျဒျေါလာသနျး ၄၅ သနျး (စုစုပေါငျရငျးနှီးမွှုပျနှံမှု ပမာဏ၏ ၉၀%)၊ ရတနာကုဋသေိုကျ ကုမ်ပဏီလိမိတကျ အနေ ဖွငျ့ အမရေိကနျဒျေါလာ ၅ သနျး (စုစုပေါငျးရငျးနှီးမွှုပျနှံပမာဏ ၏ ၁၀%) စုစုပေါငျး အမရေိကနျဒျေါလာ သနျး ၅၀ ရငျးနှီး မွှုပျနှံထားတာဖွဈပါတယျ။ စီမံကိနျးအတှကျ မွနျမာနိုငျငံရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုကျောမရှငျထံကနေ ခှငျ့ပွုမိနျ့အမိနျ့ (၁၆၈/၂၀၁၉) ဖွငျ့ နှဈ၅၀ လုပျပိုငျခှငျ့ကို ပွီးခဲ့သညျ့ ၂၀၁၉ ခုနှဈ ဇူလိုငျ ၆ ရကျနကေ့ ရရှိထားပွီး လုပျငနျးကိုအကောငျအထညျဖျော ဆောငျ ရှကျနကွေတာဖွဈပါတယျ။ ၎င်းငျးက “ဒီစကျရုံတှနေဲ့ပတျသကျပွီး လူထုတှကေ မသိနားမလညျခဲ့ဘူး။ ကုမ်ပဏီတှကေ လကျရှိ ဦးဝငျးမျောနဲ့ပတျသကျတဲ့ Global South Industrial Co.ltd လညျး EIA၊ SIA လုပျထားတာလညျး ဘာမှမရှိဘူး။ ပွီးတော့ HIA ကနျြးမာရေးနဲ့ပတျသကျတဲ့ လလေ့ာဆနျးစဈခကျြတှေ သူတို့ဘားမှမလုပျဘူး။ အဲဒါကွောငျ့ မလုပျဘဲနဲ့ ဒီစကျရုံကို MIC က ဘယျလိုလုပျ ခှငျ့ပွုမှုပေးလဲဆိုတာ ကတြေျာ့အနနေဲ့စိုးရိမျမှုဖွဈတယျ” လို့ပွောပါတယျ။
ကယားပွညျနယျဒီမိုကရကျတဈပါတီက ပွညျနယျအခွစေိုကျတိုငျးရငျးသားပါတီဖွဈပွီး ကယားပွညျနယျ မွို့နယျ (၇) မွို့နယျ ရှိ မဲဆန်ဒနယျ ၃၄ နရောအနကျ ၃၀ နရောမှာ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျသှားမှာဖွဈပါတယျ။ https://www.bnionline.net /mm/news-76537
Stay at home ကွညောနိုငျသညျ့ ကခငျြပွညျနယျမွို့နယျနှဈခုတှငျ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးကို တကျသုတျရိုကျပွုလုပျခဲ့ရကွောငျး မွဈကွီးနာမွို့နယျ တိုငျးလိုငျ (ရှမျးနီ) အမြိုးသားဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးပါတီ ဥက်ကဌ ဦးစိုငျးတငျမောငျလှငျကပွောသညျ။ လကျရှိတှငျ ကခငျြပွညျနယျ မိုးညှငျးမွို့နယျနှငျ့ ဖားကနျ့မွို့နယျမြားကို ကမျြးမာရေးဝနျကွီးဌာနမှ Stay at home သကျမှတျ ထားပွီး ကိုဗဈဖွဈပှားမှုမြားရှိနသေညျ့ မွဈကွီးနားနှငျ့ ဝိုငျးမျောမွို့နယျမြားနှဈခုတှငျလညျး Stay at home သတျမှတျလာ နိုငျသဖွငျ့ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးကို အောကျတိုဘာ ၂၅ ရကျတှငျ အလြှငျအမွနျ ပွုလုပျခဲ့ရခွငျးဖွဈကွောငျး ၎င်းငျးကပွောသညျ။
“ကြှနျတျောတို့ကတော့ သသေခြောခြာစနဈတကလြေး စီစဉျပွီးတော့မှ အငျအားမြားမြားလေးလုပျခငျြတာ။ ကိုယျအမြိုးသား ရေးအတှကျဆိုတော့ ဒါပမေယျ့လညျး Stay at home ကမျြးမာရေးကိစ်စလဲရှိတော့ မွနျမွနျဆနျဆနျလုပျလိုကျရတဲ့ သဘော ပေါ့” ဟု မွဈကွီးနာမွို့နယျ တိုငျးလိုငျ (ရှမျးနီ) အမြိုးသားဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးပါတီ ဥက်ကဌ ဦးစိုငျးတငျမောငျလှငျ က ပွော သညျ။ အဆိုပါ မဲဆှယျစညျးရုံးခွငျးကို မွဈကွီးနာမွို့နယျ ရှမျးနီပါတီနှငျ့ ဝိုငျးမျောမွို့နယျ ရှမျးနီပါတီတို့ပူးပေါငျးကာ အငျအား သုံးထောငျကြျောဖွငျ့ မွဈကွီးနားမွို့မှ ဝိုငျးမျောမွို့အထိ စီတနျးလှညျ့လညျခဲ့ကွခွငျးဖွဈသညျ။
တိုငျးလိုငျ (ရှမျးနီ) အမြိုးသားမြားဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး (ကြားနီ) ပါတီသညျ ရှေးကောကျပှဲတှငျ လှတျတျောကိုယျစားလှယျ လောငျး ၄၁ ဦး ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျဖွဈပွီး မွဈကွီးနားမွို့နယျတှငျ လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး လေးဦး၊ ဝိုငျးမျော မွို့နယျတှငျ လှတျတျောကိုယျစား လှယျလောငျး သုံးဦးနှငျ့ ရှမျးတိုငျးရငျးသားရရော လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး တဈဦး၊ ဗမာတိုငျးရငျးသားလူမြိုးရေးရာ လှ တျတျောကိုယျစားလှယျလောငျးတဈဦး ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျကွမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-76530
စဈအစိုးရလကျထကျ က မွနျမာ့အသံနှငျ့ ရုပျမွငျသံကွားက သြှမျးဘာသာစကားနဲ့ သြှမျးလူမြိုးတှအေတှကျ သတငျးတငျ ဆကျပေးခဲ့တဲ့ သူတဦးကို မှတျမိကွမယျထငျပါတယျ။ ည (၈)နာရီ သတငျးကွညောမှုအပွီး တိုငျးရငျးသားစညျးလုံး ညီညှတျ ရေး သီခငျြးကို ရုပျမွငျသံကွားမှာ သြှမျးဘာသာဖွငျ့ သီဆိုပေးခဲ့တဲ့ နနျးဆာဥ ကို သြှမျးလူမြိုးတှေ သာမက မွနျမာလူမြိုး အသိုငျးအဝနျးမှာ ခဈြစရာဟနျပနျနဲ့ ထငျပျေါခဲ့ပါတယျ။ လကျရှိမှာတော့သူမဟာ ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြား ဒီမိုကရစေီ အဖှဲ့ ခြုပျ(SNLD)ပါတီ ကိုယျစားပွုပွီး ၂၀၂၀ ပါတီစုံ ဒီမိုကရစေီ အထှထှေေ ရှေးကောကျပှဲမှာ မွနျမာ-ထိုငျးနယျစပျ သြှမျးပွညျ အရှပေို့ငျးတာခြီလိတျမွို့နယျ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၂) မှာ ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျအဖွဈ ဝငျရောကျယှဉျပိုငျမှာပါ။
“ ကမြ က ပွညျသူတှကွေုံတှနေ့ရေတဲ့အခကျအခဲတှကေို ရှတေ့နျးကနေ မားမားမတျမတျ ရပျတညျပေးပွီး ဖွရှေငျးပေး ခငျြတဲ့အတှကျ နိုငျငံရေးဘကျကို ခွလှေမျးလှညျ့လာခဲ့တာပါ” လို့ နနျးဆာဥ က ဆိုပါတယျ။ သူမ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျတဲ့ သြှမျးရှေ့ မှာဆိုရငျ ပွဿနာတှေ၊ ဥပဒမေဲ့မှုတှေ ရှုပျထှေးမှုပေါငျးမြားစှာရှိပွီး ထိုပွဿနာတှကေို ပွညျသူရဲ့ရှတေ့နျးကနေ ရပျတညျ ဖွရှေငျးပေးခငျြတယျလို့ ပွတျသားစှာ ပွောဆိုလိုကျပါတယျ။ နနျးဆာဥ ဟာ တက်ကသိုလျဝငျတနျးအောငျပွီး ကတညျးက အစိုးရအဖှဲ့အစညျးအောကျရှိ အထှထှေအေုပျခြုပျရေးရုံးမှာ အငယျတနျးစာရေး အနနေဲ့ အလုပျလုပျကိုငျခဲ့သူ တဦးဖွဈပါတယျ။ ထိုမှ တဈဆငျ့ အစိုးရပိုငျ မွနျမာ့အသံနှငျ့ရုပျမွငျသံကွားဌာနမှာ သြှမျးဘာသာ ရဒေီယိုအသံလှငျ့ အစီ အစဉျ တငျဆကျသူအဖွဈလညျး တာဝနျထမျးဆောငျပွီး အစိုးရဝနျထမျးမှာ လုပျသကျ ၁၆ နှဈ ရှိခဲ့သူ တဦးလညျးဖွဈပါတယျ။ သူမဟာ အစိုးရအလုပျမှရပျနားလိုကျပွီး သြှမျးပွညျ လူထု အကြိုးအတှကျ လူမှုအဖှဲ့အစညျးထဲကနပွေီး လယျယာမွအေရေး၊ ရှပွေ့ောငျးအလုပျသမားအရေး တှကေို တကျကွှစှာ ဆောငျရှကျခဲ့သူတဦးလညျးဖွဈပါတယျ။
သြှမျးရှေ့ ပွဿနာ မြားစှာထဲက အကွီးမားဆုံးပွဿနာ နောကျတခုကတော့ ၂၀၁၀ ခုနှဈနောကျပိုငျးမှာ ဓာတျသတ်တု တူးဖျောမှုတှေ၊ ကြောကျမီးသှေး တူးဖျောမှုတှကွေောငျ့ ကြေးရှာပေါငျးရဲ့ လယျယာမွေ ပကျြစီးမှုတှေ တောတောငျသဘာဝ သယံဇာတ ပကျြစီးမှုတှကွေောငျ့ ယခငျမကွုံဖူးတဲ့ ရကွေီးမှုပွဿနာဟာလညျး လှတျတျောအမတျလောငျးနနျးဆာဥ အတှကျ စိနျချေါမှုတခုပါပဲ။“သတ်တုတူးဖျောလို့ ထှကျလာတဲ့ မွစောပုံတှကွေောငျ့ သူတို့ရဲ့လယျယာမွတှေေ ရလှေမျးမိုး တာတှေ ဖွဈလာတယျ။ သတ်တုတူးဖျောမှုကွောငျ့ ပွညျသူတှရေဲ့ လယျယာမွတှေေ ထိခိုကျနဈနာဆုံးရှုံးတာတှကေိုတှေ့ ရတယျ”လို့ နနျးဆာဥ က စိတျမကောငျးစှာဖွငျ့ ပွောပါတယျ။ ၂၀၂၀ ပါတီစုံ ဒီမိုကရစေီ ရှေးကောကျပှဲမှာ နနျးဆာဥ အနေ ဖွငျ့ အနိုငျရခဲ့မယျဆိုရငျ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု ကငျးမဲ့နပွေီး၊ အမြိုးသမီးငယျတှေ လူငယျကုနျးခံရမှုမြားတဲ့နယျမွအေတှကျ လှတျတျောထဲမှာ အမြိုးသမီးနှငျ့ သကျဆိုငျတဲ့ အခှငျ့အရေး၊ ကလေးသူငယျနဲ့ ပတျသကျတဲ့ အခှငျ့အရေးကိစ်စ၊ ကြေးလကျနေ ပွညျသူ လူထုရဲ့ရသငျ့ရထိုကျတဲ့ အခှငျ့အရေးတှကေို ဆောငျရှကျပေးခငျြကွောငျး သူမ ကခပြွလိုကျပါတယျ။ သူမအနနေဲ့ ကတော့ တာခြီလိတျပွညျသူလူထုရှေ့ မားမားမတျမတျရပျတညျကာ ဒသေ ပွဿနာတှေ၊ ဒသေဖှံ့ဖွိုးရေး ကိစ်စတှကေို ဖွရှေငျးသှားဖို့အတှကျ သူမကို မဲပေးကွရနျလညျး တိုကျတှနျးပွောဆိုလိုကျပါတယျ။ https://burmese.shannews.org/a rchives/19054
မှနျပွညျနယျ မျောလမွိုငျမွို့နယျသို့ အခွားဒသေမှ ရောကျရှိလာပွီး ရကျ ၉၀ ထကျမနညျး နထေိုငျခဲ့သူမြားက လာမညျ့ ရှေးကောကျပှဲအတှကျ ဆန်ဒမဲ ပေးနိုငျရနျ ပုံစံ ၃(က)ဖွငျ့ လြှောကျထားသူဦးရေ ၂၆၀၀ နီးပါး ရှိခဲ့ကွောငျး မွို့နယျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲရုံးထံမှ သိရသညျ။“ပုံစံ ၃(က)နဲ့ လြှောကျထားမှုအခွအေနကေတော့ ၂၅၉၉ ဦး လြှောကျ ထားခဲ့တယျ” ဟု မွို့နယျရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးဌေးလှငျက အောကျတိုဘာ ၂၀ တှငျ ပွောကွားသညျ။ မဲဆန်ဒနယျ ပွငျပရောကျ ပွညျသူမြားအနဖွေငျ့ လကျရှိရောကျနရောဒသေတှငျပငျ ဆန်ဒမဲပေးနိုငျရနျ ပုံစံ ၃(က)ဖွငျ့ လညျးကောငျး၊ ပုံစံ ၁၅ ဖွငျ့လညျးကောငျး လြှောကျထားနိုငျကွကွောငျး ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျက ကွညော ခကျြမြား ထုတျပွနျထားခဲ့သညျ။
ပုံစံ ၃ (က) ဖွငျ့ လြှောကျထားသူသညျ ရပျကှကျကြေးရှာကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲရုံးအသီးသီးသို့ သှားရောကျလြှောကျထားနိုငျပွီး ပုံစံ ၁၅ ဖွငျ့ လြှောကျထားလိုသူမှာမူ မွို့နယျအဆငျ့ ရုံးမြားသို့သာ လြှောကျထားခှငျ့ ရှိကွောငျး နှငျ့ ပုံစံ ၃ (က) ဖွငျ့ လြှောကျ ထား၍ မဲပေးခှငျ့ရပါက လကျရှိရောကျနရော မဲဆန်ဒနယျက လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျးမြားကိုသာ ရှေးကောကျပှဲနေ့၌ မဲပေးခှငျ့ ရကွမညျဖွဈပွီး ပုံစံ ၁၅ ဖွငျ့ လြှောကျထားလြှငျ မိမိနရေပျရငျး မဲဆန်ဒနယျက လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး မြားကို ကွိုတငျမဲစနဈဖွငျ့ ဆန်ဒပွုပိုငျခှငျ့ ရရှိကွမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ “မဲပေးရမယျဆိုရငျတော့ ကိုယျ့မဲဆန်ဒနယျထဲက အမတျလောငျးကိုပဲ မဲပေးခငျြတယျ။ မပွနျနိုငျတော့လညျး ဒီ(မျောလမွိုငျ)မှာပဲ မဲပေးဖို့ ရပျကှကျရုံးမှာ ပုံစံ ၃ (က) တောငျးပွီး ခုလ ၈ ရကျနမှေ့ာ လြှောကျလိုကျတယျ။ လြှောကျပွီးတဲ့အခါမှ ပုံစံ ၁၅ ကနေ ကိုယျ့မဲဆန်ဒနယျ နယျမွရေငျးကို လှမျးပွီး ကွိုတငျမဲ ပေးခှငျ့ ရှိကွောငျး သိလိုကျရတယျ။ ကိုယျ့အတှကျ လှဲသှားတယျ” ဟု မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီးမှ မျောလမွိုငျသို့ ရောကျရှိနခေဲ့သညျ့ မဲဆန်ဒရှငျပွညျသူ ကိုနဝေငျးမောငျ (အမညျလှဲ) က ပွောသညျ။
“တခွားမွို့နယျကနပွေီးတော့ ပုံစံ ၁၅ တှေ လြှောကျတဲ့အတှကျကွောငျ့ မဲလကျမှတျ ရောကျလာတာ ရှိတယျ။ မနေ့ ကဆိုလို့ရှိရငျ ၄၁ စောငျ ရောကျလာတယျ။ အဲဒါကို ညနေ ၆ နာရီကနေ ၇ နာရီအတှငျးမှာ ပွညျသူတှကေိုချေါပွီးတော့ မွို့နယျရုံးမှာ ကွိုတငျမဲပေးခဲ့တယျပေါ့။ အခုကွိုတငျမဲတှစေပေးနပေါပွီ”ဟု ဒျေါမိုးဇငျမာဦးက ပွောသညျ။ မှနျပွညျနယျတှငျ လာမညျ့ ရှေးကောကျပှဲ၌ ဆန်ဒမဲပေးပိုငျခှငျ့ရှိသူ ၁၈ သိနျးဝနျးကငျြရှိနပွေီး ပထမဆုံးအကွိမျ မဲပေးခှငျ့ရလာသူ လူငယျ တဈသိနျးကြျောရှိနသေညျ။ ဘီးလငျးမွို့နယျ ဘောနျောခီးကြေးရှာမှအပ ပွညျနယျတဈဝနျးတှငျ ရှေးကောကျပှဲကငျြးပမညျ ဖွဈသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-76518
အစိုးရ၊ တပျမတျောနှငျ့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးမြားအကွား တဈဖှဲ့နှငျ့တဈဖှဲ့ ယုံကွညျမှုရှိသညျ့အတှကျ NCA စာခြုပျ ဖွဈပျေါလာသျောလညျး လကျရှိတှငျမူ အဆိုပါ ယုံကွညျမှုပကျြပွားစရေနျ အသေးစိတျကအစ အငွငျးပှားမှုမြား ဖွဈပျေါနကွေောငျး တပျမတျောသတငျးမှနျပွနျကွားရေးအဖှဲ့မှ ဗိုလျခြုပျဇျောမငျးထှနျးက ပွောကွားသညျ။
နပွေညျတျောရှိ တပျမတျောစဈသမိုငျးပွတိုကျတှငျ အောကျတိုဘာ ၂၄ ရကျက တပျမတျောသတငျးမှနျ ပွနျကွားရေးအဖှဲ့က သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲ ပွုလုပျခဲ့ပွီး အဆိုပါသတငျးစာရှငျးလငျးပှဲတှငျ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးနှငျ့ ပတျသကျ၍ ဗိုလျခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးက ထိုသို့ပွောကွားခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။“ ပွောခငျြတာကတော့ တဈဦးနဲ့တဈဦး၊ တဈဖှဲ့နဲ့တဈဖှဲ့ ယုံကွညျမှုရှိကွ လို့ ဒီစာခြုပျကို သဘောတူခဲ့ကွတယျ။ ယုံကွညျမှု တညျဆောကျခဲ့ကွတယျ။ အခုအခြိနျမှာတော့ ဒီယုံကွညျမှု ပကျြပွားဖို့ အသေးစိတျက အစပေါ့နျော အငွငျးပှားတဲ့ပုံစံမြိုးတှေ ဖွဈလာပါတယျ။ ဘယျသူ့မှာ တာဝနျရှိသလဲဆိုတာကို မေးခှနျးထုတျ စရာ ဖွဈလာတဲ့သဘော ဖွဈပါတယျ” ဟု ဗိုလျခြုပျဇျောမငျးထှနျးက ပွောကွားသညျ။
NCA စာခြုပျနှငျ့ပတျသကျ၍ NCA တှငျ မညျသို့ကွိုပမျးခဲ့ရသညျ၊ မညျသို့ဆောငျရှကျခဲ့ရသညျ၊ မညျသညျ့အခကျြမြားကို ဆှေးနှေးခဲ့ရသညျဆိုသညျမြားအား တရားဝငျ စာရှကျစာတမျးမြား၊ စာရငျးဇယားမြား ထုတျပွနျထားပွီးဖွဈကွောငျး၊ လကျရှိ အခြိနျ စကားလုံးတဈလုံးခငျြးစီအပျေါတှငျ ထပျမံ၍ အဓိပ်ပာယျဖှငျ့ဆိုရနျ လိုခွငျးသညျ ယုံကွညျမှုအပျေါ မူတညျ၍သာဖွဈ ကွောငျး ဗိုလျခြုပျဇျောမငျးထှနျးက ပွောကွားသညျ။ မွနျမာ့ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျတှငျ NCA ကဲ့သို့ EAO အားလုံးနီးပါး ပါဝငျ ဆှေးနှေးခဲ့ခွငျး၊ တိုငျးရငျးပွညျသူလူထု လိုလားသညျ့ ဒီမိုကရစေီနှငျ့ ဖကျဒရယျကို အခွခေံသညျ့ ပွညျထောငျစုတညျ ဆောကျရနျ အခွခေံသဘောတူညီခဲ့ခွငျးမြိုး သမိုငျးတှငျ မရှိခဲ့ဖူးကွောငျး၊ စကားလုံးတဈခုခွငျး၊ စာပိုဒျတဈပိုဒျခွငျး၊ အသေး စိတျ အကအြေလညျ ဆှေးနှေးသဘောတူခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး ၎င်းငျးက ပွောကွားသညျ။ https://news-eleven.com/article /196263
ရခိုငျပွညျနယျ၊ အမျးမွို့နယျ ဒါးလကျမွောကျရှာမှ ရှာသား ၁၂ ဦးနှငျ့ အနောကျရှာ (ရှမျးကုနျးရှာ) မှ ၂ ဦး စုစုပေါငျး ရှာသား ၁၄ ဦးကို တပျမတျောမှ ချေါဆောငျသှားသညျမှာ တပတျခနျ့ကွာမွငျ့နပွေီ ဖွဈသျောလညျး ယနအေ့ထိ အဆကျအသှယျ မရကွသဖွငျ့ အသကျအန်တရာယျ စိုးရိမျနရေကွောငျး မိသားစုဝငျမြားက ပွောသညျ။ အဆိုပါ ဒသေခံ ၁၄ ဦးတို့မှာ ပွီးခဲ့သညျ့ အောကျတိုဘာလ ၂၀ ရကျနေ့ နံနကျပိုငျးက ကြေးရှာအနီး ဒါးလကျခြောငျးထဲတှငျ လှငေယျ ၇ စီးနှငျ့ ငါးရှာနစေဉျ တပျမတျောစဈကွောငျးတခုနှငျ့ တှပွေီ့း ကြေးရှာအနီးရှိ တပျမတျော ယာယီစခနျးသို့ ဖမျးဆီး ချေါဆောငျခံရခွငျးဖွဈကွောငျး ဒသေခံမြားက ပွောဆိုကွသညျ။
ဖမျးဆီးခံရာတှငျပါဝငျသော ဦးမောငျကွညျသနျး၏ ဇနီး မသီတာက “ ငါးရှာတဲ့နရောကနေ မေးစရာ ရှိတယျ ဆိုပွီး ချေါသှား တာ။ လကျရှိမှာတော့ ခြောငျးတဖကျကမျးက တပျမတျော ယာယီစခနျးမှာ ရှိတယျလို့တော့ သိရတယျ။ ချေါသှားတာ အခုဆိုရငျ ၅ ရကျ၊ ၆ ရကျ ရှိပွီတော့ စိုးရိမျရတဲ့အတှကျ ကမြ ယောကျြားကို အမွနျဆုံးလှတျလာဖို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ ” ဟု ပွောသညျ။ ဖမျးဆီး ခံထားရသူတို့မှာ ဒါးလကျမွောကျရှာမှ အသကျ ၃၄ နှဈရှိ ကိုဌေးအောငျ၊ အသကျ ၃၅ နှဈရှိ ကိုညီညီ အောငျ၊ အသကျ ၃၇ နှဈရှိ ကိုလှမျးဝေ၊ အသကျ ၃၅ နှဈရှိ ကိုကြျောဌေးလှိုငျ၊ အသကျ ၃၀ နှဈရှိ ကိုတငျရှေ၊ အသကျ ၃၀ နှဈရှိ ကိုညီသိနျး၊ အသကျ ၃၃ နှဈရှိ ဦးညီဝငျး၊ အသကျ ၂၈ နှဈရှိ ကိုမောငျကွညျသနျး၊ အသကျ ၃၀ နှဈရှိ ကိုခငျမောငျမွငျ့၊ အသကျ ၄၀ နှဈရှိ ဦးဆနျးဝငျးမောငျ၊ အသကျ ၂၅ နှဈရှိ ကိုစိုးမငျးဌေး၊ အသကျ ၂၀ နှဈရှိ မောငျစိုးမငျးနိုငျနှငျ့အတူ ဒါးလကျ အနောကျရှာမှ ရှာသား ၂ ဦးတို့ ဖွဈကွောငျးလညျး ဒသေခံရှာသားမြား ထံမှ သိရသညျ။ ဖမျးဆီးခံထားရသူတို့မှာ ဒသေတှငျး ငါးရှာရနျ တပျမတျောမှ ခှငျ့ပွုထားသူမြားဖွဈကွပွီး ရရှိလာသညျ့ငါးမြားကို တပျမတျောသားမြား ဝယျယူကာ ပိုလြှံသညျ့ ငါးမြားကို ကြေးရှာအတှငျး ရောငျးခလြုပျကိုငျနသေူတို့ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
ဒါးလကျမွောကျရှာမှ ကြောငျးထိုငျဆရာတျော ဦးဝိသုတ်တက “ ဦးဇငျးရှာက ၁၂ ယောကျ ဒါးလကျ အနောကျ ရှာချေါ ရှမျးကုနျး က ၂ ယောကျ စုစုပေါငျး ၁၄ ယောကျကို ချေါသှားတာ။ သူတို့ကို အဲဒီဒသေမှာ ငါးရှာဖို့ အတှကျ တပျကလညျး အရငျတုနျး ကလညျး ခှငျ့ပွုထားတာ။ ရလာတဲ့ ငါးတှကေို တပျမတျောသားတှကေ ဝယျတယျ။ ကနျြပိုလြှံတဲ့ ငါးတှကေို ရှာမှာရောငျး တယျ အဲဒီလိုလုပျနကွေတာ”ဟု မိနျ့ကွားသညျ။ အမျးမွို့နယျအတှငျး လူမှုကူညီရေးလုပျကိုငျနသေူ ကိုမြိုးလှငျက “ အခုလို စားဝတျနရေေးအတှကျ ရှာဖှနေရေတာကို သံသယနဲ့ ဖမျးဆီးခံရတာတှဟော ဒသေခံတှကေ ကွောကျလနျ့စတေယျ။ နောကျပွီးတော့ အပွဈ မရှိရငျ အမွနျဆုံးလှတျပေးသငျ့ပွီ။ အခုလို အခြိနျအကွာကွီး ထိနျးသိမျးထားတာတှေ မလုပျသငျ့ဘူး ” ဟု ထောကျပွသညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/26/232334.html
ကခငျြပွညျနယျ မွဈကွီးနားမွို့မှာ ၁ လအတှငျး ခိုးမှု၊ လုယကျမှုတှေ ကြူးလှနျသူ တရားခံအယောကျ ၅၀ ဖမျးဆီးရမိခဲ့ပွီး လူငယျတှေ အမြားဆုံးပါဝငျတယျလို့ မွို့နယျရဲတပျဖှဲ့မှူးရုံးက ပွောပါတယျ။
မွဈကွီးနားမွို့မှာ စကျတငျဘာ ဒုတိယအပတျကနေ အောကျတိုဘာ ဒုတိယအပတျအထိ ၁ လအတှငျး ခိုးမှု၊ လုယကျမှုမြား ကြူးလှနျသူ တရားခံအယောကျ ၅၀ ကို ဖမျးမိခဲ့တာပါ။ ဖမျးမိခဲ့တဲ့သူတှထေဲမှာ ဖုနျးနဲ့ ပိုကျဆံအိတျ လုယကျသူ လူငယျတှေ အမြားဆုံးပါဝငျတယျလို့ မွဈကွီးနားမွို့နယျရဲတပျဖှဲ့မှူးရုံးက ရဲမှူးမွငျ့မိုးက ပွောပါတယျ။
မွဈကွီးနားမွို့မှာ ဒသေခံတှရေဲ့ အကူအညီကိုရယူပွီး ခိုးမှု၊ လုယကျမှု ကြူးလှနျသူတှကေို ဖျောထုတျ ဖမျးဆီးရေး အရှိနျ အဟုနျမွှငျ့ ဆောငျရှကျခဲ့ရာ ၁၈ နှဈအောကျ တရားခံ ၈ ယောကျ၊ ၁၈ နှဈအထကျ အယောကျ ၄၀ ကို တလအတှငျးမှာ ဖမျးဆီးမိခဲ့တာလို့ သိရပါတယျ။ ဖမျးမိတဲ့အမှုတှထေဲမှာ ရဲစခနျးမှာ လာရောကျအမှုဖှငျ့တိုငျကွားခွငျးမရှိတဲ့ အမှုတှလေညျး ပါဝငျခဲ့ပွီး ထိရောကျတဲ့ ပွဈဒဏျခမြှတျနိုငျရေး ဆောငျရှကျနတေယျလို့ သိရပါတယျ။ http://burmese.dvb.no/archi ves/419085
လာမယျ့ နိုဝငျဘာ ၈ရကျနတှေ့ငျ ကငျြးပမညျ့ ၂၀၂၀ အထှထှေေ ရှေးကောကျပှဲ မဲဆှယျကာလအတှငျး ကရငျပွညျနယျတှငျ ကရငျအမြိုးသားဒီမိုကရကျတဈပါတီ-KNDP နှငျ့ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ-NLD ပါတီတို့ စညျးရုံးရေးအငျအားကောငျး နကွေောငျး သိရသညျ။ ကရငျပွညျနယျတှငျ ယခုရှေးကောကျပှဲအတှကျ ပါတီ ၁၄ ပါတီနှငျ့ တဈသီးပုဂ်ဂလ ကိုယျစားလှယျ လောငျးမြား ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျသှားမညျဖွဈပွီး လကျရှိအခြိနျတှငျ KNDP နှငျ့ NLD ပါတီတို့မှာ အခွားနိုငျငံရေးပါတီမြား ထကျ စညျးရုံးရေးအားကောငျးနသေညျဟု မဲဆန်ဒရှငျပွညျသူမြားက ပွောဆိုနကွေသညျ။
ထိုကိစ်စအပျေါ မကွာသေးခငျက ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျက ဖကျြသိမျးလိုကျသညျ့ နှငျးဆီပါတီဟု လူသိမြား သော UDP မှ ကရငျပွညျနယျ၊ ပအိုဝျးတိုငျးရငျးသားရေးရာ လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး ဖွဈခဲ့ သူ ခှနျအောငျမွငျ့မွတျ က “ကရငျပွညျနယျမှာ NLD လညျးအားကောငျးတယျ။ ကရငျအမြိုးသား ဒီမိုကရကျ တဈပါတီလညျးအား ကောငျးတယျ။ အဲဒီ ၂ ခုပဲ ကနြျောမွငျတယျ။ ကနျြတဲ့ပါတီကတော့ ကနြျောအဲလောကျထိတော့ အားမရဘူးပေါ့နျော။”ဟု ယနေ့ (အောကျ တိုဘာ ၂၃ ရကျ)တှငျ ပွောသညျ။ ကရငျပွညျနယျပါတီမြားပူးပေါငျးကာ KNDP ပျေါပေါကျလာခွငျး၊ ဌာနတေိုငျးရငျးသား မြားအနဖွေငျ့ ဆုံးရှုံးနေ သော အခှငျ့အရေးမြား ရရှိရနျ စိတျအားထကျသနျ မြှျောလငျ့နခွေငျးမြားကွောငျ့ ဒသေခံပါတီ KNDP ကို ပိုမို ဝနျးရံ အားပေးလာသညျဟု မွငျမိကွောငျး KNDP မှ ဖားအံမွို့နယျ အမြိုးသားလှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး နနျးလှယဉျမေ က ပွောသညျ။
“လူငယျရဲ့ ဝနျးရံမှုအားကို ကွညျ့ရငျ KNDP က ပိုအငျအားကောငျးနတေယျပေါ့နျော။ မွဝတီ၊ ကွာအငျးဆိပျကွီး၊ လှိုငျးဘှဲ တို့မှာ အငျအားထောငျ၊ သောငျးခြီပွီး ဝနျးရံခဲ့ကွတယျလေ။ ဖားအံမှာလညျး သူ့ခှငျအလိုကျဝနျးရံ ကွတယျ။”ဟု နနျးလှယဉျမေ က ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။ မဲဆှယျကာလဖွဈသညျ့ စကျတငျဘာ ၈ ရကျမှ အောကျတိုဘာ ၂၃ ရကျနေ့ အထိ ကရငျပွညျနယျအတှငျး KNDP နှငျ့ NLD ပါတီ ထောကျခံသူမြားက မွို့နယျအလိုကျ ကား၊ ဆိုငျကယျမြားဖွငျ့ စီတနျးလှညျ့လညျ ဝနျးရံခွငျး၊ စညျးရုံးဟောပွောခွငျးမြားကို ပိုမိုပွုလုပျနကွေသညျ။ http://kicnews.org/2020/10/%e1% 80%80%e1%80%9b%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%bb%e1%
အအေနေဲ့ဆကျစပျတယျဆိုပွီး ဖမျးဆီးခံထားရတဲ့ ရဲတပျသား ၁ ဦးကို ရဲတရားရုံးက ထောငျဒဏျ ၃ နှဈခမြှတျပွီး အကွမျး ဖကျ ဥပဒတှေနေဲ့ ထပျမံအမှုဖှငျ့ထားတာ ၁ လကြျောအကွာမှ သိရတယျလို့ မိသားစုက ပွောပါတယျ။ ရခိုငျပွညျနယျ ကြောကျဖွူမွို့နယျ စနဲမွို့ရဲစခနျးမှာ တာဝနျထမျးဆောငျနတေဲ့ ရဲတပျသား ရဲကိုနိုငျဆိုသူဟာ အအေနေဲ့ ဆကျစပျတယျ ဆိုပွီး ဇူလှိုငျ ၂၈ ရကျနကေ့ ဖမျးဆီးထိနျးသိမျးခံခဲ့ရပွီး စကျတငျဘာ ၉ ရကျနမှေ့ာ ရဲတရားရုံးကနပွေီး ထောငျဒဏျ ၃ နှဈ ခမြှတျလိုကျတာပါ။
အခုလို ထောငျဒဏျအမိနျ့ခမြှတျတာကို မိသားစုဝငျတှအေား ပွောဆိုဆကျသှယျမှုမရှိခဲ့ဘဲ အောကျတာဘာ ၁၈ ရကျနကေ့မှ သိရပွီး အကွမျးဖကျမှုတိုကျဖကျြရေးဥပဒနေဲ့လညျး ထပျမံအမှုဖှငျ့ခံထားရတယျလို့ အဈမဖွဈသူ မခငျမီမီအောငျက ပွောပါ တယျ။“ကမြရဲ့ မောငျလေးကို စကျတငျဘာ ၉ ရကျနကေ့ ရဲတရားရုံးက ထောငျဒဏျ ၃ နှဈခလြိုကျတယျဆိုပွီး အောကျတို ဘာ ၁၈ ရကျနညေ့မှာ အကဉျြးထောငျဝနျထမျး ၁ ဦးက ဆကျသှယျပွောဆိုလာလို့ မိသားစုတှေ သိခှငျ့ရတယျ၊ ဘာပုဒျမ တှနေဲ့ အမိနျ့ခတြယျဆိုတာလညျး အတိအကမြသိရဘူး၊ အမိနျ့ခတြာတောငျ တဈလကြျောကွာပွီးမှ သိရတယျ၊ ကမြ မောငျလေး အတှကျ လိုကျပါဆောငျရှကျပေးနတေဲ့ ရှနေ့လေညျး မသိလိုကျဘူး။ ကမြတို့ ဖုနျးဆကျပွောတော့ သူက လိုကျလံစုံစမျးမှ ထောငျခလြိုကျတာ ဟုတျတယျဆိုပွီး ပွနျပွောတယျ။ ကမြမောငျကို အရပျဘကျတရားရုံးမှာလညျး အကွမျး ဖကျ ဥပဒတှေနေဲ့ ထပျပွီး အမှုဖှငျ့လှဈထားတယျ။ အခုလို အမိနျ့ခမြယျဆိုရငျလညျး မိသားစုကိုတော့ အကွောငျးကွားသငျ့ တာပေါ့။ အခုက သူမြားပွောမှသိရတာဆိုတော့ ကမြတို့ကတော့ ပှငျ့လငျးမွငျသာမှု ရှိစခေငျြတာပေါ့။”
ရဲတပျသား ရဲကိုနိုငျဟာ ရဲစညျးကမျးထိနျးရေးဥပဒကေို ခြိုးဖောကျတာကွောငျ့ ရဲတရားရုံးကနပွေီးတော့ ထောငျဒဏျ ၃ နှဈ ခမြှတျလိုကျတာလို့ ကြောကျဖွူမွို့မရဲစခနျးမှူး ဒုရဲမှူးကြျောဇောက ပွောပါတယျ။ “ရဲကိုနိုငျကို ရဲစညျးကမျးထိနျးသိမျးရေးနဲ့ ရဲတပျဖှဲ့က ထုတျပယျပွီးတော့ ရဲတရားရုံးကနေ ပွဈဒဏျခလြိုကျတာ၊ ၃ နှဈ ခလြိုကျတာပါ၊ နယျဘကျတရားရုံး မဟုတျဘူး၊ စဈဆေးပျေါပေါကျလို့ပေါ့။”ကြောကျဖွူမွို့နယျမှာ ၂၀၂၀ မလေနောကျပိုငျးကစပွီး အအေနေဲ့ဆကျစပျတယျဆိုပွီး သံသယ နဲ့ ဖမျးဆီးခံရသူ ၅၀ လောကျရှိပွီး တခြို့ကို ပွနျလညျလှတျပေးခဲ့ကာ အမှုဖှငျ့လှဈ တရားစှဲဆိုခံနရေသူက ၃၀ ဝနျးကငျြ လောကျရှိတယျလို့ သိရပါတယျ။ http://burmese.dvb.no/archives/419090
ရှမျးပွညျနယျ၊ မိုငျးဆတျမွို့နယျမှာ ငှကေပျြ သနျးပေါငျး ၂ သောငျးခှဲကြျော တနျဖိုးရှိတဲ့ မူးယဈဆေးတှနေဲ့ သယျဆောငျသူ တဈယောကျကို ဖမျးမိခဲ့တယျလို့ အစိုးရပွနျကွားရေး သတငျးမှာ ဖျောပွပါတယျ။ အောကျတိုဘာ ၂၅ ရကျ မနကျ ၁၀ နာရီ လောကျက မူးယဈဆေးဝါး တားဆီးနှိမျနငျးရေး ရဲတပျဖှဲ့ဝငျတှပေါတဲ့ ပူးပေါငျးအဖှဲ့ဟာ သတငျးအရ မိုငျးဆတျမွို့နယျ မိုငျးတှမျး-မိုငျးဆတျသှား ကားလမျး ပါခါးရှာနားမှာ မိုငျးတှမျးကနေ မိုငျးဆတျဘကျကို အားဖြျော(ခ)အားဖွိုး၊ ဆိုသူ မောငျးနှငျ လာတဲ့ ဆိုငျကယျကို ရပျတနျ့ရှာဖှရောမှာ စိတျကွှရူးသှပျဆေးပွား ၂၀၀၀ သိမျးဆညျးရမိခဲ့ပါတယျ။
ကှငျးဆကျဖျောထုတျခကျြအရ မနကျ ၁၁ နာရီခှဲလောကျမှာ မိုငျးဆတျမွို့နယျ မိုငျးတှမျးအုပျစု နမျ့ခမျး(၁)အောကျရှာက လျောခြာနဲ့ လျောဖာတို့ရဲ့ နအေိမျကို ရှာဖှရောမှာ သူတို့ကိုမတှဘေဲ့ အိမျထဲကနေ အိုကျဈ ၁၂၄ ကီလို၊ ကဖငျး ကီလို ၆၅၀၊ စိတျကွှရူးသှပျဆေးပွား ရိုကျနှိပျရာမှာ သုံးတဲ့ သံမို WY စာတနျး ပါ ၁၁ ခြောငျးနဲ့ စာတနျးမပါ ၁၁ ခြောငျးတို့ကို သိမျးဆညျး ရမိခဲ့ပါတယျ။ လျောဖာဟာ တာခြီလိတျမွို့မှာ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ မေ ၇ ရကျက စိတျကွှရူးသှပျဆေးပွား ၃ သိနျး ဖမျးဆီးရမိခဲ့တဲ့ အမှုက ကှငျးဆကျတရားခံပွေးဖွဈတယျလို့လညျး ဆိုပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဖမျးမိထားတဲ့ အသကျ ၁၉ နှဈအရှယျ အားဖြျော(ခ) အားဖွိုး၊ တိမျးရှောငျသူ အသကျ ၂၈ နှဈအရှယျ လျောဖာ၊ အသကျ ၃၀ အရှယျ လျောခြာတို့ကို မူးယဈဆေးဝါးနဲ့ စိတျကို ပွောငျးလဲစသေော ဆေးဝါးမြားဆိုငျရာ ဥပဒအေရ အမှုဖှငျ့အရေးယူထားတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
အောကျတိုဘာ ၂၄ ရကျက ထားဝယျမွို့ ထိနျသဈရပျကှကျမှာ ဆိုငျကယျတစီးကို ရပျတနျ့စဈဆေးရငျး WY စိတျကွှ ရူးသှပျဆေးပွား ၄၀၀ ရှာဖှတှေရှေိ့သိမျးဆညျးရမိပွီး သူ့အိမျကိုသှားရောကျရှာဖှရော WY စိတျကွှရူးသှပျဆေးပွား ၁၆၁၂ ပွား ထပျပွီး ဖမျးဆီးရမိပါတယျ။ http://burmese. dvb.no/archives/419281
သဈတောဦးစီးဌာနက ခငျြးပွညျနယျရှိ တောငျဇလပျပနျး ဖွူ၊ နီ၊ ဝါနှငျ့ သဈခှပနျးမြားကို သဘာဝအပငျမြား စာရငျးတှငျ ထညျ့သှငျးလိုကျခွငျးကွောငျ့ ထိုအပငျမြားကို ထုတျယူဖကျြဆီးသူမြားအား အရေးယူတော့မညျဟု နတျမတောငျ အမြိုးသား ဥယြာဉျ အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးစိနျထှနျးက ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။ ဦးစိနျထှနျးက “အရေးယူနပေါတယျ။ အရငျက ပညာပေး ဟောပွောတာတှလေောကျပဲလုပျတာ အခုတော့ ပုံစံပွောငျးပွီး ပညာပေးတဲ့သဘောမြိုးတှေ လုပျနတေယျ။ ကွပျကွပျ မတျမတျ ပွနျလုပျတဲ့သဘောပေါ့။ တနှဈလောကျရှိပွီ လုပျနတော။ အပငျလိုကျခုတျသှားတာမြိုးတှေ မဖွဈအောငျလညျး အစီအစဉျတှေ အခုလုပျနပေါတယျ” ဟု ပွောသညျ။
သယံဇာတနှငျ့ သဘာဝ ပတျဝနျးကငျြ ထိနျးသိမျးရေးဝနျကွီး ဌာန၊ သဈတော ဦးစီးဌာနသညျ ဇီဝမြိုးစုံမြိုးကှဲနှငျ့ သဘာဝထိနျး သိမျးရေးနယျမွမြေား ထိနျးသိမျးစောငျ့ရှောကျခွငျးဆိုငျရာ ပုဒျမ ၁၉(ဂ)အရ မြိုးဆကျပွတျသုနျးမညျ့ အန်တရာယျရှိသော ကာ ကှယျထားသညျ့ သဘာဝအပငျမြားကို ၂၀၂၀ ခုနဈ၊ စကျတငျဘာလ ၁၁ ရကျက ထုတျပွနျကွညောလိုကျခွငျးဖွဈသညျ။ အဆိုပါ သဘာဝအပငျစာရငျးတှငျ ခငျြးပွညျနယျရှိ တောငျဇလပျ (ဖွူ၊ နီ၊ ဝါ)၊ တောငျဇလပျနှငျးဆီ၊ မွနျမာဂငျြ ဆငျး၊ သဈခှ နကျ၊ ခငျြးသဈခှနီ၊ ဘုံမ်မရာဇာ၊ တောငျလုံးကြျော/ ဆာခြီ၊ မွပေုဇှနျကှေးတို့ ပါဝငျသညျ။ အဆိုပါ အပငျမြိုးစိတျမြားကို မြိုးတုနျး မညျ့အန်တရာယျမှ ကာကှယျရနျအတှကျ သဘာဝအပငျစာရငျးတှငျ သတျမှတျပွဋ်ဌာနျးခွငျး ဖွဈကွောငျး ဦးစိနျထှနျးက ဆိုသညျ။
ထိုကာကှယျထားသညျ့ သဘာဝအပငျတမြိုးမြိုးကို သတျမှတျထားသညျ့ နရောဒသေအတှငျး ခှငျ့ပွုခကျြ မရှိဘဲ ထုတျယူ၊ စုဆောငျး၊ ဖကျြဆီးပါက ထိုသူကို ဇီဝမြိုးစုံ၊ မြိုးကှဲနှငျ့ သဘာဝထိနျးသိမျးနယျမွမြေား ကာကှယျစောငျ့ ရှောကျခွငျးဆိုငျရာ ဥပဒပေုဒျမ ၄၀ (ခ) အရ အရေးယူနိုငျသညျ။ ထို့ပွငျ သဘာဝအပငျစာရငျး သတျမှတျရာတှငျလညျး လုံးဝအကာအကှယျထား သညျ့ အပငျမြိုးစိတျနှငျ့ နရောဒသေအလိုကျ ကာကှယျထားသညျ့ အပငျမြိုးစိတျဟူ၍လညျး ကှဲပွားသှားသလို ပွဈမှုပွဈဒဏျ မြားလညျး ကှာခွားသှားသညျ။ လုံးဝကာကှယျရမညျ့ အပငျမြိုးစိတျမြားတှငျ တောငျဇလပျဝါ၊ တောငျဇလပျနှငျးဆီနှငျ့ ခငျြး သဈခှနီတို့သညျ မွနျမာတပွညျလုံးအနကျ ခငျြးပွညျနယျတခုတှငျသာရှိသညျ့ ရှားပါးအပငျမြိုးစိတျမြားဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/26/232336.html
ရခိုငျပွညျနယျ၊ ဘူးသီးတောငျမွို့နယျ၊ ပွငျရှညျ(မှတျဆလငျ)ကြေးရှာမှ ကလေးငယျနှဈဦးသဆေုံးမှုနှငျ့ ပတျသကျ၍ စုံစမျး စဈဆေးမှုမြား လုပျဆောငျနကွေောငျး ဗိုလျခြုပျဇျောမငျးထှနျးက အောကျတိုဘာလ ၂၄ ရကျနတှေ့ငျ နပွေညျတျော၌ပွု လုပျသညျ့ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲတှငျ ပွောကွားခဲ့သညျ။ တပျမတျောအနဖွေငျ့ ကလေးငယျနှဈဦး သဆေုံးမှုဖွဈပှားသညျ့ အခြိနျမှစ၍ စုံစမျးစဈဆေးမှုကို စတငျလုပျ ဆောငျလကျြရှိကွောငျး တပျမတျောသတငျးမှနျပွနျကွားရေးအဖှဲ့မှ ဗိုလျခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးက ပွောသညျ။“ဒီဟာနဲ့ပတျသကျလို့ ခြို့ယှငျးခကျြ အားနညျးခကျြရှိရငျ သိနိုငျအောငျလို့ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ စုံစမျးစဈဆေးမှု တှကေို အဲဒီကစပွီး လုပျနပေါတယျ။ ဒါနဲ့ပတျသကျပွီး စုံစမျးစဈဆေးမှု လုပျနတေယျဆိုတာကို ကြှနျတျောတို့ ထုတျပွနျပွီးသားလညျး ဖွဈပါတယျ”ဟု ၎င်းငျးက ဆိုသညျ။
အောကျတိုဘာလ(၅)ရကျနေ့ ညနပေိုငျးက ဘူးသီးတောငျမွို့နယျ ပွငျရှညျ(မှတျဆလငျ)ကြေးရှာအနီး တပျမတျောနှငျ့ ရက်ခိုငျ့တပျတျော(AA)တို့ တိုကျပှဲဖွဈပှားခဲ့ပွီး တပျမတျောစဈကွောငျးက ချေါဆောငျသှားသော မှတျဆလငျ ရှာသားမြား အနကျ ကညျြထိမှနျထားသော ကလေးငယျနှဈဦး၏ ရုပျအလောငျးကို အောကျတိုဘာလ (၆)ရကျနေ့ နံနကျပိုငျးတှငျ ပွနျလညျတှရှေိ့ခဲ့ကွောငျး ဒသေခံမြားက ထုတျဖျောပွောဆိုထားသညျ။ ဘူးသီးတောငျမွို့နယျအတှငျး တပျမတျောနှငျ့ ရက်ခိုငျ့တပျတျော (AA)တို့အကွား တိုကျပှဲအတှငျး ကလေးငယျ နှဈဦး သဆေုံးမှုဖွဈပှားခဲ့ခွငျးနှငျ့ပတျသကျပွီး ယငျးကိစ်စရပျ ကို စုံစမျးစဈဆေးမှုမြား လငျြမွနျစှာလုပျဆောငျရနျ အောကျတိုဘာ ၁၄ ရကျနကေ့ ကုလသမဂ်ဂဦးဆောငျသော နိုငျငံအဆငျ့ စောငျ့ကွညျ့ရေးနှငျ့ အစီရငျခံရေးအထူးတာဝနျအဖှဲ့( CTFMR ) က တိုကျတှနျးထားသညျ။
ရခိုငျ့လူ့အခှငျ့အရေး ကာကှယျမွှငျ့တငျသူမြားအဖှဲ့မှ ဒါရိုကျတာ ဦးမွတျထှနျး က “ကလေးတှေ သဆေုံးမှုနဲ့ပတျသကျလို့ အစိုးရနဲ့ တပျမတျောမှာ တာဝနျရှိတယျ။ ရခိုငျမှာ ကလေးတှမေသသေငျ့ဘဲ သနေရေတယျ။ ပွီးခဲ့ ရကျပိုငျးအတှငျးကလညျး မွောကျဦးမှာအမွောကျကညျြကလြို့ ကလေးငယျတဈဦး ပှဲခငျြးပွီး သဆေုံးခဲ့ရတယျ။ ဒါပမေယျ့ တပျမတျောကတော့ ငွငျးဆို ခငျြတိုငျး ငွငျးဆိုနတေယျ။ ဒါတှကေ မကောငျးဘူး။ တာဝနျခံမှု တာဝနျယူမှု မရှိဘူး”ဟု ပွောသညျ။ https://www.bnion line.net/mm/news-76513
ဖရူမွို့နယျ အနောကျဘကျခွမျး ဘီယာကြေးရှာမှာရှိတဲ့ နှဈစဉျပြှမျးမြှကြောငျးသား/ သူ ပေါငျး ၄၀၀ နီးပါးရှိပွီး စာသငျခနျး ၃ ခနျးသာရှိတဲ့အတှကျ စာသငျတဲ့အခြိနျမှာ အခကျအခဲဖွဈတယျလို့ ဘီယာကြေးရှာ ဆယျအိမျမှူး ဦးဂြိုဝါးနီ ကပွောပါတယျ။ ဘီယာကြေးရှာက မူလှနျကြောငျးဖွဈပမေယျ့ သတ်တမတနျးအထိ ဖှငျ့ထားတဲ့အတှကျ စာသငျခနျးတဈခနျးကို ၃ ခနျးဖှဲ့ပွီး သငျ ခဲ့ရတယျလိျု့ ပွောပါတယျ။“ အဲ့တာကို ဖွဈနိုငျရငျ နိုငျငံတျောကို နောကျထပျတဈလုံး ထပျပေးစခေငျြတယျ ဘာဖွဈလို့လဲဆို တော့ မူလှနျကြောငျးဆိုတာ သတ်တမတနျးအထိတော့ဖှငျ့နပေါတယျ အခနျးက သုံးခနျးတညျးဆိုတော့ ကနြျောတို့ တဈခနျးကို သုံးခနျးပွနျခှဲတော့ တအားကဉျြးတယျ။ ရုံးခနျးတဈခနျးရယျ၊ ခုနှဈတနျးတဈခနျးရယျ၊ ခွောကျတနျးတဈခနျးရယျ ကနြျောတို့ တှဲပွီးတော့ အဲ့တဈခနျးတညျးကို သုံးခနျးကနြျောတို့ပွနျလုပျနရေတဲ့ ဘဝရောကျနတေယျ။”ဦးဂြိုဝါးနီ ကပွောပါတယျ။
ဦးသဲရယျ ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဖရူဆိုမွို့နယျ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ (၁) ကလညျး ဘီယာကြေးရှာတှငျ ကြောငျး ဆောငျသဈတဈဆောငျ တိုးခြဲ့တညျဆောကျပေးရနျရှိမရှိ အောကျတိုဘာလ ၁၅ ရကျနကေ့ လှတျတျောထဲ ကွယျပှငျ့မပွ မေးခှနျးမေးမွနျးခဲ့ပမေယျ့ ခုခြိနျထိ အကွောငျးမပွနျသေးဘူးလို့ သိရပါတယျ။“ ဘီယာကြေးရှာပေါနော အဲ့ရှာက လူဦးရေ အိမျခွလေညျးမြားတယျ နောကျပွီးတော့ ကြောငျးဆောငျကလညျး တဈဆောငျပဲရှိတယျလို့ကွားတယျပေါ့နျော။ အဲ့တာ ကြေးရှာလူငယျတှကေပွောပွတယျပေါ့ သူတို့အနနေဲ့ကတော့ လမျးပနျးဆကျသှယျရေးနဲ့ စာသငျကြောငျးကို တညျဆောကျ စခေငျြတယျပေါ့။” သူကဆကျပွောပါတယျ။ ဟိုယာကြေးရှာရှိ ဒသေခံမြားသညျ တောငျယာလုပျငနျးအပွငျ အခွားသော စီးပှားရေး လုပျငနျး မလုပျကိုငျတဲ့အတှကျ ဝငျငှနေညျးပါးတယျလို့ သိရပါတယျ။
ဖရူဆိုမွို့နယျအတှငျးမှာဆို ကြောငျးမလုံလောကျတဲ့ရှာတှကေတော့ ကိုယျထူကိုယျထကြောငျး လောပလြားလဲရှာ ၊ အလယျ တနျးကြောငျးခှဲ ခါးဘယျရှာ ၊ အ.မ.က စောပလိခိုရှာ ၊ မူ/လှနျ ဘီယာရှာ၊ မူ/လှနျ ထိုခှီဆိုရှာ ၊ အ.မ.က ခေါလရှော၊ မူလှနျ ဖာဝယျရှာ၊ မူ/လှနျ ထခေိုရှာ၊ အ.မ.က ကသေဲဒိုး ၊ အ.မ.က ထီးသောတနေးကူးရှာ၊ အ.မ.က ဒေါကူလဲရှာ၊ အ.မ.ကခှဲ ဆောလယျရှာ၊ အ.မ.ကခှဲ ရိုစပရားရှာဟောငျး ၊ အ.မ.က သိုသီးဖိုရှာ ၊ မူ/လှနျ ပလဲလယျရှာ၊ အ.မ.က ဒိုးပရယျရှာ၊ အ.မ.က ဒိုးမူခေါရှာ၊ အ.မ.က ပလိုဒေးခိုရှာ၊ အ.မ.က ယိုပရားရှာ၊ အ.မ.က လောဂြာရှာ၊ အ.မ.က လောကခြေူရှာ၊ အ.မ.က ဒေါလောခူရှာ စတဲ့မူလတနျးကြောငျးတျောတျောမြားမြား ကြောငျးဆောငျတှလေိုအပျနပေါသေးတယျလို့ ဖရူဆိုမွို့ ပညာ ရေးမှူး ရုံးကနတေဆငျ့သိရပါတယျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-76538